shwezinu: January 2013
ပတ္တမြားခင် ၏ အတိတ်လမ်း ကိုပြန်လျှောက်ခြင်း, အပိုင်း (၃၇)
အခက်အခဲဆိုတာမျိုးက ဘယ်အရပ်၊ ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေ ကြုံကြရမှာချည်းပါပဲ။ အခက်အခဲဆိုတာ အချိန် တန်ရင်လည်း ပြီးသွားစမြဲမို့ ရှေ့ကိုချက်ချင်းလက်လင်းခြေတစ် လှမ်းမတိုးနိုင်သေးတဲ့ တိုင်အောင် တစ်လက်မ ချင်း တိုးလို့ရလည်း တိုးရမှာပဲ ဆိုတဲ့ဇွဲနဲ့ ကျွန်မရဲ့ရှေ့လာမဲ့ဘ၀ အခြေချနိုင် ဖို့ ပြင်ဆင် ရပြီဆိုပါတော့လေ။ ကို ဆက်ဖတ်ရန် ...
စိတ်ကူးအိပ်မက်ဆိုတာ လေထဲမှာ တိုက်အိမ်ဆောက်ခြင်းပါပဲ။ Blue Printနဲ့ မြေကြီးပေါ်မှာ အုတ်မြစ်ချနိုင် ဖို့ကျတော့ စိတ်ကူးယဉ်ရုံနဲ့မရဘဲ တကယ်ကိုယ်ထိလက်ရောက်လှုပ်ရှားမှုပြမှပဲ အကောင်အထည် ရုပ်လုံး ပေါ်လာ မှာပေါ့နော်။ ဒါကြောင့် ပညာရှင် GOETHEက ကိုယ့်ရဲ့ ရည်မှန်း ချက်အောင်မြင်ဖို့အတွက် စတင် လှုပ်ရှားဖြစ်ဖို့က အဓိကအရေးကြီးဆုံး ကဏ္ဍတစ်ခုပါတဲ့။ စိတ် ကူးကနေ ကိုယ်တွေ့စတင် လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် ကမ္ဘာရဲ့ဖြစ်ရပ်အထွေထွေပြောင်းလဲ ရသလိုပဲ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အပြောင်းအလဲတစ်ခုအတွက် ကျွန်မစတင် လှုပ်ရှားကြည့်ရပေမယ်ပေါ့။
ဒါကြောင့်ရောက်ရှိနေတဲ့ နေရာအစိမ်းတစ်ခုအကြောင်း သိရအောင် လေ့လာကြည့်မယ်လို့ စိတ်ကူးမိပါတယ်။ ကိုယ်အခြေချမဲ့ အရပ်ဒေသရဲ့ လမ်းတွေလည်း သိထားဦးမှ၊ အရာရာကို သူတစ် ပါးအားကိုးနဲ့ချည်း နေဖို့ အဖြစ်သေး ဘူးလေ။ ခြေတစ်လှမ်းမတိုးနိုင်သေးရင်တောင်တစ်လက်မ လောက်တိုးလို့ရလည်း တိုးကြည့်ရမှာပဲ ဆိုတဲ့ခံယူချက် နဲ့ တစ်ည်နေ သမီးယမင်းအလုပ်က ပြန်လာတော့ "မာမီ့ကို သမီးရဲ့ကား ခဏငှားကွာ"လို့ သွားပြော ရပါတယ်။
ယမင်း မှာ ကျောင်းလည်းတက်ရင်း၊ အလုပ်အချိန်ပိုင်း လုပ်ရင်းသွားရေးလာရေးအတွက် လိုအပ်တာမို့ သူ့ဝင်ငွေလေး နဲ့ သူ့ဟာသူ စုဆောင်းပြီး ၀ယ်ထားတဲ့ တိုယိုတာ Mark II ဆိုတဲ့ ကားလေးတစ်စီး ရှိပါတယ်။ အမေရိကား မှာက ကားဆိုတာ ဇိမ်ခံပစ္စည်းအဖြစ်ထက် ကိုယ့်ခြေထောက်ကဲ့သို့ အားကိုးရာမရှိမဖြစ် လိုအပ်ပစ္စည်း တစ်ခုလို ဖြစ်နေတာပါ။ တစ်နေရာတစ်နေရာက အဝေးကြီးရယ်၊ လမ်းလျှောက် သွားလို့ရ တဲ့ နေရာတွေ မဟုတ်ဘူးလေ။
မြို့တော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ နယူးယောက်တို့၊ ၀ါရှင်တန်တို့၊ လော့စ်အိမ်ဂျလိစ္စတိုက၊ စန်ဖရန် စစ္စကိုတို့၊ မာယာမီ၊ ရှိကာကို စတဲ့နေရာတွေမှာက ပြည်သူလူထုသုံး ခရီးဆက်သွယ်ရေး တွေကအလွန်ကို လွယ်ကူတာပါ။ Metroခေါ်တဲ့ မြေအောက်မြေပေါ် တစ်မိနစ်တစ်ခါ လောက်ထွက်နေတဲ့ မီးရထား စီးမလား၊ ဘတ်စ်ကား စီးမလား၊ တက္ကစီခေါ်ချင်ရင်လည်း လမ်းပေါ်မှာ မွစိကြဲပြေးနေတဲ့ ကားကိုလက်တားခေါ်စီးလိုက်ရုံပါပဲ။ သားတို့နေ တဲ့ သန္တာ စမ်းကမြို့သစ်တည်ထားတာ သိပ်ကြာသေးတာ မဟုတ်ဘူး။ မြို့သစ်မို့လို့ စနစ်တကျနဲ့ ဆေးရုံကောင်း၊ ကျောင်းကောင်းတွေရှိတာ မှန်ပါရဲ့။ ဒါကြောင့်လည်း သားကဖလော်ရီဒါ ကိုအလုပ်ပြောင်း ရလို့ နေဖို့မြို့ရွေးတဲ့အခါမှာ ကလေးတွေအတွက် အဓိက အရေးကြီး ဆုံး ဖြစ်တဲ့ကျောင်းကောင်းကောင်း ရှိတဲ့နေရာနဲ့ ဆေး၇ုံကောင်းရှိတဲ့နေရာကို ရွေးခဲ့တာပါ။
ဒါပေမဲ့ မာယာမီလို မြို့ကြီးမဟုတ်လို့ အများပြည်သူသုံး ခရီးလမ်းဆက်သွယ်ရေးက မပြည့်စုံပါဘူး။ လူလတ်တန်းစား လူငယ်လူရွယ်တွေ နေတဲ့နေရာ ဆိုတော့လည်း ကိုယ် ပိုင်ကားအားကိုးနဲ့ သွားလာတာ များတာကြောင့် ပြည်သူသုံးဘတ်စ်ကားကို အားကိုးမပြု ကြတာလည်းပါတယ် ထင်ပါရဲ့။ ဘတ်စ်ကားက နာရီဝက်မှ တစ်စီးလာတာမို့ ကိုယ်ပိုင်ကား မရှိတဲ့သူမျိုးလောက်အတွက်ပဲ အသုံးချစရာဖြစ်နေပါတော့တယ်။ ဒီတော့ အားမထား လောက်တဲ့ဘတ်စ်ကားကို စဉ်းစားတဲ့အထဲ မထည့်တော့ဘဲ ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ သွား လာနိုင် ရေးအတွက်လမ်းတွေ သိဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဆင်ခြင်ပြီး ပြင်ဆင်မိတာပါ။
ယမင်းအလုပ် က ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ဆိုတော့လည်း နေ၀င်မိုးချုပ်ဖြစ်နေပြီပေါ့။ ကျွန်မ နဲ့ဘယ်သူ အဖော်လိုက်ကြမလဲ မေးလိုက်တာနဲ့ အပျော်လိုက်ပြီး ကားစီးကြမဲ့အဖွဲ့က မနည်းမနော်။ သမီးထွေးသူဇာ၊ သားငယ်အိန္ဒာနဲ့ မေးသုံးယောက် အပါအ၀င်ဆိုတော့ တစ်အုပ်ကြီးဖြစ်ပါလေရော။ ကားထွက်တာနဲ့ ဆူညံလို့ ကလေးတွေ တစ်ယောက်တစ် ပေါက်ပြောကြရယ်ကြ၊ ပွဲကိုစည်လိုက။ ကျွန်မလည်းခပ်တည်တည်နဲ့ အမေရိကားမြေပေါ် မှာပထမဦးဆုံးစပြီးမောင်းရတာမို့ နည်းနည်းတော့ရင်အဖိုချင်သား...။
"အံမယ်...ဘာဖြစ်သေးလဲ။ မြန်မာပြည်က လမ်းလည်း လမ်းပဲ၊ အမေရိကားလမ်းကရော ဘာနဲ့ခင်း ထားတာမှတ်လို့၊ ကတ္တရားလမ်းချင်းအတူတူ ဘာမှုရမှာလဲ"နဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အားပေးပြီးမောင်းလေတယ်ပေါ့။ သန္တာစမ်း က မြို့လယ်လမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့ Sampleလမ်း ပေါ်မှာတည့်တည့်ကြီး မောင်းသွားရင်း လမ်းဘေး ၀ဲယာက အမှတ်အသားတွေကိုလည်း ဂရုထားကြည့်ပြီး မှတ်ထားရပါသေးတယ်။ သိပ်မကြာဘူး၊ ကျွန်မကား နဲ့နောက်မှာ ရဲကား ကမီးတဖျပ်ဖျပ်လင်းပြီး ပါလာတာကို နောက်ကြည့်မှန်ထဲမှာ မြင်မိသားပဲ။ ရုပ်ရှင်တွေထဲ မှာ ဒါမျိုး မြင်ဖူးထားတာမို့ "သြော်...ဒါရဲကားကိုး"လို့ သဘောပေါက်မိပါရ့။ အဲလို မီးတ ဖျပ်ဖျပ် နဲ့အချက်ပြနေတာဟာ ကျွန်မနဲ့သက်ဆိုင်ပြီး ရပ်ပေးရမယ်ဆိုတာကို နားမလည် တော့ရပ်ရကောင်းမှန်းမသိဘဲ ဆက်ပြီးမောင်းမြဲမောင်းနေ လိုက်တာပေါ့။
ခဏကြာတော့ ရဲကားက ကျွန်မရှေ့ကန့်လန့်ဝင်ထိုးလိုက်ပြီး လက်ပြရပ်ခိုင်းပါတယ်။ ဒီတော့မှ ဘာကိစ္စပါလိမ့် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ကျွန်မကားကိုရပ်လိုက်ရပါတယ်။ ရဲအရာရှိက ကားထဲက ဆင်းလာပြီး ကျွန်မဘေးကို လာရပ်ရင်း...
"ခင်ဗျား ကို ကားရပ်ဖို့အချက်ပြနေတာ ဘာဖြစ်လို့ မရပ်တာလဲ"နဲ့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပဲ မေးပါတယ်။
"ဟင်... ဟုတ်လား၊ မီးတွေလက်နေတာတော့ ကျွန်မမြင်သားပဲ၊ အဲဒါရပ်ရမယ်လို့မှ မသိ ဘဲ၊ ဒါကြောင့် ဆက်ပြီး မောင်းနေမိတာ၊ Sorryပဲရှင်"လို့ ပြောတော့...
ဘယ်ကရောက်နေ တဲ့ တောသူမကို လာတွေ့နေရလဲဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ခပ်ပြုံးပြုံးကိုဖြစ်လို့..
"ကျေးဇူးပြုပြီး ခင်ဗျား ရဲ့ ကားမောင်းလိုင်စင်ကို ကြည့်ပါရစေ"တဲ့။
"ရပါတယ်၊ ဒီမှာ"လို့ ကျွန်မလည်း ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက ထုတ်ပြီးပြလိုက် တာပေါ့။ မြန်မာ ပြည်က ထွက်မလာခင် ကတည်းက အမေရိကားရောက်ရင် ကားမောင်းနိုင်ဖို့ International လိုင်စင်ကို တစ်ခါတည်း အပါယူ လာပြီးသားပါ။ လိုင်စင်ကိုကြည့်ပြီး...
"ခင်ဗျား ဒီကို လာလည်တာလား"တဲ့။
"မဟုတ် ပါဘူး၊ ကျွန်မငါးနှစ်လောက်နေမယ် စိတ်ကူးပြီး လာခဲ့တာပါ"
"ဒါဆိုရင် ဒီလိုင်စင် နဲ့ မောင်းလို့မရဘူး၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်လိုင်စင်ကို သွားယူပါ၊ အခု လည်းခင်ဗျားမြို့ထဲမှာ Beam Lightကြီး နဲ့ မောင်းနေတာ၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က အချက်ပြရပ်ခိုင်းတာ၊ မြို့ထဲမှာ Beam Lightနဲ့ မောင်းခွင့် မရှိပါဘူး"တဲ့။
"သြော်...ဟုတ်လား၊ ကျွန်မမသိလို့ Sorryပဲ"လို့ ဒုတိယမ္ပီ ဆောရီးလည်း ပြောပြီးရာ..
"ရပါတယ်" တဲ့။ သူ့ကားဆီ ပြန်သွားလေရဲ့။
သူက Beam Lightနဲ့ မမောင်းရဘူးဆိုတော့ အဲဒီ Beam Lightကိုပြောင်းဖို့ ခလုတ်ရှာ ကြည့်တော့ ရှာမရဘူး၊ ကိုယ်မောင်းနေ ကျကားလည်း မဟုတ်တော့ ဘယ်ပစ္စည်းက ဘယ် နေရာဆိုတဲ့ ကားအထာကိုလည်း မသိ ဘူးပေါ့။ ဟိုနှိပ်ဒီနှိပ် လျှောက်နှိပ်ကြည့်ပြီး ရှာမရ တော့လည်းရဲအရာရှိကို လှမ်းကြည့်မိပါတယ်။ သူကလည်း ကားထဲရောက်ပြီး လို့ ဘီး တောင်လိမ့်စပြုနေပါပြီ။ မတတ်နိုင်ဘူး။ သူ့ကိုပဲ ဟွန်းနှစ်ချက်လောက် ဆက်တီးပြီး ခေါ် လိုက် ရတာပဲ။ ကျွန်မရဲ့ဟွန်းသံကို ကြားတော့ ထွက်နေဆဲကားကို ရပ်ပြီး ဆင်းလာပါ တယ်။
Now! What! ဆိုတဲ့ပုံစံ မျက်နှာပေးနဲ့လေ။
"ဒီမှာ ရှင့်ကို ဒုက္ခပေးရတာ Sorry ပဲနော်၊ Beam Lightကိုပြောင်းဖို့ ခလုတ်ရှာမရလို့ ကျွန်မကိုပြစမ်း ပါဦး"ဆိုတော့...
"ဒါ ခင်ဗျားရဲ့ကား မဟုတ်ဘူးလား"တဲ့။
"မဟုတ်ဘူး၊ ကျွန်မသမီးရဲ့ကားကို ငှားလာတာ၊ လမ်းတွေသိအောင် လေ့လာချင်လို့"
ဒီတော့ သူကကျွန်မကိုကြည့်ပြီး ရယ်ရင်း"ကဲ...ဒီမှာ ကျေးဇူးပြုပြီး ခင်ဗျားကို တိုက်တွန်း ပါရစေ၊ ဒီနေရာကနေ အိမ်ကိုပြန်ရင်ကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်၊ ခင်ဗျားနေရာကိုလည်း မကျွမ်းဘူး၊ ကားအကြောင်းကိုလည်း ဘာတစ်ခု မှ မသိဘူး၊ အမေရိကားက ယာဉ်မောင်း ဥပဒေတွေကိုလည်း မသိဘူး၊ နောက်ပြီးခင်ဗျားကားနဲ့အပြည့် ကလေးတွေ လည်း ပါလာသေးတယ်၊ အန္တရာယ်များလွန်းပါတယ်ခင်ဗျာ၊ ဖလော်ရီဒါ လိုင်စင်သွားဖြေပြီးမှပဲ ကားမောင်း ဖို့ အကြံပြုပါရစေ။ ကျွန်တော်ပြောတာကို လက်ခံပါ"ဆိုပြီး ကျွန်မကို Beam Lightပြောင်းရမယ့် ခလုတ်ပြပေး ရင်း Good Luckလို့ နှုတ်ဆက်သွားလရဲ့။
ကျွန်မအဖြစ်ကလည်း ကြည့်ပါဦး၊ ရဲအရာရှိကို သုံးခါလောက် "ဆောရီး"လိုက်ရပြီးမှ ဘယ် ခရီးမှမပေါက် ဘဲ ပြန်ရောက်လာခဲ့ရတာမို့ စိတ်ထဲမှာမချင့်မရဲဖြစ်မိပါတယ်။ "အေးလေ၊ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ၊ ကိုယ် လိုချင်တာ ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရသလို အချိန်အခါကိုလည်း စောင့်ရ တတ်တာပဲမဟုတ်လားနော်" ဒီလိုပဲတွေးပြီး စိတ်ကိုဖြေလိုက် ရတယ်ပေါ့။ ရဲအရာရှိပြောသ လိုဖလော်ရီဒါလိုင်စင် ရယူဖို့ အတွက် ချွေးမဘော်ဘီ ကို မေးကြည့်တော့ ပထမဦးဆုံး ရေး ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေရမှာတဲ့။ အဲဒီအတွက် ဖလော်ရီဒါ ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်ရုံးက ပြဋ္ဌာန်းထား တဲ့ လမ်းညွှန်စာအုပ်ကလေးကို လေ့လာဖို့ယူလာပေးပါတယ်။
စာအုပ်ကလေး ကို ဖတ်ကြည့်တော့ ယာဉ်မောင်းစည်းကမ်း ဥပဒေတွေနဲ့အတူ လမ်းမှာပြ ထားတဲ့ Road Signတွေ ကိုလည်း အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာ မို့ သေသေချာချာ နားလည် အောင်မှတ်သား ရပါတယ်။ ရေးဖြေ အောင်ပြီဆိုကာမှ နောက်တစ်ဆင့် ရဲအရာရှိကိုဘေး ထိုင်ခုံမှာ ထားပြီး လက်တွေ့မောင်းပြ ရပါဦးမယ်။ အဲဒီနှစ်ခုစလုံး စစ်ဆေးတာအောင်မှ လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာတဲ့လေ။
လိုင်စင်မဖြေခင် မှာလည်း ပြဿနာတစ်ခုက ရှိပါသေးတယ်။
ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်မှာ ကျွမ်းဝင်ပြီး မောင်းလာခဲ့တဲ့ ကားတွေက Shiftဂီယာတွေနဲ့ မဟုတ်လားနော်။ ဒီက အမေရိကန်လုပ် ကားတော်တော်များမျာက Automatic ဂီယာတွေနဲ့မို့ အဲဒီကားမျိုး ကို မောင်းတတ်ဖို့ ချွေးမဘော်ဘီကိုပဲ သင်ပြလေ့ကျင့်ခိုင်းရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ Automatic ဂီယာကို ကျွမ်းဝင် ကျင်လည် သွားတော့မှ ဘော်ဘီက လိုင်စင်ရုံးကို လိုက်ပို့ပေးတယ်ပေါ့။
ရေးဖြေမှာက ကားမောင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေမေးခွန်းနှစ်ဆယ်နဲ့ လမ်းညွှန်စည်းကမ်း ဆိုင်းဘုတ် ငါးခု အပါအ၀င်မေးခွန်း နှစ်ဆယ့် ငါးခု ရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲက တစ်ဆယ့်ငါးခု မှန်အောင်ဖြေနိုင်ရင် စားမေးပွဲအောင် တာပါပဲ။ ရေးဖြေဆိုပေမဲ့ Yes, Noဆိုတာ ကွက်လပ် ဖြေရတဲ့ Multiple Choice ဆိုတော့ မခဲယဉ်းလှဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ မေးခွန်းတွေ က လွယ်မ ယောင်နဲ့ အနီးစပ်လှည့်ကွက်ကလေးတွေ မျက်စိလည်အောင် ထည့်ပေးထားတာ မို့ ယာဉ်မောင်းစည်းကမ်း ဥပဒေကိုတကယ်နားမလည်ရင်တော့ အောင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ တချို့တွေ တစ်ခါ မက သုံးလေးခါ ဖြေရတဲ့သူတွေတောင် ရှိတယ်တဲ့။ ဘယ်နှခါသွားဖြေ ဖြေဖြေလို့ရပါတယ်။ တစ်ခါဖြေ ရင် ဟိုအချိန်တုန်းကတော့ သုံးဒေါ်လာ ပေးရတာမို့ မများ လှပါဘူး။
အများအားဖြင့်တော့ ရေးဖြေကို တစ်ခါတည်းအောင်တတ်ကြပြီး လက်တွေ့မောင်းပြရတဲ့ အခါကျမှ စားမေးပွဲအကျများကြတာတဲ့။ ကိုယ်ဘေးမှာ ရဲအရာရှိကထိုင်ပြီး သူလမ်းညွှန်တဲ့ အတိုင်းကိုယ်က လိုက်ပြီးမောင်းပြ ရတာလေ။ ဘယ်ချိုး ညာချိုးဆိုရင်လည်း မီးအချက်ပြ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါမှ။ နောက်ပြီး ဒီမှာက ကားလမ်းတွေ က အကျယ်ကြီးတွေရယ်။ မီးအချက် ပြခလုတ်ကိုနှိပ်ပါမှ။ နောက်ပြီး ဒီမှာက ကားလမ်းတွေက အကျယ်ကြီးတွေ ရယ်။ အသွား သုံးလိုင်း၊ အပြန်သုံးလိုင်း ခြောက်လိုင်းရှိတာက ခပ်များများ။ တချို့နေရာတွေမှာ တစ်ဖက် လေးလိုင်း စီတာင်ရှိသေးတာမို့ လိုင်းကူးမယ်ဆိုရင်လည်း မီးအချက်ပြထားဖို့ မမေ့ပါဦးမှ ဖြစ်တာ။
ယာဉ်ထိန်းမီးမရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ Stop Sign ဆိုတဲ့ "ရပ်ပါ"ဆိုင်းဘုတ်တွေကလည်း မြန်မာပြည်က ကွမ်းယာဆိုင်တွေထက် မျာသေးတယ်။ အဲဒီမှာ ဘရိတ်ကလေး တို့ရုံတို့ ပြီးလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ တကယ့် ကို လေးဘီးစလုံး Complete Stopလုံးဝရပ်ရတာ၊ စိတ်ထဲကနေ တစ်က တစ်ဆယ်အထိ ရွတ်ပြီးမှ ထွက်ရမှာ တဲ့။ ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြ မီးနီး မီးစိမ်းတွေကလည်း မြန်မာပြည်မှာလို နိမ့်နိမ့်လေးမဟုတ်ဘဲ တာဝတိံသာမှာ တက်ချိန် ထားတာမျိုးဆိုတော့ အဲဒါကိုလည်း သတိထားကြည့်ရပါသေးတယ်။ ကျွန်မ တို့ မြန်မာ ပြည်မှာ မီးဝါ ကိုဖြတ်ခွင့်မပြုပေမဲ့ ဒီမှာဖြတ်ခွင့်ရှိပါတယ်။
အမေရိကားမှာ ကားမောင်းရင် ခါးပတ်ပတ်ကြရတယ်။ ခါးပတ်မတ်ရင် ဒဏ်ငွေ ဆောင်ရ တာမို့လူတိုင်း ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့ ခါးပတ်ပတ်ဖြစ်ဖို့လည်း သတိထားရပါသေးတယ်။ တစ်ခါက မြန်မာမိတ်ဆွေ တစ်ဦးက သူ့ အတွေ့အကြုံကို ပြောပြလို့ ရယ်ရပါရဲ့။ မြန်မာ ပြည်မှာ ခါးပတ်ပတ်မောင်းလေ့မရှိတာ သူလည်း မသိဘူးပေါ့။ ကားလိုင်စင်သွးဖြေတော့ ဘေးကရဲအရာရှိက ခါးပတ်ပတ်ခိုင်းတော့ ခါးပတ်ကို ဘယ်မှာချိတ်ရမလဲ စဉ်းစား ရတာ၊ ခလုတ်နေရာ ရှာမတွေ့လို့ ပခုံးကနေရင်မှာသိုင်းပြီး ခါးဘေးမှာချိတ်ရမဲ့အစား အနီးဆုံး လည်ပင်း မှာ သွားပတ်လိုက်တာ တစ်ချီတည်း စာမေးပွဲကျရောတဲ့။ ကျွန်တော်လည်း ကံကောင်းလို့ ကြိုးဆွဲချပြီး သား မသာမဖြစ်တာ တဲ့လေ။
ပြည်ပက လာသူတွေအဖို့ ကိုယ့်နဲ့မယဉ်ပါးတဲ့ ကိစ္စတွေက အများသားမဟုတ်လားနော်။ တစ်ခါက တက္ကစီကို က လာတဲ့သူတစ်ယောက် မီးပွိုင့်က မျဉ်းကြားမှာ ကားတွေလာတုန်း အတင်းဖြတ်ပြေး တာ တွေ့တော့ရဲကဖမ်းပြီး "ဟောဟိုမှာ Don't Walk ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ် ပြထားတယ်၊ မမြင်ဘူးလား၊ ခင်ဗျားဘာဖြစ် လို့ ဖြတ်ရတာလဲ"လို့ မေးတဲ့အခါ...
"ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်၊ Don't Walkလမ်းမလျှောက်နဲ့ ဆိုထားတာမို့ လမ်းမ လျှောက် ဘဲ ပြေးဖြတ်တာပါ"လို့ ပြန်ရှင်းပြတယ်တဲ့။ သူ့ခမျာ အပြေးကောင်းလို့သာ ကားအောက်ရောက်ပြီး ပွဲချင်းမပြီး ရှာတာ။ အဲဒီလိုနားလည်မှု လွဲမှားတာမျိုးက ရှိပါသေး တယ်။
ကျွန်မအနေ နဲ့ လမ်းပေါ်မှာမောင်းပြရတာက ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာက တည်းကကျင့်သားရနေပြီးသားပဲဟာ။ ဒီမှာဒီကားတွေက များပြားလွန်းပြီး ရေစီးသလို အဆက်မပြတ်သွားနေတဲ့ ယာဉ်ကြောထဲမှာ မောင်းရမှာ မ၀ံ့မရဲဖြစ်စရာကြီးလို့ အစက ထင်ထားမိတာပါ။ လက်တွေ့မောင်းကြည့်တော့ ကားတွေများပေမဲ့ သူ့လမ်းနဲ့သူ ယာဉ် စည်းကမ်းအတိုင်းလိုက်နာပြီး မန္တလေးမြို့  မှာ မောင်းထား ဖူးရင်တော့ တော်ရုံအနေအ ထားလောက်များ အားငယ်စိတ်ဝင်စရာမရှိပါဘူး။ မန္တလေးမှာက လမ်းကကျဉ်း ရတဲ့အထဲ မြင်းလှည်း ကိုရှောင်ရ၊ စက်ဘီးတွေ၊ ဆိုက်ကားတွေ ရှောင်ရတဲ့အပြင် လမ်းမပေါ် တက် အိပ်နေ တဲ့ ခွေးလေခွေးလွင့်တွေကအစ ရှောင်ရတာမျိုးပါ။
ဒီမှာတော့ သူ့လမ်းနဲ့သူ၊ စက်ဘီးသမားကလည်း စက်ဘီးလမ်းပေးမှာ စီးရတာ။ ကားလမ်းပေါ် တက်စီးရင် ကားတွေကရေစီး သလို ဆက်တိုက်လာနေကြတာမို့ ပွဲချင်းပြီး သေနိုင်သလို မသေလို့ရဲနဲတိုးရင်လည်း ဖမ်းပြီး ဒဏ်ငွေဆောင်ရ၊ ရုံးတတ်ရ ပြဿနာများ တာမို့စက်ဘီးသမားကလည်း စည်းကမ်းကိုရိုသေလိုက်နာပြီး သူ့လမ်းပေး မှာပဲ သူနေတာ ပါ။ခွေးလေခွေးလင့်ဆိုတာလည်း လုံးဝမရှိပါဘူး။ ခွေးမွေါ်ရင် မှတ်ပုံတင် ရပါတယ်။ ခွေးရဲ့ လည်ပင်းကော်လာမှာ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ ခွေးရှင်ရဲ့အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်က အစ အကုန်ပြည့်စုံအောင်ရေးပြီး ချိတ်ထားရတာပါ။ ခွေးကိုအိမ်ပြင်ထုတ် လမ်းလျှောက်ရင် လည်းခွေးရှင် ပါရုံမကသေးဘူး။ ကြိုးချည်ထားရတာမို့ ခွေးလေခွေးလွင့်လည်း ရှောင်ရှားစ ရာမလိုဘူးပေါ့။
ယာဉ်မောင်းစည်းကမ်းကို လိုက်နာပြီးမောင်းလို့ကတော့ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲပါတယ်။ အခန့် မသင့်လို့တစ်ဖက်မှာ စည်းကမ်းမရိုသေသူမျိုးနဲ့ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျပြီး တိုးမိရင်တော့ လည်းကြမ္မာဆိုးရဲ့ဒဏ်ကိုခံရမှာပါပဲ။ ကံကောင်းထောက်မနေ သမျှ ကိုယ့်ဘက်ကလည်း စည်းကမ်းရိုသေ လိုက်နာနေသမျှမှာတော့ မိုင် ၆၀၊ ၇၀ပေးထား တဲ့ အဝေးပြေးလမ်းပေါ်မှာ ကားပေါင်းရာထောင်ချီ မောင်းနေလို့လည်း အန္တရာယ်ကင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မြို့ထဲ မှာ မောင်းပြရတာအတွက် ရှောရှောရှူရှူဖြစ်သွားပေမဲ့ နောက်ဆုံးထား လုပ်ပြရတဲ့ Parallel parking မျဉ်းပြိုင်ရပ်ပြရတာကျတော့ ဇောချွေးကိုပြန်သွားတော့တာပါ ပဲ။ ကျွန်မကကားမောင်းလိုင်စင်ကို စနစ်တကျမောင်းပြပြီး ရလာခဲ့ တာမဟုတ်ဘူး။ အခါသ မယကလည်း ဒုတိယစစ်ကြီးပြီးခါစ အုပ်ချုပ်မှုတွေစခါစ အချိန် ဆိုတော့ သိပ်ပြီးတိတိကျ ကျမရှိသေးဘူးလေ။
ရဲဝန်ထောက် အန်ကယ်ဦးဘခက်ဆီ သွားပြီး "ကိုကြီးက ကားမောင်းသင်ပေးမှာတဲ့ အန် ကယ်၊ အဲဒါ ခင်မကြီးကို ကားမောင်းလိုင်စင် လုပ်ပေးပါဦး"လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ လိုင်စင် တစ်ခါတည်းရလာတာမို့ ကိုကြီး သင်ပေးတဲ့အတိုင်း လမ်းပေးမှာတော့ ဖြောင့်အောင် မောင်းတတ်ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ အခုလိုကားတစ်စီးစာလေး ၀င်သာရုံနေရာလေး မှာ ထောင့်လေး ထောင့်ကတိုင်လေးတိုင် စိုက်ထားပြီး အချိုးကျကျဝင်နိုင်အောင် သွင်းပြဖို့ ကျတော့ ကျွန်မ မှာဇောချွေးတွေပြန်အောင် ဖြစ်ရတော့တာပေါ့။ နှလုံးတုန် ရင်ခုန်၊ ခြေဖျား လက်ဖျားတွေ အေးတဲ့ထိ ထိတ်လန့်ပြီး မနည်းကြိုးစားပမ်းစားနဲ့ ကားကိုတစ်လိမ့်ချင်း သွင်းပါမှအချိုးမ ကျတကျ နဲ့ တိုင်လေးတိုင်ကြားထဲ ၀င်သွားပေတော့တယ်။ အဝေးက ရပ်ကြည့်နေတဲ့ ချွေး မဘော်ဘီက သြဘာပေးတဲ့ အနေနဲ့ သူ့လက်မနဲ့ လက်ညှိုးလေးနဲ့ ၀လုံးပုံ လုပ်ပြီးကျွန်မ ကိုထောင်ပြနေ လို့ နှလုံးတုန်းရင်ခုန်ကြားထဲက ပြုံးရပါသေးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ စာမေးပွဲတော့ အောင်သွားလေရဲ့။ ရေးဖြေစာမေးပွဲအပြီး ကိုယ်တိုင်မောင်းမပြရ ခင်မှာမျက်စိကောင်း၊ မကောင်း လည်း စစ်ဆေးပါသေးတယ်။ ဒီသုံးခုစလုံးကို အောင်ပြီဆို တော့မှကျသင့်ငွေ ဆယ်ဒေါ်လာ သွင်းပြီး ကားလိုင်စင်ကတ်ပြားရဖို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရပါတယ်။ ဓာတ်ပုံမရိုက်ခင်မှာလည်း ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအစုံပါတဲ့ ပုံစံစာရွက် ကိုဖြည့်ရသေးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုရင် ဒီမှာကာင်းမောင်း လိုင်စင်ကတ်ပြား က မြန်မာပြည်မှာကိုင်ရတဲ့ မှတ်ပုံ တင်ကတ်ပြားကဲ့သို့ လိုအပ်ရင်ပြရတဲ့ အဓိကအထောက်အထားအဖြစ် သုံးကြ လို့ပါပဲ။
ဓာတ်ပုံမရိုက် ခင် ဖြည့်ရတဲ့ပုံစံစာရွက်ထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအပြင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ကို လှူ လိုပါက တစ်ခါတည်းပုံစံတစ်ခုပါ ဖြည့်ရသေးတယ်။ အဲဒါပြီးမှ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ခုံမှာ သွားထိုင် လိုက်ရုံပါပဲ။
တာဝန်ကျသူကကင်မရာ ခလုတ်ကလေး တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ကိစ္စိကပြီးရော။ ငါးမိနစ်လောက်ကြာတော့ ကိုယ့် လက်ထဲမှာအနံနှစ်လက်မ၊ အလျားသုံးလက်မပဲ ရှိတဲ့ပလတ်စတစ်လောင်းထားတဲ့ ကားလိုင်စင် ကတ်ပြားလေး အပ်လိုက်တာပါပဲ။ မှတ်ပု့တင်ကတ်ပြားအဖြစ် အထောက်အ ထားစုံအောင်လည်း အဲဒီပိစီကွေး ကတ်ပြားလေး ထဲမှာ အကုန်အစုံပါအောင်ထည့်ထားပြီး သားနော်။ ဖလော်ရီဒါမြေပုံနဲ့ ပြည်နယ်တံဆိပ်၊ ကျွန်မရဲ့ဓာတ်ပုံ၊ အဲဒီဘေးမှာ နာမည်အ ပြည့်အစုံအပြင်နေရပ်လိပ်စာ၊ မွေးနှစ်နဲ့ မွေးလ၊ မွေးတဲ့ရက်၊ အရပ် ဘယ်နှပေ ဘယ်နှ လက်မှ၊ ဘာလူမျိုး လိုင်စင်အမျိုးအစား၊ လိုင်စင်နံပါတ်၊ ထုတ်ပေးတဲ့နေ့၊ ကုန်ဆုံးတဲ့နေ့၊ ကျွန်မ ရဲ့ထိုးမြဲလက်မှတ်နဲ့တကွ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်း လှူထားသူဖြစ်ရင်လည်း Organ Dona r ဆိုတဲ့ စာတန်းလေးတောင် ပါလိုက်သေးတယ်။ ကားလိုင်စင်က မြန်မာပြည်မှာလို နှစ်စဉ်လဲရတာမဟုတ်ဘူး။ ၆နှစ်မှ တစ်ခါပဲ လဲရတာပါ။ အဲဒီလိုင်စင်သက်တမ်းအတွင်းမှာ ဘာဖြစ်မှုမှမရှိခဲ့ရင် စိတ်ချရသူအဖြစ်နဲ့ Safe Driveဆိုတဲ့ စာတန်းလေးတောင် ပါလိုက် သေးရဲ့။
ကားမောင်းလိုင်စင်တို့၊ ကားမှတ်တင်တို့ကျတော့ကိုယ့်မွေးနေ့နဲ့ သတ်မျတ်ထားတာမို့ အထူးပြုပြီး မှတ်သားထား စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ကိုယ့်မွေးနေ့ရောက်ခါနီးကျရင် ကားမှတ်ပုံတင် လဲဖို့ တစ်လ အလိုလောက်မှာ မှတ်ပုံတင်ရုံးကသတိပေးစာလွှာလေး စာတိုက်ကပို့လာပါတယ်။ အဲဒီစာအိတ်ထဲမှာ အကယ်၍ ကိုယ်တိုင်ရုံးကို မသွားလိုရင် လွယ်လွယ်နဲ့ ကိစ္စပြီးဖို့ ပုံစံစာရွက်ကလေးနဲ့အတူ လိပ်စာတပ်ပြီးသား စာအိတ် တစ်ခုပါ ထည့်ပေးလိုက်သေးတာနော်။ အချိန်မကုန်၊ အလုပ်မရှုပ်လိုသူအတွက် အဆင်ပြေတဲ့ နည်းလေး တစ်ခုပါပဲ။ ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံကိုဖြည့်၊ ကျသင့်ငွေကို ချက်လက်မှတ်မှာရေး၊ အဲဒါ တွေနဲ့ အတူ မော်တော်ကားအာမခံထားတဲ့ စာရွက်ကလေးပါအတူ စာအိတ်ထဲပြန့်ထည့် ပို့ပေးလိုက်ရုံနဲက ကိစ္စပြီးပါတယ်။
အချိန်တန်တော့မှတ်ပုံတင်ရုံးက မှတ်ပုံတင်စာရွက်အသစ်နဲ့အတူ ကားရဲ့နောက်က နံပါတ်ပြားပေးမှာ ကပ်ဖို့ တစ်လက်မအရွယ်လောက်ရှိတဲ့ ပလတ်စတစ်ပြားလေး နှစ်ခုကို ပါစာတိုက်ကနေပြန်ပို့ပေးလိုက်တာပါပဲ။ ကတ်ပြားလေးနှစ်ခု မှာ တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့မွေးလ၊ နောက်တစ်ုက လိုင်စင်အသစ်လဲရမယ့်နှစ်၊ အဲဒီ ပလတ်စတစ်ပြားလေးကို ကားရဲ့နောက် ကလိုင်စင်ပလိပ်မှာလိုင်စင်ကုန်ဆုံးမဲ့လက ဘယ်ဘက်ထောင့်မှာကပ်၊ ညာဘက် အထက် ထောင့်မှာတော့ ကုန်ဆုံးမဲ့နှစ်ပါကပ်ပေါ့။ သူလည်းတစ်နှစ် တစ်နှစ်အသွေးအရောင် မတူ အောင်ခွဲ ထားပါသေးတယ်။ ဒီနှစ်အနီဆို၊ နောက်နှစ်ကျတော့အစိမ်းလေး၊ နောက်ကနေ လိုင်စင် ပလိပ်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ လိုင်စင်လဲပြီးသားလား၊ မလဲသေးဘဲရှိနေသေးလားဆိုတာ အဝေးကပင်မြင်နိုင်ပါ၏ ဆိုတဲ့အထဲကမို့ အရောင်နဲ့ခွဲခြားထားတာကောင်ေးသာ စနစ် တစ်ခုပါပဲ။
အမေရိကားမှာ မစွမ်းမသန်သူတွေလည်း ကားမောင်းကြတာပဲ။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဒုက္ခိတ လို့လည်း သဘောမထားဘူး။ လူတန်းမစေ့ဘူးလို့လည်း အားငယ်စိတ်မ၀င်ကြပါဘူး။ သူတစ်ပါးရဲ့ အကူအညီ ကိုရမှာအလွန်ဝင်လေးတတ်ကြတယ်။ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးနိုင်အောင် ကြိုးစားပြီးရပ်တည်ကြပါတယ်။ အဲဒီခြွင်းချက်ရှိသူ များအတွက်အစစအရာရာ လွယ်ကူစေအောင်လည်း ဖန်တီးပေးထားတဲ့ စနစ်ကလေးတွေ ရှိထားတော့အဆင်ပြေလေတယ်ပေါ့။ လူထုသုံး ကားနေရာမှန်သမျှ အ၀င်ဝ နဲ့ အနီးကပ် ဆုံးနေရာမှ ဘီးတပ်လှည်းပုံစံနဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ပြထားတဲ့ ကားရပ်စရာနေရာတွေ လုပ်ပေးထာ ပါတယ်။ မော်တော်ကား လိုင်စင်ပလိပ်မှာလည်း မစွမ်းမသန်သူများအတွက် ဘီးတပ် လှည်းပုံလေးဖော်ပြ ထားတာ မို့ အရေးအကြောင်းဆိုရင် လိုအပ်တဲ့အကူအညီချက်ချင်း ရစေနိုင်တယ် ဆိုပါတော့။
ကျွန်မမှာ ကိုယ်တိုင်ကားမောင်ရတော့မှာမို့ အစစအရာရာသိအောင် လိုက်ပြီးကြည့်၊ လိုက်ပြီးလေ့လာနေ ရဆဲလေ။ ကိုယ်ရောက်ရှိနေတဲ့ နေရာကလည်း လူမျိုးမတူ၊ ဘာသာ မတူ၊ ယဉ်ကျေးမှုမတူ၊ ဘာသာစကားမတူ၊ အလေ့အထ မတူ၊ အရှေ့နဲ့အနောက်ဆိုတဲ့ အတိုင်းမတူကြတာတွေက ခပ်များများမို့ မျက်စိလည်းဖွင့်၊ နားကိုလည်း စွင့်။ နားစွင့်ရတာ တော့ပြောမနေနဲ့။ ကျွန်မတို့ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က အင်္ဂလိပ် လက်အောက် မှာဖြစ်ခဲ့တော့ အစစအရာရာက အင်္ဂလိပ်ပုံစံတွေပဲ လွှမ်းမိုးလာခဲ့တာပါ။ အင်္ဂလိပ်ကျောင်း နေခဲ့ ရတော့ အင်္ဂလိပ်အသံထွက်တွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ရတာ မဟုတ်လားနော်။ ဒီကျမှ အမေရိကန် အသံထွက်တွေ ကို ကြားဖူးရတာ။
သူတို့ အသံထွက်က ကွဲပြားရတဲ့အထဲ စကားပြောရင်လည်းလျှာဖျားနဲ့ မြန်မြန်ပြောလိုက် ပြီဆိုရင် လိုက်မမီတော့ပါဘူး။ မနည်းကိုနားစွင့်ပြီးနားလည်အောင် ကြိုးစားရပါတယ်။ အသံထွက်မကဘူး။ အခေါ်အဝေါ်တွေ ကလည်း ကွဲပြားနေသေးတာပါ။ ကျွန်မတို့က လူတွေ့ရင် "ဟယ်လို"လို့ နှုတ်ဆက်ပေမဲ့ အမေရိကန်နှုတ်ဆက်နည်းက "ဟိုင်း"တဲ့။ အနေကြာတော့ ကျွန်မတို့လည်း သူတို့နည်းတူ "ဟိုင်း" တက်သွားပါပြီ။ ရောက်ခါစမှာ အခေါ်အဝေါ်မတူလို့ ဒုက္ခရောက်ရတာတွေ အများကြီးပါပဲ။ တစ်နေ့မှာ ကိစ္စတစ်ခု ရှိတာ နဲ့ဘဏ်တိုက်ကိုသွားတော့ကျွန်မတွေ့လိုသူက အထပ်ငါးလွှာက ရုံးခန်းမှာတဲ့။ ဒါနဲ့အဲဒီ ငါးလွှာကိုတက် ဖို့ ဓာတ်လှေကားဘယ်နားမှာရှိမှန်း မသိဘူး။
"စုံစမ်းရေး"ဆိုတဲ့ နေရာမှာထိုင်တဲ့မိန်းကလေးကို ကျွန်မက Liftဘယ်မှာရှိလဲလို့ မေးတော့ ဒီမှာ Lift မရှိပါဘူး တဲ့။ ဟင်...ဒီလောက်ဆယ်ထပ်ဆယ့်နှစ်ထပ် မြင့်တဲ့တိုက်ကြီးမှာ အပေါ် တက်စရာဓာတ်လှေကား မရှိဘူးဆိုတာ မဟုတ်နိုင်သေးပါဘူး လို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တွေးပြီး ...
"ကျွန်မ ငါးထပ် က ရုံးခန်းကိုသွားချင်တာ၊ Lift မရှိရင်လှေကားကရော ဘယ်နားမှာလဲ"လို့ ထပ်မေးတော့...
"သြော်... Elevator ရှိတယ်လေ၊ ဒီစင်္ကြံလွန်ပြီး ညာချိုးလိုက်ပါ၊ အဲဒီမှာ"တဲ့။
သေပါရော။ ကျွန်မတို့က ဓာတ်လှေကားကို ဟိုမှာ Liftလို့ တစ်သက်လုံးခေါ်လာခဲ့တာ မဟုတ်လားနော်။ အိမ်သာ ကိုလည်း Toilet လို့ နှုတ်ကျိုးနော ဒီမှာကျတော့ Rest Room တဲ့။ ရုပ်ရှင်ကို Pictureလို့ သွား မပြောလေနဲ့။ သူတို့က Movie လို့ခေါ်တာမို့ နားလည် မှာမဟုတ်ဘူး။ စာပို့လုလင်ကို Postman လို့ခေါ်နေကျ။ ဒီမှာက Mail-man,အာလူးကြော် ကိုFrench Fries, ဆေးထိုးခံရတာကို Injection လို့ကျွန်မ တို့ ပြောသလို သူတို့ကျတော့ Shot တဲ့။ ကလေးတွန်းလှည်းလေးကို Parmလို့မခေါ်ဘဲ Stroller လို့ ခေါ်ပြန်ရော။ ကလေးခုတင် Cotကို Crib, တန်းစီတဲ့ Queue ကိုတော့ ဒီမှာတော့ Line, Holidayကို သူတို့က Vacation, အနာကပ်တဲ့ Plasterကို Band Aid, ဆေးဆိုင်ကျတော့ Drug Store, ချစ်စရာလေး မြင်ရင် ကျွန်မတို့က So Sweetလို့ပြောရင် သူတို့က So Cuteတဲ့။
မော်တော်ကား နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေကလည်း မတူတာ ရှိသေးတယ်။ ဓာတ်ဆီက Petrol မဟုတ်ဘူး။ Gasတဲ့။
ကားရှေ့အဖုံးကို ကျွန်မတို့က ဘောနတ်လို့ ခေါ်တာနော်။ ဒီမှာက Hoodဟုဒ်။ အိတ်ဇောပိုက်ကျတော့ မာဖလာ တဲ့။ လမ်းဘေးက ပလက်ဖောင်းကို Side Walkလို့ခေါ်ပြန်ရော။ ကျွန်မတို့ဆီမှာ ခြေထောက်နဲ့ကန်ပြီး ကစားတဲ့ဘောလုံးပွဲ ကို Football ခေါ်ပေမဲ့ ဒီမှာက Soccer (စော်ကာ)။ အဲ..သူတို့ Football ခေါ်တဲ့ စကားနည်းက ခြေထောက်နဲ့ကန်တာမဟုတ်ဘဲ ဘောလုံးကိုလက်နဲ့ ဖမ်းတဲ့ဟာ။ ဘာဖြစ်လို့ အခေါ်အဝေါ်တွေ ခြေရင်းခေါင်းရင်း လွဲမှားနေသလဲတော့ မသိပါ ဘူး။
ကျွန်မ တို့က Purseလို့ခေါ်တဲ့ လက်ကိုင်အိတ်သေးသေးလေးကို သူတို့က Pocker Book တဲ့။ တစ်ခါက ကျွန်မနဲ့ တာဝန်လွှဲရတဲ့ မန်နေဂျာအမျိုးသမီးက ဖုန်းဆက်လာတယ်။ အံဆွဲထဲမှာ သူ့ရဲ့ Pocket Book ကျန်ခဲ့လား မသိဘူး။ ကြည့်ပေးစမ်းပါတဲ့။ Pocket Book ဆိုတော့ ကျွန်မက အိတ်ဆောင် စာအုပ်သေးသေးလေးမျိုး ထင်ပြီးစာပွဲတစ်ခုလုံး ရှိရှိသမျှ နေရာအကုန်လိုက်ရှာတာ မတွေ့ဘူးပေါ့။
"မတွေ့ပါ ဘူး၊ စာပွဲတစ်ခုလုံးအနှံ့ရှာပြီး အံဆွဲထဲမှာ ပိုက်ဆံအိတ်တစ်လုံးတွေ့လို့တောင် အဲဒီအထဲမှာများ ရှိမလား လို့ဖင့်ကြည့်တာ မတွေ့ပါဘူး"ဆိုတော့..
"အဲဒီပိုက်ဆံအိတ်ကို တို့မေးနေတာပေါ့။ မင်းကဘာတွေ သွားရှာနေတာလေ"
"မင်းပဲ Pocket Book ဆို၊ အဲတော့ စာအုပ်ရှာတာပေါ့၊ ပိုက်ဆံအိတ်ဆိုရင်လည်း Purseလို့ ပြောပါလား"လို့ ကျွန်မကပြန်ပြောတော့ မရွှေချော က ဖုန်းပေါ်မှာ တအားရယ်နေလေရဲ့။
အခေါ်အဝေါ်မတူတာတင် မဟုတ်သေးဘူး။ အသံထွက်မတူတာတွေက ရှိသေးတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီး တိုမားတိုးစ်ကို ဒီမှာ တိုမေးတိုးစ်၊ Fastဖတ်စ်ကို အမေရိကန်အသံထွက်က ဖက်စ်။ Lastလပ်စ်ကိုလက်စ်။ မြန်မာပြည်မှာ တစ်သက်လုံး Nikonနိကွန်လို့ ခေါ်လာခဲ့တဲ့ ကင်မရာက ဒီကျတော့ သူတို့ အတိုင်း "နိုက်ကွန်"လို့ပြေားပြီး ခေါ်လိုခေါ်ရ၊ လမ်လျှောက် ဖိနပ် Nikeကို နိုက်ကီ၊ အင်္ဂလိပ် စာလုံး နောက်ဆုံးအက္ခရာ Z(ဇက်)က ဒီမှာကျတော့ (ဇီ)။
ဒါတင်မဟုတ်သေးဘူး။ စာလုံးပေါင်းတွေ မတူတာလည်းရှိသေးတယ်။ ဘယ်အရာကိုမဆို အလွယ်ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့နေရာမှာ သူတို့လူမျိုးရှေ့ဆုံးကပဲထင်ပါရဲ့။ ဘဏ်တိုက်က ငွေထုတ်တဲ့ချက်လက်မှတ်ကို Cheque လို့ပေါင်းတာနော်။ ဒီမှာတော့ အသံထွက်အတိုင်း Checkရုံနဲ့ ကိစ္စပြီးတယ်။ Colour တို့ Labour တို့၊ Favour တို့လည်း ဒီမှအလွယ် color, Labor, Favor နဲ့ချလိုက်တာပဲ။ အရာရာလွယ်ကူဖို့ အချိန်မကုန်ဖို့လည်း ဦးစားပေးကြ တာ ထင်ပါရဲ့။
ကျွန်မတို့က တစ်ခုခုပြောလို့ Yesကို တွင်တွင်သုံးသလို သူတို့ကSure ကိုသုံးလေ့ရှိတာ သတိထားမိပါတယ်။ ကျွန်မတို့မြန်မာတွေ ဆုံမိကြတဲ့အခါ ရောက်ခါစကြုံရတဲ့ ပုံပြင်တွေ ကိုယ်စီရှိနေကြတာမို့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အတွေ့အကြုံတွေကို ဖလှယ်ကြရင်းရယ်ပွဲ ဖွဲ့ရတာ လည်းဟဒယရွှင်ဆေးတစ်ခုပါပဲ။ မိန်းကလေး ငယ်တစ်ဦးက ရောက်ခါစတုန်းက ကားမ မောင်းနိုင်သေးတာမို့ အိမ်နဲ့နီးတဲ့လမ်းလျှောက်သွားလို့ရတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခု မှာ သွားပြီး အလုပ်လုပ်တာတဲ့။ ကော်ဖီဝယ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးက သူ့ကို Sugar Free လို့ ပြောတော့သကြား အလကားတောင်းတာ ဖြစ်မှာပဲလို့ တွေးပြီးစေတနာဗရပွနဲ့ သကြား ထုပ်တွေ ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေ့ါ။ အမျိုးသမီးက သကြားထုပ်တွေကို ပြန်ထုတ်ပြီး သူ့ ရှေ့ မှာ ဆောင့်အောင့်ပြီး ပြန်ချ သွားလို့တဲ့လေ။ Freeဆိုတာ ဒီမှာကိုယ်အလေးချိန် မပို အောင်ဂရုစိုက်သူများက သကြားကို အထူးပြု ရှောင်တာမို့ သကြားမပါတဲ့ ကော်ဖီကိုဆိုလို တာပါ။
Freeဆိုတာနဲ့ မြန်မာပီပီ သဒ္ဓါတရားတွေ ပိုလိုက်မိတဲ့ အဖြစ်ပါပဲ။
နောက်ပြီး တချို့ကျတော့ စားသောက်ဆိုင်မှာ လာဝယ်ပြီးအပြင်ယူသွားတာမျိုးကလည်း ရှိသေးတယ်လေ။ ထိုင်စားတဲ့ သူတွေလည်း စားကြတယ်ပေါ့။ အပြင်ကိုယူသွားမှာဆိုရင် To Goလို့ပြောပါတယ်။ အဲဒီမိန်းကလေး အလုပ်စပြီး ၀င်တဲ့နေ့မှာပဲ နေ့လယ်စာဝယ်ပြီး အပြင်ယူသွားလို့တဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးက ရောက်လာပြီး To Go လို့ပြောလိုက်တော့ ကလေးမက "ဟောတော့်၊ ငါ့ကို ဘာများထင်လို့လဲ မသိ၊ သူနဲ့လိုက်ဖို့ ခေါ်တာ၊ ဘုရား... ဘုရား... ဘာလုပ်ရပါ့" နဲ့နှလုံးတုန်ရင်ခုန်တွေ ဖြစ်လို့တစ်ချီတည်း နောက်ခန်းဘက် ပြေး ၀င်ပြီးပုန်းနေ လိုက်မိတာတဲ့။ တော်သေးရဲ့။ တခြားအလုပ်သမားတွေက ၀ယ်သူကိုတာဝန် ယူဖြေရှင်းလိုက်ပေလို့ပေါ့။ To Goအဓိပ္ပာယ် ကို နောက်သိရတဲ့အခါကျမှ သူ့အဖြစ်ကို အလုပ်သမားတွေက ၀ိုင်းရယ်ကြတာတဲ့လေ။
အတွေ့အကြုံ က ရေးမကုန်နိုင်အောင် များပြားလှပါရဲ့။ ကိုယ့်မြန်မာပြည်မှာတောင် တစ် ကျောင်းတစ်ဂါထာ၊ တစ်ရွာတစ်ပုဒ်ဆန်း ဆိုတဲ့ စကားရှိသေးတာပဲ။ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေ ရာဒေသအလိုက် အခေါ်အဝေါ် အသုံးအနှုန်းတွေက ကွဲပြားခြားနားတတ်တာပါပဲနော်။
ဒါကြောင့်ရောက်ခါစမှာ ပြဿနာတွေက တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုးဆိုပါတော့။ ရောက်ပြီးသုံးလေး ရက်အမောဖြေပြီးတာနဲ့ ပါလာတဲ့လူကြုံပါပစ္စည်းတွေကို ပို့ဖို့ စီစဉ်ရပါတယ်။ ခွင့်ပြုတဲ့ ပေါင်ချိန်က တစ်ဦးမှ ၄၄ပေါင်ပဲ ရှိရတဲ့အထဲမှာ လူကြုံပါးလိုသူတွေကလည်း ရှိပါသေး တယ်။ ငြင်းမကောင်းတဲ့သူတွေ ဖြစ်နေလို့ ကိုယ့် ပစ္စည်းတွေပြန်ချ၊ သူ့ပစ္စည်းတွေပါ အောင်ထည့်ပေါ့။ ပေးလိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ကြည့်ပါဦး။ ကြက်သွန်ဖြူ တစ်ပဿာ လောက်ပေးတဲ့သူနဲ့ ငါးပုတ်ခြောက်၊ ငါးရံ့ခြောက်ကအစ နနွင်းမှုန့်နဲ့မဆလာ ဆိုတာ မျိုး အထိအစုံပါပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းအစိတ်လောက်တုန်းက အမေရိကားနဲ့ မြန်မာပြည်ကလည်း ဆက် သွယ်မှု နည်းပါးသေးတာ မို့ ကျွန်မကိုယ်တိုင် အဲလိုပဲ မြန်မာ့အစားအသောက် ကုန်ပစ္စည်း တွေဒီမှာဝယ်လို့ရလိမ့်မယ် မထင်မိတာကြောင့် ဟင်းချက်စရာ ပစ္စည်းမျိုးစုံ အလေးခံပြီး သယ်လာမိတာပါ။ လူကြုံပေးကြသူတွေလည်း ကျွန်မလို အလားတူတွေးထင် မိလို့သာ သူတို့လည်း တကူးတကထည့်ပေးကြတာ ဖြစ်မှာပါပဲ။ ကျွန်မတို့တင် ဒါမျိုး တွေးထင်ခဲ့တာ မဟုတ်သေးဘူး။ စာရေးဆရာသော်တာဆွေ က "ဟေး...ခင်တို့တစ်တွေ အမေရိကားမှာ ထမင်းစား ရရဲ့လား၊ နေ့တိုင်းပေါင်မုန့်ပဲ စားနေရသလား"နဲ့ ကျွန်မဆီပူပူပင်ပင်နဲ့ စာရေး မေးဖူးပါတယ်။
ဒီမှာအရှေ့တိုင်း စားသောက်ကုန်တွေ ရောင်းတဲ့တရုတ်ဆိုင်တွေမှ ဟိန်းလို့ပါ။ Jasmine Rice ဆိုတဲ့ ပေါ်ဆန်းမွှေးဆန်တွေ ဆိုတာ ကောင်းမှကောင်း။ တို့စရာအညာက တမာရွက်၊ ကတက်ချဉ်လိုမျိုးကအစ ငါးပိရည်မွှေးမွှေး အထိ ဖန်ဘူး၊ ဖန်ပုလင်းတွေနဲ့သားသားနားနား ထည့်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကပို့တဲ့ အစားအသောက် အမျိုးမယ်စုံအောင် ဒီမှာလွယ်လွယ်ရနိုင်ပါ တယ်။ ကျွန်မ အလေးခံပြီးသယ်ယူလာခဲ့ရတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ဆိုတာ များ တရုတ်ဆိုင်မှာမ ပြောနဲ့။ အမေရိကန်စူပါမားကတ်တွေမှာတောင် အတွဲလိုက် ချိတ်ဆွဲပြီး ရောင်းနေတာ ပေါမှပေါ။ ကိုယ်ကဒါတွေ မသိတော့လည်း လာပေးသူကို ရှင်းမပြနိုင်ဘဲ ယူလာ ခဲ့ရတာပေါ့ နော်။
အဲဒီကတည်းက ဆောင်းပါးရေးပြီး သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အဖြစ်တွေကို ခွဲဝေခံစားရင်း ဗဟုသုတ မျှဝေပေးချင် တာပါ။ ကိုယ့်ဘ၀အခြေချနိုင်ရေးအတွက် ရုန်းကန်ရဆဲကာလဖြစ် တော့ကလောင်ကို အခိုကအတန့်ဘေးချ ထားခဲ့ရတယ် ဆိုပါတော့။ ရောက်ပြီးစမှာ သယ်လာခဲ့ရတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုလည်း စာတိုက်ကနေတစ်ဆင့် လိပ်စာရှင်တွေ ဆီ ပို့ရပါ သေးတယ်။
ပါဆယ် ထုပ်ပေးမှာ လိပ်စာရေးတော့ မြန်မာပြည်က အထာအတိုင်းလိပ်စာရှင်ရဲ့ နာမည်နဲ့ နေရပ်ကအပေါ်က။ ပို့ပေးသူ ကျွန်မရဲ့လိပ်စာကအောက်က ကျကျကနနရေးထည့်လိုက် ပါတယ်။ လေးငါးရက်ကြာတော့ အဲဒီပါဆယ် ထုပ်တွေကျွန်မအိမ်ဝမှာ အပုံလိုက်ပြန်ရောက် လာလေရဲ့။ ဒီကစာပို့စနစ်က အိမ်တိုင်းရဲ့ အရှေ့မှာကိုယ်ပိုင်စာတိုက်ပုံးလေးတွေရှိကြပါ တယ်။ စာတိုက်ပုံရဲ့ဘေးမှာ အလံလေး တစ်ခုထည့်ထားသေးတယ်။ နေ့စဉ်စာပို့လုလင် ကစာတိုက်ကားနဲ့ ရောက်လာပြီးပုံးတွေထဲမှာ ထည့်သွား လိုက်တာလေ။ သူတို့စာတိုက် သုံးကားတွေက ဂျစ်ကားပုံစံမျိုးအဖြူပေါ်မှာ အပြာလိုင်းနဲ့ တံဆိပ်က သိန်းငှက်နဲ့ခေါင်း တစ်ပိုင်းပုံပါပါတယ်။ အများအားဖြင့် စာပို့လုလင်က ကားပေးကနေပြီး အောက်ဆင်းစရာ တာင်မလိုဘဲ လှမ်းထည့်သွားကြတာပဲ။ ကိုယ့်မှာစာထည့်စရာရှိရင် ကိုယ့်စာတိုက်ပုံထဲမှာပဲ ထည့်ထား လိုက်ပြီး ဘေးကအလံလေးထောင်ထားလိုက်ရပါတယ်။
ကိုယ့်စာကိုယူ၊ သူပေးရမဲ့စာကို ပြန်ထည့်ထားပြီးရင် ဘေးကအလံလေးပြန်ချထားလိုက် တာမို့ စာလာသွားပြီးလားဆိုတာ စာတိုက်ပုံးရဲ့အလံလေးကို လှမ်းကြည့်တာနဲ့သိနိုင် တယ်ပေါ့။ ပါဆယ်ထုပ် ခပ်သေးသေးမျိုး ဆိုရင်လည်းစာတိုက်ပုံထဲမှာ ထည့်ထားခဲ့တာပါပဲ။ ခုလို အများအပြားလည်း ဖြစ်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ပါဆယ်ထုပ်က ကြီးမားတယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်ပေါက်ဝမှာလာချထားခဲ့ပါရော။ ကျွန်မက တစ်နေ့တစ်နေ့ စာတိုက်ပုံကအလံကိုပဲ ကြည့်နေတာလေ။ "ချစ်သူတွေ ဝေးကြတဲ့အခါ စာလေးတွေက အလည် လာကြတယ်တဲ့"
ကျွန်မမှာ မြန်မာပြည်က ကျန်ခဲ့တဲ့ချစ်သူတွေက အများအပြားမို့ အလည်လာမဲ့ စာလေး တွေကို အမောတကာနေ့စဉ်မျှောရတာ ခုချိန်ထိပါပဲ။ အဲဒီနေ့ကလည်း အလံလေးလဲနေ တာတွေ့လို့ စာကောက် ဖို့ အပြေးထွက်လိုက်ခါမှ အပေါက်ဝမှာ တန်းစီနေတဲ့ပါဆယ်တွေ ကိုတွေ့ပြီး တအံ့တသြဖြစ်ရသေးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်မဆီပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတာ လည်းမတွေးတတ်အောင်ပါပဲ။ ဒါနဲ့နောက်တစ်နေ့မှာ သမီးကေသီကို အဖော်ခေါ်ပြီးပါ ဆယ်ထုပ်တွေအားလုံး ကားထဲထည့်၊ စာတိုက်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားရတာပေါ့။ စာတိုက် က၀န်ထမ်းကိုအကျိုးအကြောင်း ပြောပြမေးတော့လည်း သူက ဘာမှပြဿနာရှာမတွေ့ တဲ့ပုံစံနဲ့ "ရှင့်လိပ်စာအတိုင်း ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးလား"တဲ့။
"ဟုတ်တယ်လေ၊ အခုကျွန်မ လိပ်စာအတိုင်းပြန်ရောက်လာတာပဲ။ ကျွန်မပို့တာက နယူး ယောက်၊ ၀ါရှင်တန်၊ အိုဟိုင်းအိုးနဲ့ ကာလီဖိုးနီးယားကို ပို့တာအဲဒီမရောက်ဘဲ ကျွန်မဆီ ပြန်ရောက်လာတာကြောင့် ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတာ လာမေးတာပါ"လို့ ရှင်းပြမှသူလည်း သဘောပေါက်သွားပြီး ပါဆယ်ထုပ် ကို သေသေ ချာချာကြည့်တော့...
"သြော် ...ဒီမှာ ရှင်က ပို့ရမဲ့လိပ်စာကို အောက်မှာမရေးဘဲ ရှင့်လိပ်စာကိုရေးထားတာကိုး၊ ဒါကြောင့်အားလုံး ရှင့်ဆီပြန်ရောက် လာတာဖြစ်မှာပေါ့"ဆိုပြီး ရယ်ပါလေရော။
ဒီက စာတိုက်လိပ်စာရေးတဲ့ ပုံစံက ကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ လိပ်စာကစာအိတ်ရဲ့ဘယ်ဘက်ထိပ် မှာတက်ရေးထားပြီး ပို့ရမဲ့လိပ်စာကျတော့ အောက်ဘက်အလယ်မှာ ရေးကြတာကိုး။ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာက စာအိတ်ရဲ့ ဘယ်ဘက်အောက်က ထောင့်မှာရေးနေကျ မဟုတ်လားနော်။ ဒါကြောင့် သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပုံစံအရအောက် ဘက်မှာရှိတဲ့ လိပ်စာအတိုင်း ကျွန်မဆီပြန်ရောက်လာတယ်ပေါ့။
ဒါက စနစ်မတူတာအတွက် ကြုံတွေ့ရတဲ့ နမူနာလေးတစ်ခုပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ယဉ်ကျေးမှု မတူ၊ ဓလေ့စရိုက်မတူ၊ အလေ့အထမတူတာတွေကြောင့် ရှေ့မှာ ပြဿနာများစွာလည်း ရှိနေဦးမှာပါပဲ။ ကိုယ်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အပြောင်းအလဲတစ်ခုဆိုတော့လည်း ရင်ဆိုင်ရမဲ့ အခက် အခဲပြဿနာတွေကို စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး လက်ခံဖြေရှင်း ရမှာပါ။ သူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာ လတ်တဖျစ် အချိန်ကာလအတွင်း အရာရာ အံဝင် ခွင်ကျ ဖြစ်သွား ဖို့ဆိုတာတော့ ဘယ်ဖြစ် နိုင်ပါ့မလဲလေ။ အရာခပ်သိမ်းကို အချိန်ယူပြီး သည်းခံစိတ် နဲ့ လေ့လာ သင်ကြားမှတ်သား ရမှာပါ။
ပါရှင်ပုံပြင်ထဲက ခါးကုန်းမင်းသားလေးလိုပေါ့။ သူများတကာတွေနဲ့တန်းတူရည်တူ ဖြစ်ချင် လို့သူရဲ့ပုံတူကို ခံ့ခံ့ညားညား မားမားမတ်မတ် ရပ်နေတဲ့ရုပ်ထုအဖြစ်ထုထားစေတယ်တဲ့။ တကယ် လက်တွေ့ကျကျ လည်း နေ့စဉ်အဲဒီရုပ်တုရှေ့မှာ ရပ်ပြီးမားမားမတ်မတ် ရပ်နိုင် အောင်လေ့ကျင့်ခဲ့တာ နေ့ပေါင်းများစွာ၊ လပေါင်း များစွာ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါ ခါး ကုန်းပျောက်ပြီး တကယ်ပဲရုပ်တုကဲ့သို့ မားမားရပ်သွားနိုင်တယ်တဲ့။
စိတ်ရှည်ခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၊ အားထုတ်ခြင်းတွေတော့ လိုအပ်ပေတယ်ပေါ့။ ကျွန်မကလည်း ကိုယ့်ဒေသ မဟုတ်တဲ့ သူတစ်ပါးနိုင်ငံမှာ အများနည်းတူ ပခုံးချင်းယှဉ်ပြီး မားမားရပ်နိုင်ဖို့ အချိန်ယူ ကြိုးစားရဦးမယ်လေ။
Posted by SHWE ZIN U at 8:55 PM0comments Links to this post
ပတ္တမြားခင် ၏ အတိတ်လမ်း ကိုပြန်လျှောက်ခြင်း, အပိုင်း (၃၆)
ဒီခရီးဟာ တစ်ဖက်မှာ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ သားသမီးတွေအတွက် ၀မ်းသာအားတက်စရာ ဖြစ်ပေမဲ့ အဖေ့ လက်မှာ ကျန်ခဲ့ရစ်ရတဲ့ သားလေးအတွက် ၀မ်းနည်းအားငယ်စရာအဖြစ်ပါ ပဲ။ ကျွန်မဘ၀က ဆုပ်ကိုင်ရခြင်း နဲ့ စွန့်လွှတ်ရခြင်းတွေနဲ့မို့ ဆူးနဲ့နှင်းဆီလို အမြဲတမ်း ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ချည်းပါပဲလေ။ကို ဆက်ဖတ်ရန် .......
အပိုင်း ( ၃၈ )
ကိုယ့်ရဲ့ ဇာတိဌာနေ မွေးရပ်မြေဆိုတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုဟာ ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာ ဘာနဲ့မှတိုင်းတာပြီး တန်ဖိုးဖြတ် လို့ မရနိုင်တဲ့ လူသားတိုင်းရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ထာဝရစွဲမြဲကိန်းဝပ် သိမ်းဆည်းထားရာ ထူးမြတ်မွန်မြတ် တဲ့ နေရာလေးတစ်ခုပဲ မဟုတ်လားနော်။
ကျွန်မလည်း လေယာဉ်ပေါ်က ငုံ့ကြည့်လို့မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကို မျက်ရည်တွေကြားထဲက လုံးဝပျောက်ကွယ် သွားတဲ့ထိ တွယ်တာတဲ့ သံယောဇဉ်စိတ်နဲ့ မမှိတ်မသုန်ကြည့်နေမိပါ တယ်။ ရင်ထဲက ခွဲခွာရခြင်းကြောင့် နာကျင်ရတဲ့ ခံစားချက်ကတော့ စာဖွဲ့လို့မရနိုင်အောင် ဆူဝေပေါက်ကွဲနေလေရဲ့။ လမ်းခရီးတစ်လျှောက် ကိုယ်ကဦးဆောင်စောင့်ရှောက်သွားရ မဲ့မိခင်ကြီးနဲ့ လူမမလည်ကလေး နှစ်ယောက်ရဲ့တာဝန်က ရှိနေလို့သာ စိတ်လွတ် လက် လွတ်မဖြစ်ရအောင်မနည်းကြိုးစားပြီး ထိန်းနေရခြင်းပါပဲ။
ထွက်မလာခင် သုံးလေးရက်အလိုမှာ ဟောင်ကောင်မှာ ရောက်နေတဲ့ မောင်ငယ် မောင်မောင်မြင့်က ဖုန်းဆက် လာပါတယ်။ သူဘန်ကောက်မှာ လာစောင့်နေမယ်။ သုံးလေး ရက်ခဏ၀င်နားလိုက်ပါ။ အမေရိကားက ခရီးဝေး ကွာလွန်းတော့ နောက်ပြန်ပြီးတွေ့ကြဖို့ လွယ်ကူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောရှာပါရဲ့။ သူမြန်မာပြည်က ထွက်သွားခဲ့ တာ ဆယ်နှစ်ရှိပြီ ဆိုတော့ကျွန်မလည်း ကိုယ့်မောင်ကို အလွန်အမင်းတွေ့ချင်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ မာမီ့မှာ နှလုံး ရောဂါရှိနေတာကြောင့် နာရီပေါင်းသုံးဆယ်နီးပါး ကြာရှည်အောင်စီးရမဲ့ လောယာဉ်ခရီး အတွက်အဆင်း မှချောပါ့မလားလို့ သောကနဲ့ စိတ်မောနေမိတာကြောင့်။
"မ၀င်တော့ပါဘူး မောင်မောင်ရယ်၊ မာမီ့အခြေအနေကို စိတ်မချလို့ပါ"လို့ တောင်းပန် လိုက်ရပါ တယ်။ ပြန်တွေ့ကြ ဖို့ မလွယ်ဘူးဆိုတာ သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်မဒုက္ခ ရောက်ခဲ့စဉ်ကာလက အရာရာ ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့မောင်ငယ် ကို အသက် ရှင်လျက်ပြန်တွေ့ခွင့်မကြုံတော့ပါဘူး။ ကျွန်မအမေရိကား ကို ရောက်ပြီးရှစ်နှစ် အကြာမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။ သူကွယ်လွန်ကြောင်း တယ်လီဖုန်း သတင်း ရတော့ ကျွန်မဘန် ကောက်မှာသုံးလေးရက် ၀င်ပြီးမတွေ့ဖြစ်ခဲ့တာကို နောင်တကြီးစွာရပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ် ရ တယ်။ ခုတော့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကို နှလုံးသားနဲ့ အသိအမှတ်ပြုပြီး နေ့စဉ် အမျှ ပေးဝေ ရင်း စိတ်ကိုဖြေရတော့တာပါပါပဲ။
ကျွန်မတို့ လာခဲ့တဲ့ ခရီးအစီအစဉ်အရ မြန်မာ့လေကြောင်းကုမ္ပဏီ ယူဘီအေနဲ့ ဘန် ကောက်ကိုရောက်တာနဲ့ ဘန်ကောက် မှာ လေးနာရီကြာနားပြီး Swiss Airလေယာဉ်ကို ပြောင်းပြီးစီးရမှာပါ။ ပြည်ပကို တစ်ခါမှ ထွက်ဖူးခဲ့တာမဟုတ်တော့ အတွေ့အကြုံမရှိတာ ကြောင့်စိတ်ကလည်း မ၀ံ့မရဲနဲ့ ဘန်ကောက်လေဆိပ်ကြီး ကလည်း ကြီးမားပါဘိ။ ရန်ကုန် ကိုတက်လာကြတဲ့ တောကဘုရားဖူးကမှ ဦးဆောင်လမ်းပြမဲ့ ဘုန်းကြီး တစ်ပါးပါးတော့ ပါလိုက်သေးတယ်။ ကျွန်မတို့မှာ ဦးဆောင်လမ်းပြမဲ့သူလည်း မရှိ၊ တောကတက်လာတဲ့ ဘုရားဖူး ပုံစံ အူလည်လည်နဲ့ ဟိုကြည့် ဒီကြည့်၊ ဘယ်သွားပြီး ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ အကဲ ခတ်ပြီးလေ့လာနေ ရပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့သားငယ် အိန္ဒာကတော့ ကလေးပီပီ သွက်သွက်လက်လက် ချက်ချက် ချာချာ နေရာအနှံ့လျှောက် ကြည့်ပြီးနေပြီး "မာမီ ဟိုဘက် စင်္ကြံထိပ်မှာ အိမ်သာရှိတယ်၊ မာမီတို့ သွားချင်ရင် ပစ္စည်းတွေ သားစောင့်ပေးမယ်" တဲ့။ ဒီကောင်က ငယ်ပေမဲ့အားကိုးရပါတယ်။ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှာတုန်းက အကောက်ခွန်ဌာန က ပါလာသမျှပစ္စည်းတွေကို တစ်ခုမကျန် မှောက်လှန်ပြီး ရှာတုန်းက ကျွန်မအမေက စိတ်မှန်သူ မဟုတ်လို့ ထည့်လာတဲ့သူ့ပစ္စည်း တွေဖရိုဖရဲဖြစ်ကုန်ရင် လူပုံအလယ်မှာ ဆူဆူပူပူပြဿနာ တက်မှာကြောက်ပြိး ကျွန်မက မာမီရဲ့စိတ်အာရုံကို တစ်ဖက်မှာရအောင် ပြောင်းပြင်းရှာ်နေတာတွေ မတွေ့မမြင်ေ စဖို့ အကြောင်းရှာကာကွယ်နေရတဲ့အချိန် သားငယ်အိန္ဒာက အကောက်အခွန်အရာရှိများ ကျေ နပ်တဲ့ အထိ သေတ္တာတွေဖွင့်ပြပြီး စနစ်တကျ ပြန်သိမ်း၊ ပိတ်ပေးနဲ့ တာဝန်ယူပေးလို့ ထွက်ခါနီးမှာ မာမီနဲ့ပြဿနာ ကင်းသွားတာပါ။
ငယ်ငယ်ကတည်းက ချက်ချက်ချာချာရှိလို့ ကျောင်းနေခါစက သူ့ရှေ့မှာပဲ သူ့အတင်းကို အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် နားမလည်ဘူး အထင်နဲ့ "He is too smart". လို့ပြောမိတော့ "No, Mommy I'am one smart"လို့ ချက်ချင်းပြန်ပြောတာ နဲ့ ကျွန်မမှာရယ်လိုက်ရတာ။ ကျွန်မဆိုလိုတဲ့ အလွန်အမင်း Too ကို သူကနံပါတ် Two(နှစ်)ဂဏန်း လို့ အဓိပ္ပာယ်ပေါက် လိုက်ပြီးနံပါတ် One(တစ်)က ပိုတော်တယ်လို့ ချေပလိုက်တာလေ။ အခုလည်း ၀မ်းစမတ် လေးကျေးဇူးနဲ့ အိမ်သာတွေ ဘာတွေရှာတွေ့သွားလို့ အပေါ့အပါး သွားလိုက် ရတယ်ပေါ့။ ပြီးခါမှ Swiss Airကောင်းတာလိုက်ရှာ၊ ကောင်တာမှာတန်းဝင်စီ၊ လက်မှတ်ပြ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြ၊ အားလုံးစစ်ဆေးတာစောင့်၊ ထိုင်ခုံနံပါတ်တွေ ဘာတွေရပြီဆိုမှပဲ စိတ်အေးလက်အေး လေယာဉ်ထွက်မဲ့ ဂိတ်ဝမှာ ထိုင်ရင်းစောင့်ကြရပါတယ်။ ဒီကြားထဲ မာမီရဲ့အခြေအနေကိုလည်း အကဲခတ်ရသေးတယ်။ ကျွန်မကသာ စိတ်ပူနေ တာ။ မာမီက သူ့မြေးတွေ၊ မြစ်တွေနဲ့တွေ့ရတော့မှာ ဆိုပြီး စိတ်ဓာတ်တွေ တက်ကြွ လန်းဆန်းလို့လေ။
ကျွန်မရင်ထဲမှာလည်း မာမီ့နည်းတူ ကွဲကွာနေရတဲ့ သားသမီးတွေနဲ့ ပြန်တွေ့ရတော့မှာမို့ စိတ်လှုပ်ရှား မိတာလည်း မှန် ပါရဲ့။ သားကြီးဝင်းဆိုရင်ကျောင်းသားအရွယ် ၁၈နှစ်သားက တည်းကစာသင်ဖို့ ထွက်သွားခဲ့ တာ အခုသူ့အသက် ၃၄နှစ်၊ ကလေးသုံးယောက် ဖခင် တောင်ဖြစ်နေပါပြီ။ မတွေ့ရတဲ့ ၁၆နှစ်ကာလထဲမှာ ဘယ်လောက် များ ပြောင်းလဲသွားပြီလဲ ဆိုတာစိတ်ကူးနဲ့ မှန်းဆကြည့်နေမိပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ လေယာဉ်ထွက်ချိန်မတိုင်မီ တစ်နာရီအလိုမှာ ခရီးသည်တွေကို ခုံနံပါတ်စဉ်နဲ့ ကြေညာပြီး ခေါ်တော့ ကျွန်မတို့ အလှည့်ရောက်တာနဲ့ လေယာဉ်ပေါ် တက်ရတယ်ပေါ့။ ကံကောင်းထောက်မ စွာ လေးယောက် တစ်တန်းတည်း ထိုင်ခုံရလို့ အဆင်ပြေသွားလေရဲ့။ (ဘိုးရင်း 747ဆိုတဲ့ လေယာဉ်အကြီးကြီးကို ဒီတော့မှ စီးဖူးတာပါ) လေယာဉ် က အိမ်ကြီး တစ်လုံးစာလောက် ကြီးမားပြီး ခရီးသည်တွေကလည်း နှစ်ရာကျော်၊ သုံးရာ နီးပါး။ ကျွန်မ အမေကသူ့အတွေ့အကြုံသစ်ကို သဘောတွေကျနေလို့ တော်ပါသေးရဲ့။ လာသာလာရ တာ၊ လမ်းခရိးမှာ ဇီဇာချဲ့ပြီး အိမ်မှာတုန်းကလို ဒီဟာမစားဘူး၊ ဒါမလုပ်ဘူး၊ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး နဲ့ပြဿနာတွေရှာနေရင် တစ်ဒုက္ခ လို့ ရင်ထဲမှာစိုးထိတ်နေခဲ့မိတာတွေ အခုလို မာမီ့မျက် နှာကြည်လင်ပျော်ရွှင်နေတာတွေ့ရမှ စိတ်သက်သာ ရာရပြီး အသက်၀၀ရှဥနိုင်ပါတော့ တယ်။
ဘုံဘေလေဆိပ် မှာ တစ်နာရီနားပြီး လေယာဉ်က ဇူးရစ်မြို့ကို တောက်လျှောက်ပျံသန်း ပါတယ်။ ညအချိန်ရောက်ပြီ မို့ ညစာစားပြီးတာနဲ့ ပြနေတဲ့ရုပ်ရှင်ကို မကြည့်တော့ဘဲ နည်းနည်းအပန်းပြေသွားအောင် တစ်မှေးတော့ကြိုးစားပြီး ရအောင်မှေးဖြစ်ပါရဲ့။ ဇူးရစ်ကို ရောက်တော့မနက်လင်းနေပါပြီ။ ဇူးရစ်လေဆိပ်မှာ ဘန်ကောက်မှာ တုန်းကလို လှေကားနဲ့ အောက်ကိုဆင်းပြီးမှ လေဆိပ်ရှိရာ အဆောက်အအုံကို သွားရမယ် လို့ထင်ထားတာ၊ လေယာဉ်ကမြေပေါ် ဆင်းပြီးတာနဲ့ ကားမောင်းသလို ဘီးနဲ့တစ်လှိမ့်ချင်း လှိမ်းရင်းလေ ဆိပ်အဆောက်အအုံ ရဲ့ အ၀င်ဝအထိ ရောက်သွာေးအာင် ထိုးဆိုက်ပေးတာမို့ ကျွန်မမှာ အထူးအဆန်း ကို ဖြစ်လို့။
လေယာဉ်တံခါးဝက ထွက်လိုက်တော့ လည်း လေဆိပ်ခန်းမ အ၀ ရောက်အောင်အမိုးလုံ ပေါင်းကူး ယာယီစင်္ကြံလေး နဲ့ ဆက်ပေးထားတော့ မိုးလုံလေလုံ လမ်းလျှောက်သွားလိုက်ရုံ နဲ့လေဆိပ် အဆောက်အဆုံထဲ တန်းရောက်သွားတော့ "အံမယ်၊ တယ်ဟုတ်ပါလား" ပေါ့။ တောသားမြို့ရောက်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်နေ တာလေ။ ဇူးရစ်မှာ Transit အနေနဲ့ ခြောက်နာရီ ကြာနားပြီးမှ နယူးယောက်ကို ထွက်မဲ့လေယာဉ် ကို ပြောင်းစီးရမှာပါ။ ဒါကြောင့်လေဆိပ်ထဲ ကဧည့်ဆောင်ခန်းမှာ ထိုင်ပြီး ခြေဆန့်လက်ဆန့် အပန်းဖြေရင်း နားနေကြ တယ်ပေါ့။ လေဆိပ်မှန်ပြတင်းက အပြင်ကိုလှည့်ကြည့်မိတော့ အပြင်မှာစနိုးတွေက တဖွဲဖွဲကျလို့။ ဟိုးအဝေးဆီက တောင်တန်းတွေပေါ်မှာလည်း ဆီးနှင်းဖြူဖြူတွေ ခဲနေတဲ့ ရှုမျှော်ခင်းက လှမှလှ။
စနိုးဆိုတာကို တစ်သက်မှာ ဒါပထမအကြိမ် မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ရဖူးခြင်းပါပဲ။ ကလေး တွေကလည်းစနိုးတွေ ကျနေတာ ကို ကြည့်ရင်းသဘောတွေကျလို့ အော်ဟစ်ဆူညံနေလေ ရဲ့။
"မာမီ အမေရိကားရောက်ရင် စနိုးထဲမှာ ထွက်ဆော့မယ်နော်"နဲ့ မောင်နှမနှစ်ယောက် စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ လာပြောနေကြသေး တယ်။ ကလေးဆိုတော့လည်း ကြုံတွေ့ရမဲ့ နေရေး ထိုင်ရေးတွေ အတွက် တွေးမပူလေ ဘူးပေါ့။ မာမီကလည်း သူ့မြေးတွေပျော်နေတာကို ကြည့်ပြီးကျေနပ်လို့။ နားနေကြတာ သုံးလေးနာရီ ရှိတော့ နေမွန်းတည့်ချိန်ဖြစ်နေပါပြီ။ လေယာဉ်ပေါ်ကကျွေးလို့တဲ့ နံနက်စာ ကလည်း ကြေညက် လို့ ၀မ်းကဟာလာကြပြီလေ။
မကြာပါဘူး။ "မာမီ ဆာတယ်"နဲ့ သမီးနဲ့သားကပါ တဂျီဂျီလုပလာပါရော။
"မာမီရော ဆာပြီလား"လို့ ကျွန်မရဲ့အမေကို မေးတော့လည်း ခေါင်းညိတ်ပြတာနဲ့ ကျွန်မ ဘာလုပ်ရပါ့မလဲ စဉ်းစားရ ပါတော့တယ်။ အတူစီးလာကြတဲ့ ခရီးသည်တချို့ကတော့လေ ဆိပ်ထဲက စားသောက်ဆိုင်မှာ အကျအနထိုင်ပြီး စားသောက်နေကြလေရဲ့။ သူတို့လို ၀ယ်စားဖို့ ကျွန်မလက်ထဲမှာ ရှိတဲ့၂၁ဒေါ်လာနဲ့လောက်၊ မလောက် ကလည်း မသေချာ ဘူး။ ဒီထဲမှာနောက်ဆက်ရမယ့် ခရီးနှစ်တန်က ၇ှိနေသေးတယ် မဟုတ်လားနော်။ နယူး ယောက်ကိုရောက်ပြီးမှ ပြည်တွင်းထွက်မဲ့ လေယာဉ်နဲ့တစ်ခါ ဖလော်ရီဒါမာယာမီလေဆိပ် ကိုသွားရဦးမှာလေ။
ခေါင်းထဲ မှာ အပြေးအလွှားနဲ့ လက်ရှိ ၂၁ဒေါ်လာဘယ်လိုလုံလောက်အောင် သုံးရမလဲ ဆိုတာ ဂဏန်းစက် တွက်သလို တွက်နေမိတယ်။ ကိုယ်မစားဘဲ နေရတာကအကြောင်း မဟုတ်ပေမဲ့ အမေနဲ့သားသမိးတွေ ဆာနေတာကို သိသိကြီးနဲကတော့ ကျွန်မမနေနိုင်ရက် တာနဲ့ အရဲစွန့်ပြီး သူများတကာတွေ ထိုင်စားနေတဲ့ ဆိုင်ထဲ ကိုသွားလိုက်ပါတယ်။ ကောင်တာနောက်မှာ ရပ်နေတဲ့ မိန်းကလေးကို "နေ့လယ်စာ တစ်ယောက်အတွက် မှာရင် ဘယ်လောက်ကျမလဲ"လို့ မေးကြည့်တော့...
"ရှင်တို့ Swissလေယာဉ်နဲ့ ပါလာတဲ့ခရီးသည်တွေ မဟုတ်လား၊ ၀ယ်စားဖို့ မလိုပါဘူး။ လေယာဉ် လတ်မှတ်ကိုပြပြီး ကြိုက်တာမှာစားလို့ ရပါတယ်"တဲ့။ ဒီတော့မှ ကျွန်မရင်ထဲက အပူလုံးကြီး ကျသွားပြီး ကလေးတွေနဲ့ မာမီကိုပြေးသွားခေါ်ကျွေးရပါတယ်။ အခုခေတ် မှာ တော့လေဆိပ်မှာ ဘယ်လောက်ကြာအောင် စောင့်ရစောင့်ရ၊ အလဲလိုလေယာဉ်လက်မှတ် ပြပြီးစားလို့ရတယ်ဆိုတာတွေ မရှိတော့ ပါဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပဲ ဈေးကြီးပေးပြီး ၀ယ်စား ရတာပါ။ ပါလာတဲ့ ၂၁ဒေါ်လာကလေး မထိဘဲ စားလိုက်ရလို့ ကျွန်မ လည်းစိတ်အားရှိ သွားလေရဲ့။
ဒီလိုနဲ့ အချိန်တန်လို့ နယူးယောက်ထွက်မဲ့ လေယာဉ်ပေါ်ကိုတက်ခဲ့ရပြန်ပါရော။ ဇူးရစ်က နေနယူးယောက်ကို ဆယ်နာရီကြာစီးပြီးမှ ရောက်လာပါတယ်။ ပါလာတဲ့ ခရီးသည်တွေ နည်းတူ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကို ဖြတ်၊ ပစ္စည်းတွေ ရွေးပြီးတာနဲ့ အကောက်ခွန်ဌာနကို ဖြတ်၊ အကောက်ခွန်ဌာနက သေတ္တာတွေကို ဖွင့်လို့တောင် မကြည့် ပါဘူး။ ဖြည့်ထားတဲ့ Formစာရွက်လေး ယူထားလိုက်ပြီး ထွက်ခွင့်ပြုတာပါပဲ။ ပျားပန်းခတ်မျှ ရှုပ်ယှတ် ခတ်နေ တဲ့လူတွေကိုကြည့် စိတ်အားငယ်သလို ဖြစ်သွားချိန်မှာပဲ ကျွန်မနာမည် ရေးထားတဲ့ ဆိုင်း ဘုတ်ကြီး လူပ်အုပ်ကြီး အလယ်မှာ ထောင်ပြီးထိုးထွက်နေတာကို မြင်လိုက်မိတော့ ၀မ်းသာ အားတက် သွားတာ ပြောဖွယ်ရာမရှိပါပဲ။
ဆရာဦးသက်ကြီးရဲ့ အကူအညီပေးမှုနဲ့ ခရစ်ယာန်သာသနာပြုအဖွဲ့ဝင် အမျိုးသမီးတစ် ဦးကလူမှုရေး စိတ်ဓာတ် နဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းပရဟိတ လာကြိုပေးခြင်းမို့ ကျေးဇူးတင်ရှိလို့ မဆုံးပါပဲ။ မဏ္ဍပ်ကြီးထိုးပြီးလှူမှ အလှူ မဟုတ်ပါဘူး။ အားငယ်သူကို လိုအပ်တဲ့အခါမျိုး အချိန်ပေးပြီး ဖေးကူလမ်းညွှန်ပြခြင်းကလည်း ထိရောက်သော အလှူတစ်ခုပါပဲနော်။
အဲဒီအမျိုးသမီး ရဲ့ ဦးဆောင်ပေးမှုနဲ့ မာယာမီကို ခရီးဆက်ဖို့ ပြည်တွင်းထွက်မဲ့လေဆိပ် ရှိရာကို တက္ကစီ ကားငှားပြီး သွားရပြန်ပါရော။ လေဆိပ်ချင်းက သိပ်တော့မဝေးလှပါဘူး။ ဇူးရစ်မှာ နေ့လယ်စာ အလကားစား ခဲ့ရလို့သာ တက္ကစီခပေးစရာ ငွေလက်ကျန်လေး ရှိနေ သေးတာ မို့ တော်လေသေးရဲ့ပေါ့။ ကျွန်မ ကို လေဆိပ်ရောက်တာနဲ့ လေယာဉ်ထွက်မဲ့ အချိန်ကနီးကပ်နေတာကြောင့် ပြေးပြေးလွှားလွှားနဲ့ သွာလိးုက် ရတာ မီရုံလေးပဲ ရှိပါတယ်။ လာကြိုတဲ့အမေရိကန် အမျိုးသမီးလေးက ကျွန်မ တို့ လေယာဉ်ပေါ်တက် တဲ့ထိ စောင့်ပြီး အရာရာကူညီပေးရှာတာမို့ ကျေးဇူးတင်စကားကို အထပ်ထပ်ဆိုရင်း နှုတ်ဆက်ခဲ့ရပါ တယ်။
နယူးယောက်ကနေ မာယာမီခရီးက နှစ်နာရီကျော်ကျော်လေးပဲ စီးရတာပါ။ မာယာမီ ကို ရောက်ခါနီးမှာ လေယာဉ်မှူးက ရောက်မဲ့အချိန်နဲ့ ရာသီဥတုအနေအထားကို ကြေညာပါ တယ်။ လေယာဉ်ပေါ် က အောက်ကိုငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ တန်ဆောင်တိုင် သီးတင်ကျွတ်ပွဲ တော်တွေကျရင် မီးရောင်စုံတွေ ထွန်းထားတဲ့ အတိုင်း ဧရာမအပြောကျယ်လှတဲ့ မီးရောင် စုံပွဲတော်ကြီးတစ်ခုကို မျက်စိ တစ်ဆုံး မြင်တွေ့လိုက်ရတာမို့ ရင်သပ်ရှုမော်တအံ့တသြနဲ့ ငေးမောကြည့်နေမိပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေထဲ မှာမြင်ခဲ့ရဖူး၊ စာအုပ် ထဲမှာသာ ဖတ်ခဲ့ရဖူးတဲ့ နာမည်ကြီး မာယာမိမြို့တော်ကြီးကို ရောက်တော့မှာပါလားဆိုပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် မယုံနိုင် အောင်ဖြစ်မိပါတယ်။
လေယာဉ်မှူးက ည၈နာရီတိတိမှာ ရောက်မယ်လို့ ကြေညာထားတာမို့ လေယာဉ်ဘီးမြေ ကြီးကိုထိလိုက်ချိန်မှာ ကျွန်မ ရဲ့လက်က နာရီကိုငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်၊ နံနက် ၇နာရီခွဲအချိန် ကို ပြနေလေတယ်။ မြန်မာစံတော်ချိန်အတိုင်းဆိုရင် ကျွန်မတို့ ကျွန်မပြည် ရန်ကုန်မြို့တော်က ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ မာယာမီမြို့ ထက် ၁၁နာရီခွဲ အချိန် စောနေလေတယ်ပေါ့။
အချိန် တွက်မိပြီး ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ အမိမြေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခြမ်း ဝေးကွာ တာသေချာသွားလေပြီ ဆိုတဲ့အသိစိတ်က ရင်ကိုဆွဲဆုတ်ခြေမွ ပစ်လိုက်သလိုပါပဲ။ တစ်ဖက်မှာတစ်သက်တာ ပြန်မှတွေ့ခွင့်ကြုံပါတော့မလား ဆိုတဲ့စိုးထိတ်စိတ် နဲ့ တသသ လွမ်းခဲ့ရတဲ့ သားသမီးတွေကို တွေ့ရတော့မှာမို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေမိတာလည်း တစ်ပိုင်း၊ ကျွန်မ ရဲ့ရင်မှာ ခံစားမှုမျိုးစုံနဲ့ လှိုက်ခါနေလေရဲ့။
လာခဲ့ကြတဲ့ ကျွန်မတို့တစ်တွေ စိတ်လှုပ်ရှားနေကြသလို လာကြိုကြတဲ့ သားသမီးတွေ အားလုံးလည်း စိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေကြမယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်နေမိပါတယ်။ လေဆိပ် ခန်းမထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ စောင့်ကြိုနေတဲ့ သားသမီးတွေ ရဲ့ ၀င်းပပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ မျက်နှာ လေးတွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတာ ရင်ထဲမှာ အေးမြလှတဲ့ သီတာခုနစ်တန် စီးဆင်းသွား တယ်လို့ နှိုင်းပြရင်တောင် ခံစားရမှုက ပိုဦးမယ်ထင်ပါရဲ့။ ချမ်းမြေ့ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ကြည်နူးခြင်း၊ ၀မ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ ကျွန်မရဲ့မျက်နှာလည်း ၀င်းပနေ မှာ သေချာပါတယ်။ ဘ၀မှာအပျော်ဆုံးအဖြစ် မှတ်တိုင်ထူနိုငသော နေ့တစ်ခုပါပဲ။
မောင်နှမတစ်တွေ အမေကိုလာကြိုဖို့ မလာခင်တည်းက အိမ်မှာခွဲတမ်းချလာခဲ့ကြရတာ တဲ့လေ။ ၁၆နှစ်ကြာ ကွဲကွာနေ တဲ့ သားကြီးခင်မောင်ဝင်းခန့် မိသားစုက နှုတ်ဆက်ဖို့ ရှေ့ဆုံးက နေရာယူရမယ်။ ၅နှစ်ကြာ ကွဲကွာနေ တဲ့ တက္ကဆက်ပြည်နယ်က ဆင်းလာခဲ့ရ တဲ့သမီးကြီးကေခိုင်တို့ ဇနီးမောင်နှံက ဒုတိယနေရာ ယူရမယ်။ ၂နှစ်ခွဲနေခဲ့ရတဲ့ သမီး လတ်ယမင်းကတော့ တတိယနေရာ။ သူတို့ အားလုံးပြီးကာ မှ နောက်ဆုံးအသုတ် ရောက် လာတဲ့ သမီးကေသီနဲ့ သားလတ်ရွှေစင်တို့က နေရမှာတဲ့။ ကြိုဆိုရေး အစီအစဉ်ကို စနစ်တကျ ဆွဲလာကြတဲ့ထိဖြစ်ပုံများကိုလည်း ကြည့်ပါဦးနော်။
သားသမီးတစ်တွေ တစ်ယောက်စီကို ရင်ခွင်မှာ ထွေးပွေ့နှုတ်ဆက်ဖက်နမ်းရင်း နောက် ဆုံးကိုရောက်လာတော့ "အရင်ရောက်နှင့်နေကြ တဲ့ မာမီ့ရဲ့ သားသမီးတွေတန်းစီပြီး နှုတ် ဆက်နေတာကို ထိုင်စောင့်ပြီးမှ သမီးတို့ အလှည့်ရောက် မှာမို့ သမီးတော့ ကာတွန်းစာ အုပ်တစ်အုပ် ယူလာခဲ့ရတယ်"နဲ့ မရွှေကေသီ က နောက်ဆုံးနေရတာ အတွက် မကျေမနပ် နဲ့တွေ့တွေ့ချင်း စကားနာထိုးလိုက်သေးတယ်လေ။
"မာမီကို မတွေ့ရတဲ့ ၁၆နှစ်သမားတို့၊ ၅နှစ်သမားတို့တော့ ဘယ်လိုနေကြလဲ မသိဘူး။ မာမီနဲ့ ခဏလေး ခွဲခဲ့ရတဲ့သမီးတော့ စိတ်တွေလှုပ်ရှားတိုင်း အိမ်သာကိုအရောက်ပြေးနေ ရတာနဲ့ မတတ်နိုင်တော့လို့ အိမ်သာပေါက်ဝ မှာပဲ ထိုင်နေရတာ။ လေယာဉ်ဂိတ်ဝက လူတွေထွက်လာတာမြင်မှ မီအောင်ပြေးပြီး တန်းစီရတာ"လို့လည်း သူ့အဖြစ်ကို ရှင်းပြနေ လို့ထိပ်ကိုချစ်စနိုးနဲ့ လမ်းပုတ်ရင်း ရယ်ရသေးတယ်။
ဒီအထဲ ၀င်း ရဲ့ဇနီး "ဘော်ဘီ"က တွေ့တွေ့ချင်း မာမီကို မြန်မာလို "မင်္ဂလာပါရှင်၊ ကြိုဆို ပါတယ်"ဆိုတဲ့ စကား နဲ့ နှုတ်ဆက်ရအောင် သူအလွတ်မနည်းကျက်ပြီး မှတ်လာခဲ့ရတာတဲ့ လေ။ သူတို့တစ်ယောက် တစ်မျိုး ပြောပြတာတွေ နားထောင်ရတဲ့ အပြန်ခရီးကတော့ ပွဲကို ကျလို့။ မာယာမီနဲ့ သားကြီးတို့နေတဲ့ Coral Springs(သန္တာစမ်း) က တစ်နာရီကြာမောင်း ရပါသေးတယ်။ အိမ်ကိုရောက်တော့ ည ၁၀နာရီတောင် ကျော်နေ ပါပြီ။
အ၀တ်အစားလဲ၊ အဆာပြေ နို့လေးတစ်ခွက်၊ မုန့်လေးတစ်ခုနှစ်ခုစားပြီးတာနဲ့ သားအမိ တစ်တွေအတိုးချပြီး စကားပြောလိုက်ကြတာ မိုးစင်စင်လင်းသွားတဲ့ထိ ပြောလို့က မကုန် ကြသေးဘူး။ အမေရိကားမှာ မိုးလင်းချိန်က မြန်မာပြည်မှာ နေ၀င်ချိန်ဖြစ်နေပါပြီ။ မြန်မာ ပြည်ကအိပ်ချိန်ရောက်တော့ မှေးငိုက်လာကြပြီလေ။ အဲဒီလို Jag Lagဖြစ်ပြီး နေ့နဲ့ ညမှား နေလိုက်တာ တစ်ပတ်လောက်ကြာမှပဲ ပုံမှန်ဖြစ်တော့တာပါပဲ။
ကျွန်မရဲ့ မြေးလေးတွေကိုလည်း ဒီကျမှ မြင်ဖူးရတာလေ။ သားကြီးက ကလေးတစ်ယောက်မွေးပြီးတိုင်း ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီး အမေ့ဆီပို့ပါရဲ့။ ကျွန်မက အဝေးကနေ ကိုယ် တိုင်ကိုယ်ကျ မမြင်ရသေးတဲ့ မြေးတွေကို ဓာတ်ပုံကြည့်ပြီး မြန်မာနာမည်လှလှလေးတွေ ရွေးပေးထားတယ်ပေါ့။
ဒုတိယကောင် ကို "ခန့်ညီညီ"
တတိယကောင် ကို "ခန့်အောင်အောင်"
ဓာတ်ပုံလေးတွေ ရောက်လာတိုင်း ဒီမြေးလေးတွေကို ဘယ်သောကာလမှ မြင်တွေ့ခွင့် ရပါ့မလဲ ဆိုတာ တွေးရင်း ရင်ထဲမှာ အမြဲတမ်းလို တမ်းတမ်းတတ ဖြစ်နေမိတာပါ။ မမြင်ရ မတွေ့ရပေမဲ့ သူတို့အကြောင်းတွေ ကိုတော့ မသိချင်၊ မကြားချင် အဆုံးပါပဲ။
"မာမီ့မြေးစုတ်တွေ က ဘာလုပ်ကြပြန်ပြီ၊ ဘယ်လို ဆိုးလို့ ဘယ်လိုတေပြန်ပြီ"ဆိုတာ တွေ ကိုသမီး "ကေခိုင်"နဲ့ "ယမင်း"ဆီ က စာလာတိုင်း ဖတ်နေရတာမို့ မတွေ့ရပေမဲ့ စိတ်က တော့ရင်းနှီးနေပြီးသားပေါ့။ အကြီးဆု့းကာင် "ခန့်ကိုကို"က ကျွန်မရဲ့သားကြီး "၀င်း"နဲ့ တူလို့ ဆံပင်အနက်၊ မျက်လုံးအနက်နဲ့ မြန်မာနဲ့တူတယ်။ ဒုတိယကောင် "ခန့်ညီညီ" သူတို့အမေ အမေရိကန်သူကို တူလို့ဆံပင်က ရွှေဝါရောင်၊ မျက်လုံးကအပြာနဲ့မို့ အမေ ရိကန်ရုပ်ထွက်နေတယ်။ အငယ်ဆုံး "ခန့်အောင်အောင်"က အစ်ကိုအကြီး ခန့်ကိုကို လောက်လည်း ဆံပင်မမည်း၊ ခန့်ညီညီလောက်လည်း ဆံပင်မ၀ါဘဲ အညိုရောင်ရင့်ရင့်နဲ့ မျက်လုံးကလည်း အညိုရောင်၊ အမေနဲ့အမေ ရဲ့ရုပ်နှစ်ခု ပေါင်းစပ်နေတာမို့ တစ်မျိုးကြည့် လို့ကောင်းရဲ့။
ကျွန်မက ခုမှတွေ့ရတဲ့ မြေးလေးတွေကို အတိုးချပြီး တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်နဲ့ ချစ်စနိုးဖြစ်နေဆဲ မှာသမီးလတ် "ကေသီ"နဲ့ "ယမင်း"တို့ ညီအစ် နှစ်ယောက်က အနားရောက်လာကြပြီး...
"မာမီ၊ မာမီ့မြေးတွေကို သမီးတို့မောင်နှမတစ်တွေ တိုင်ပင်ပြီးနာမည်ပြောင်ထားလိုက်ပြီ၊ သိလား"တဲ့။ သူတို့ အစ်ကို မကြားအောင် တိုးတိုးလေး လာပြောပါတယ်။
"ဘာဖြစ်လို့ ပြောင်းရတာလဲ၊ မြန်မာနာမည်မို့ ခေါ်ရခက်လို့လား၊ ဒါဆိုလည်း သူတို့ အမေပေးထားတဲ့ အင်္ဂလိပ် နာမည်ပဲ ခေါ်ပေါ့"လို့ပြောတော့..
"ခေါ်ရခက်လို့ မဟုတ်ပါဘူးမာမီရဲ့၊ မာမီ့မြေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အနတ္တနာမည်မျိုးကို ရွေးပြီးမှ သမီးတို့က ပြောင်းလိုက်တာ"
"အံမယ်လေး၊ အမေရိကားရောက်မှ အနတ္တနာမည်တွေ ဘာတွေရွေးတတ်နေလိုက်တာ ဧကန္တမြန်မာစာ ဂုဏ်ထူးနဲ့ အောင် ခဲ့တဲ့ မကေသီရဲ့လက်ချက်ပဲ ထင်တယ်၊ ဟုတ်လား"
ဆယ်တန်းတုန်း က မြန်မာစာဂုဏ်ထူးနဲ့ အောင်ပြီးမြန်မာစကားကို အမြဲတမ်းတလွဲတချော် ပြောတတ်တဲ့ သမီးကေသီ ရဲ့အကြောင်းကို သိလို့ ကျွန်မကမေးလိုက်ရခြင်းပါ။
"သမီး တို့ မောင်နှမအားလုံး စိတ်တူကိုယ်တူ ဆုံးဖြတ်ပြီးပေးပါတယ်ဆိုမှ။ နားထောင်ပါဦး၊ နောက်ကျ မာမီ လည်း သူတို့နဲ့အနေကြာသွားရင် သမီးတို့ပေးတဲ့ နာမည်နဲ့ ဘယ် လောက်လိုကဖက်လဲဆိုတာ သိပြီး ထောက်ခံလာ မှာ။ မှတ်ထားဦးနော် မာမီ"
"ခန့်ညီညီ က ခန့်ငြိမ်ငြိမ်"
"ဟင်...သမီးတို့ပေးထားတဲ့ နာမည်တွေကလည်း စုတ်ပဲ့လိုက်တာကွာ၊ ကြားလို့တောင် မကောင်းပါဘူး" လို့ ပြောရင်း ကျွန်မတော်တော်စိတ်ပျက်သွားမိပါတယ်။
"စောပါသေး တယ် မာမီရယ်၊ နောက်တော့မှ ငါ့သားသမီးလေးတွေ နာမည်ရွေးတော်လှ ချည့်ဆိုပြီး ဆုချချင်စိတ်ပေါက် ရင်တော့ မိုင်ခိုင်းမှာ Show နဲ့ Dinnerက တစ်ပြားမှ မလျှော့ဘူးနော်"တဲ့။ ညီအစ်မနှစ်ယောက် ပိုင်လှချည့်ပုံစံနဲ့ စပ်ဖြဲဖြဲရယ်နေကြလေရဲ့။
"နေပါဦး၊ သမီးတို့က အကြောင်းပြုပြီးပေးထားတဲ့ နာမည်တွေကို လည်း ရှင်းပြကြဦးလေ" နဲ့ကျွန်မ သိချင်လို့ မေးကြည့်တော့ ပြောချင်လွန်းလွန်ဖြစ်နေတဲ့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်က အလုအယက်ပြောပြပါတယ်။
"ခန့်ကိုကိုက အမြဲကလိမ်ကျနေတာ မာမီရဲ့၊ သူ့ကိုအဖေနဲ့ အမေကသားဦးဆိုပြီး အဖြစ် သည်းနေကြတော့ သူကအိမ် မှာ ဗိုလ်ပဲ၊ အဖေကိုချွဲလိုက်၊ အမေကို နွဲ့လိုက်နဲ့ အခွင့်အ ရေးတွေအကုန်ယူနေတာ၊ အငယ် ခန့်ညီညီကိုလည်း အနိုင်ကျင့်တယ်။ ဟိုကောင်က မခံနိုင်လွန်းမှ သွားတိုင်ရင် ဟိုလွှဲချ၊ ဒီလွှဲချနဲ့ ကလိမ်ကျပြ လိုက်တော့ အဆူမခံရတော့ ဘူးလေ"
"ဒါဖြင့် ခန့်ငြိမ်ငြိမ်ကတော့ ငြိမ်နေလို့လား"
"ဟုတ်တယ်၊ ခန့်ညီညီက စာကြမ်းပိုးမာမီရဲ့၊ စာတစ်အုပ်နဲ့ ချောင်ထဲမှာငြိမ်နေတာပဲ။ ယောက်ျားလည်း ပီသ တယ်၊ စကားလည်း အပိုမပြောတတ်ဘူး၊ ချွဲလည်းမချွဲတတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့် သူ့ကိုတော့ ခန့်ငြိမ်ငြိမ်"
"ခန့်အီအီ ကတော့ မာမီတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သူလိုချင်တာ မရမချင်တအီအီနဲ့ အီပြနေတာ။ ဒါကြောင့်ခန့်အောင်အောင် လို့ သဝေထိုးရေးချ ငသတ်ရမဲ့အစား လုံးကြီးတင်ဆန်ခတ် ပေးလိုက်တာ"
"အင်း၊ ကောင်းပါ့" ဆိုပြီး မြန်မာပညာရှိ ညီအစ်မကိုမိုင်ခိုင်းက ရှိုးနဲ့ဒင်နာအစား မျက်စောင်း ဆုပဲချပေးလိုက် ရပါတယ်။ ကြည့်ပါဦးလေ၊ အစ်ကို့အိမ်ပေါ်လည်း တက်နေကြသေး၊ အစ် ကို့ကွယ်ရာမှာ သူ့သားတွေကို ရစရာမရှိတဲ့ နာမည်ပြောင်တွေ ပေးထားလိုက်ကြသေး တယ်။ သူတို့ညီအစ်မတွေ ဆုံမိကြရင် သူတစ်ပြန် ကိုယ်တစ်ပြန် အရာရာကို ဟာသလုပ် နေကြတာနဲ့ ပါးစပ်ပိတ်ရတယ်လို့ မရှိဘဲ ရယ်နေရတာက များပါတယ်။ သူတို့ပဲ ရှာရှာဖွေ ဖွေတွေးတတ်၊ စကားလုံးရှာပြီး ပြောတတ်ကြလို့ ကျွန်မ လက်မြှောက်ထားရတာပါ။ အခု ဆိုတော့မြန်မာပြည် မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ သားငယ်လေး "ဇာနည်"ကလွဲပြီး မိသားစုအားလုံး စုစည်း မကြပြီမို့ ပိုပြီးပွဲစည်လေ တယ်ပေါ့။
သားရဲ့အိမ်က အိပ်ခန်း လေးခန်းပါတဲ့ အတန်အသင့်ကြီးတဲ့ အိမ်ကြီးပါ။ အိပ်ခန်းလေး အခန်းအပြင် DENလို့ခေါ်တဲ့ အခန်းပိုတစ်ခုလည်း ပါသေးတာမို့ ငါးခန်းပြောလို့ရတယ် ပေါ့။ အမေရိကန်က အိမ်တွေက ကျွန်မတို့ခေတ်က မြန်မာအိမ်တွေလို မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မတို့ဆီမှာက ဧည့်ခန်းတစ်ခု၊ ဘုရားခန်းတစ်ခု၊ ထမင်းစားခန်း တစ်ခု၊ အိပ်ခန်းသုံးခုနဲ့ မီးဖိုတစ်ခုဆိုရင် အဆင့်အတန်းမီ လူလတ်တန်းစားအတွက် အိမ်တစ်ခု လို့ ပြောလို့ရတာ ပဲမဟုတ်လားနော်။
ဒီမှာက ဧည့်ခန်း က သီးသီးသန့်သန့်တစ်ခု Family Roomလို့ခေါ်တဲ့ မိသားစုအခန်းက တစ်ခု၊ ထမင်းစားခန်း က တစ်ခု၊ မီးဖိုကတစ်ခု၊ အိပ်ခန်းကတော့ ကိုယ့်မိသားစုရဲ့လူဦးရေ ကိုလိုက်သုံးခု လေးခုရှိတတ်ပါတယ်။ ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ်က Sub Tropical မို့ မြန်မာ ပြည်လိုပဲ ပူအိုက်တာကြောင့် အိမ်နောက်ဘက် မှာ လေများများဝင်စေအောင် ခြင်ဆန်ခါ ပဲကာထားတဲ့အပန်းဖြေနားစရာ အခန်းကျယ် Patioတစ်ခုလည်း ပါပါသေးတယ်။ အများ အားဖြင့်အိမ်တိုင်းမှာလို ရေကူးကန်ရှိကြတာများပါတယ်။ ရာသီဥတုအခြေအနေကို လိုက် ပြီးနေသာ ထိုင်သာ၇ှိအောင် ဖန်တီးထားကြတဲ့ သဘောပဲထင်ပါရဲ့။
အနောက်တိုင်းသားတွေက လွတ်လပ်မှုကိုလည်း ဦးစားပေးတတ်သူများ ဖြစ်လို့အိမ်မှာ မိဘနှစ်ပါးအပြင် သားသမီးတွ ထွန်းကားလာရင် ကလေးတွေကိုလည်း တစ်ယောက်တစ် ခန်းစီသီးခြားနေစေတာမျိုးပါ။ ကျွန်မ တို့ အရှေ့တိုင်းသားတွေကတော့ မွေးကတည်းက ရင်ခွင်ထဲမှာ ထွေးပိုက်ထားရမှ ကျေနပ်ကြတာနော်။ ကလေး ကို အောက်မချရက်လို့ တချီ တပိုးလုပ်နေရင်း ကလေးက လက်ကြိုက်သွားပြီဆိုရင် လက်မောင်အောင့်တဲ့ထိ ချီပွေ့ ထား ပါလေရောပဲ။ တစ်ခန်းစီထားဖို့ ဆိုတာမျိုးများ ဝေးပါသေးရဲ့။
သားကြီးက သူ့မှာသားသုံးယောက်တောင်ရှိနေတာမို့ အမေရိကန်ထုံးစံအတိုင်း အိပ်ခန်း လေးခန်းပါ အိမ်ကို ၀ယ်ဖြစ်တာ ထင်ပါရဲ့။ အခုကျတော့ ကျွန်မတို့မိသားစု အုပ်စုကြီးနဲ့ အိမ်တစ်လုံး အပြည့်ဖြစ်နေပါလေရော။ ကျွန်မမြေးလေးတွေလည်း ကိုယ်ပိုင်အခန်းတွေ ပျောက်ကုန်ကြတာပေါ့။ အားလုံးအဆင်ပြေပြေဖြစ်အောင် အခန်းတွေ ကို ဝေငှလိုက်ရ တော့တစ်ဦးစီ သီခြားမဖြစ်တော့်ဘဲ သားကြီးတို့ ဇနီးမောင်နှံနဲ့ အငယ်ဆုံး ခန်အောင် အောင်ကတစ်ခန်း၊ ခန့်ကိုကိုနဲ့ ခန့်ညီညီက တစ်ခန်း၊ ယမင်း၊ ကေသီနဲ့ သူဇာညီအစ်မ သုံးယောက် က တစ်ခန်း၊ မာမီ၊ ကျွန်မနဲ့သားငယ် အိန္ဒာက တစ်ခန်း၊ အခန်းအပိုမှာ သားရွှေစင်က တစ်ယောက်တည်း တစ်ခန်း။
တိုးတိုးကျိတ်ကျိတ်နေရပေမဲ့ ခုမှမိသားစုက ဆုံစည်းမိတာဆိုတော့ စကားတွေကလည်း ပြော လို့မကုန်နိုင်ကြ ဘူး။ သားက ကျွန်မတို့ရောက်မလာခင်ကတည်းက မိသားစုဦးရေကို တွက်ပြီး ၁၃ယောက်အတူ တစ်ခါတည်း ထိုင်ပြီး စားလို့ရတဲ့ ထမင်းစားပွဲအရှည်ကြီးကို သူကိုယ်တိုင် ဆောက်ထားတာတဲ့လေ။ ဟုတ်တာပေါ့။ သူတို့မိသားစု က ၅ယောက်၊ ကျွန်မတို့ မိသားစုက ၈ယောက်၊ စုစုပေါင်း ၁၃ယောက်ဆိုတာ နည်းတဲ့အုပ်စုကြီးမှ မဟုတ် တာနော်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ လူတစ်ယောက်ဆိုတာတောင် မနည်းတာဝန်ကြီး တာပါ။ ချွေးမ ကနိုင်ငံခြားသူဖြစ်ပေမဲ့ စိတ်ရင်းစေတနာကောင်းရှာလို့ မျက်နှာတစ်ချက်မပျက်ဘဲ ၀တ္တ ရားကျေပေ လို့ ကျွန်မတို့လည်း နေနိုင်ကြတာပေါ့။
မလာခင်တုန်းကတည်းက ၁၆နှစ်ကြာ ကွဲကွာနေတဲ့ သားကြီး "၀င်း"ဘာတွေများ ပြောင်း လဲကုန်မလဲလို့ အတွေးနဲ့ စိတ်ကူးကြည့်နေမိတာ သားကိုပြန်တွေ့ရတော့ မြန်မာပြည်က ထွက်ခွာသွားစဉ် တုန်း ကလို နုငယ်တဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့ ပါးလှပ်လှပ်ပိန်ပိန်လေး မဟုတ်တော့ ဘဲတကယ့်ယောက်ျားကြီး တစ်ယောက်လို ကြံ့ခိုင်ထွားကျိုင်းဖွံ့ဖြိုးပြီး နှုတ်ခမ်းမွေး၊ မုတ် ဆိတ်မွေးတွေနဲ့ ဖြစ်နေလို့...
"သားကလည်းကွာ၊ မုတ်ဆိတ်ကြီးတွေနဲ့ ရင့်သွားလိုက်တာ၊ ကြည့်မကောင်းပါဘူး"ဆို တော့
"မာမီ့ချွေးမ က ဒီပုံစံ ကြိုက်တယ်ဆိုလ်ို့ ထားရတာမာမီရဲ့"တဲ့။
"အင်း...ဟုတ်ပေသားပဲ" ကျွန်မက မေ့သွားပြီး အရင်ကလို ပိုင်စိုးပိုင်နင်းပြောမိတာလေ။ လက်ထပ်ပြီးပြီဆိ်ုရင် အမေ က မပိုင်တော့ဘဲ ဇနီးကသာ ပိုင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ကသတိ ချပ်ပြီးနေတတ်ရမှာပါနော်။
ရုပ်ရှည်ပြောင်း သွားပေမဲ့ စိတ်ထားကတော့ မပြောင်းရှာပါဘူး။ အမေကိုချွဲချင် နွဲ့ချင်တာ အပြင်မိသားစု၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ ကို ချစ်တဲ့စိတ်က ခုထိရှိနေဆဲပါပဲ။ အဲ... စကား ပြောတာတွေကတော့ ကပြောင်း ကပြန်ဖြစ်နေလေ ရဲ့။ သူတစ်ယောက်တည်း နှစ်ပေါင်းကြာ မြင့်စွာမြန်မာစကားပြောဖော်မရှိဘဲ နေလာတာဖြစ်တော့ စကား အသုံးအနှုန်း တွေတော်တော်ကို မေ့ကုန်တာပါ။ ညီမတွေရောက်လာ မှ ပြောစရာအဖော် ရ လို့ တော် တော်တိုးတက် လာပေမဲ့ တလွဲလွဲ တချော်ချော်တွေက အများကြီး။
အမေကို သားကလို့ပြောလိုက်၊ တို့ကလို့ ပြောလို့၊ ဟော...ညီမတွေကျတော့ ကျွန်တော် ကဆိုပြီး ရိုကျိုးနေပြန်ပါရော။ ကျွန်မလာခါနီမှ သားသမီးတွေကို ဘာမှကြမလဲမေးတော့ သမီးတွေအားလုံးက တခြားဘာမှ အလေးခံပြီး သယ်မလာခဲ့နဲ့။ လက်ဖက်၊ အချဉ်ထုပ် နဲ့ ရှောက်သီးဆေးပြားတွေ ပဲ ခြင်းနဲ့အပြည့်အသိပ် ထည့်တဲ့အပြင် အမေရိကားရောက်ရင် မြန်မာလို ချက်စားဖို့ ၀ယ်မရမှာစိုးလို့ နနွင်းမှုန့်နဲ့ အရောင်တင်မှုန့်၊ မဆလာကအစ ပုစွန် ခြောက်အထိ အမျိုးအမည်စုံကို အလေးခံပြီးသယ်လာ ခဲ့တာပါ။
ပစ္စည်းတွေ ထုတ်ပြီး ဖြေကြတော့ ကျွန်မယူလာတဲ့ ပုစွန်ခြောက်တွေ၊ နနွင်းမှုန့်နဲ့ မဆလာ တွေကိုကြည့်ပြီး သားကြီးဝင်းက...
"မာမီ ကို စားစရာတွေ အလေးခံပြီး ခေါ်မလာခဲ့ပါနဲ့လို့ ပြောထားလျက်နဲ့၊ ကြည့်ပါဦး ခေါ်လာတာတွေ စုံလို့၊ အများကြီးပဲ" တဲ့။
သူ့စကား ကို ကြားတော့ အင်း...ကျွန်မသားလည်း ဘိုကြီး Made in Burmaဖြစ်နေပါရော လို့စိတ်မောမိပါရဲ့။
ဒါနဲ့တင်မပြီးသေးဘူး။ ကျွန်မယူလာတဲ့ ကျွဲချိုနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ဗျိုင်းရုပ်အမည်လေးကိုကြည့် ပြီး "မာမီ၊ ဒါမျိုး အဖြူရောင်ကောင်လေး၊ သားတို့နောက်ဘက်က Canalထဲကို ခဏခဏ အလည်လာတယ်ဗျ"တဲ့။
"ဗျိုင်းလား"လို့ မေးကြည့်တော့ "ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါ တို့ မေ့သွားလို့"ဆိုပြီး ဖြေရှင်းနေပါရော။
ဒီလိုနဲ့ ရောက်ပြီးနှစ်ရက်လောက် ရှိတော့ သားကြီးက သူ့ညီနဲ့ညီမတွေကို "မနက်ဖြန် ကျရင် ကျောင်း သွားစိုက်မယ်၊ စောစောထကြ"တဲ့။
အခုမှတွေ့ရမြင်ဖူးရ တဲ့ အစ်ကိုကိုလည်း စိမ်းနေသေးတော့ ကလေးတွေကပြန်လည်းမမေး ရဲ့၊ သူပြော တဲ့ ကျောင်းစိုက်မယ်ဆိုတာကလည်း ဘာကြီးမှန်းမသိ။ ဒါနဲ့ ကျွန်မဆီရောက် လာကြပါလေရော။
"မာမီ၊ ကိုကိုကနက်ဖြန် ကျောင်းသွားစိုက်မှာမို့ သားတို့ စောစောထရမယ်တဲ့၊ အဲဒါ လာလုပ်မှာလဲဟင်"ဆိုမှ ကျွန်မလည်း တစ်ခါမှမကြားဖူးတာနဲ့ အကျိုးအကြောင်းသွားမေးရ ပါတယ်။
"သူတို့ စာသင်ဖို့ ကျောင်းစိုက်ရမှာလေ"တဲ့။
သူရှင်းပြမှပဲ ကျောင်းအပ်ဖို့ သွားမယ်ဆိုတာ နားလည်ရတော့တယ်။ ကျွန်မလည်း အမေရိ ကားရောက်တာမှ ဆရာဦးထွန်းငြိမ်းနဲ့ အပြိုင်အဓိပ္ပာယ်ရှင်းရတဲ့ အဘီဓာန်ဆရာမဖြစ်ပါ ရောပဲ။ ကျွန်မတို့တစ်တွေနဲ့ အနေကြာ လာတော့မှ တဖြည်းဖြည်းမြန်မာစကားကို မှန်အောင်ပြောလာနိုင်ပေလို့ တောပါသေးရဲ့။
အဲဒီနေ့က သူပြောသလို ကျွန်မတို့ကျောင်းစိုက်ကြတယ်ပေါ့။ ရောက်တဲ့အချိန်က ကလေးတွေ ကျောင်းတက်ဖို့ စကောစက အချိန်ကြီး ဖြစ်နေတာပါ။ အမေရိကားကျောင်း တွေရဲ့ စာသင်နှစ်က စက်တင်ဘာလမှာ စပြီးဇွန်လဆန်း မှာ စာသင်နှစ်ကုန်ဆုံးတာနဲ့ နွေရာသီအတွက် သုံးလပိတ်ပါတယ်။ ကျွန်မ တို့ ကျောင်းအပ်တဲ့နေ့က မတ်လဆန်းဖြစ် နေတော့စာသင်ချိန် သုံးလပဲ ရှိတော့တာမို့ ၀င်ခွင့်မှ ရပါ့မလား ဆိုတာ တွေးပူနေမိသေး တာပါ။ ပြဿနာမရှိဘဲ လွယ်လွယ်ကူကူရလို့ ကျေးဇူးတင်ရပါသေးတယ်။
နောက်တစ်ခုကလည်း သူတို့အငယ်သုံးယောက်ဖြစ်တဲ့ သူဇာ၊ ဇာနည်နဲ့ အိန္ဒာတို့ လက် ထက်ကျတော့ အင်္ဂလိပ်စာက ငါးတန်းကျမှစပြီး သင်ကြရတာမို့ အစ်ကို အစ်မတွေလို အခြေခံမကောင်ကြတော့ဘူးလေ။ ဒီမှာ ဘာသာစုံအင်္ဂလိပ်လိုပဲ သင်ရမှာကြောင့် စာမ လိုက်နိုင်မှာကို စိတ်ပူမိပါသေးတယ်။ ကလေးတွေ ရင်ဆိုင်ရမဲ့ အခက်အခဲကို ကျောင်း အာဏာပိုင်များကို ရှင်းပြတော့..
"ဒီအတွက်မပူပါနဲ့၊ ပြည်ပကလာကြတဲ့ ကလေးအားလုံး အင်္ဂလိပ်စကား တတ်ကျွမ်း လာကြတာမှာ မဟုတ်ဘဲ၊ ရှင်တို့ ကလေးတွေကမှ ငါးတန်းမှ စသင်လာခဲ့လို့ အနည်းအ ကျဉ်းတော့ တတ်ဦးမှာပါ။ ဂျပန်တို့၊ ကိုရီးယားတို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့က လာကြတဲ့ ကလေးတွေဆို အင်္ဂလိပ်စားတစ်လုံးမှ မတတ်ကြပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာလိုအပ်တဲ့ ကလေးတွေ အတွက် သီးခြားအင်္ဂလိပ်စာ သင်ပေးမဲ့ဆရာ၊ ဆရာမတွေရှိပါတယ်။ မကြာခင် သူတို့တက်ကျွမ်းပြီး စာတွေကောင်းကောင်း လိုက်နိုင်ကြတာချည်းပါပဲ။ ဒါက ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး"တဲ့။
သူတို့ကတော့ ဒါမျိုးရိုးနေပြီဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ တာဝန်ယူလိုက်ပေမဲ့ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ ဟုတ်မှဟုတ်ပါ့မလားနဲ့ ဘ၀မကျချင်ရယ်ပါ။ တကယ်သူတို့ တာဝန်ယူ လိုက်တဲ့အတိုင်း အစီအစဉ်တွေ ချက်ချင်းလုပ်ပေးပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့သမီး သူဇာနဲ့ သားအိန္ဒာကို အင်္ဂလိပ်စာဆရာမက အတန်းသီးခြားယူပြီး သင်ပေးပါတယ်။ အဲလို အထူး ပြုသင်ပေးတဲ့အတွက် ကျူရှင်ခတွေ၊ ဘာတွေလည်း မပေးရပါဘူး။ သူတို့မောင်နှမနှစ် ယောက်က အခြေံနည်းနည်း ရှိထားပြီးသားဖြစ်လို့ မြန်မာစကားတတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာဆရာ မ ရှာစရာ မလိုပဲ အမေရိကန်ဆရာမနဲ့ အဆင်ပြေးသွားပေမဲ့ တခြားနိုင်ငံကလာတဲ့ အင်္ဂ လိပ်စာတစ်လုံးမှ မတတ်တဲ့တောင်အမေရိကားတိုက်က Spanishကလေးတွေအတွက် သူတို့လူမျိုး Spanish စကားပြောတတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာဆရာ၊ ဆရာမက သင်ပေးရသလို ဂျပန်တို့၊ ထိုင်းတို့ကျတော့လည်း သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ သင်ပေးနိုင်တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ တွေနဲ့ သင်ကြရတာကို တွေ့ရလို့ ပညာရရှိရေးအတွက် ကရိကထခံပြီး တာဝန်ယူနိုင်ပုံ ကိုကြည့်ပြီး အံ့သြမိပါတယ်။
ဒီမှာရှိကြတဲ့ Privateကျောင်းတွေကတော့ အလွန်အမင်းကို ဈေးကြီးပါတယ်။ တော်ရုံတန် ရုံပြည့်စုံရုံနဲ့ Private ကျောင်းတွေကို မထားနိုင်ကြပါဘူး။ အများစုက အစိုးရကျောင်းတွေ ကိုပဲ သွားကြတာပါ။ ကလေးတွေကျောင်းပို့ ရင် မူကြိုကနေပြီး ဆယ့်နှစ်တန်းပြီးတဲ့အထိ ကျောင်းလခ၊ စာအုပ်ဖိုး၊ ကျောင်းကားလ တစ်ပြားမှ မပေးရပါဘူး။ အားလုံးအစိုးရက တာဝန်ယူပါတယ်။ အဲဒီလို တာဝန် ယူနိုင်အောင် လည်း ပြည်သူလူထုတွေဆီက အကောက် ခွန်တစ်ခါတည်းထည့်ပြီး ယူထားလိုက်ပြီးသားလေ။ ရယူတဲ့ အတိုင်း ပြည်သူလူထုကို ခံစား ခွင့်အနေနဲ့ ပြန်ပေးတဲ့သဘောပါပဲ။
အကယ်၍ ၀င်ငွေ မပြည့်မီတဲ့ မိဘများရဲ့ သားသမီးများဆိုရင် နေ့လယ်စာမုန့်ကို အလ ကားကျွေးသေး တာနော်။ တတ်နိုင်သူတွေကတော့ ၀ယ်စားကြရတယ်ပေါ့။ ကျောင်းမှာ ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်တုန်းကလို အပြင်က လာရောင်းကြတဲ့ ဈေးသည်တွေလည်း မရှိဘူး။ မုန့်စားဆင်းချိန်မှာ ကျောင်းအဆောက်အအုံထဲမှာ ရှိတဲ့ကင်တင်းကပဲ ၀ယ်စားခွင့်ပြု ထားတာလေ။
အဲဒါလည် အလွန်ကိုသက်သာတဲ့ဈေးနဲ့ ရောင်းတာပါ။ ကလေးတွေအ တွက်အာဟာရဖြစ်စေမဲ့ အစာမျိုးကို တစ်နေ့ အစီအစဉ် တစ်မျိုးစီပြောင်းပြီး ရောင်းချတာ ဆိုတော့လည်း စားကြတဲ့ကလေးတွေအဖို့ မငြီးငွေ့တော့ဘူးပေါ့။ ဒီအပတ် အတွင်း ကျောင်းမှာရောင်းချမဲ့ နေ့လယ်စာအမျိုးအမည်တွေကိုလည်း ကျောင်းသားမိဘတွေ လေ့လာနိုင်အောင် မြို့နယ်အတွက် ထုတ်ဝေဖြန့်ချီ တဲ့ သတင်းစာမှာ ဖော်ပြပေးထားပါ တယ်။
ကျောင်းကင်တင်းက ရောင်းတဲ့အစားအစာက အဟာရလည်းဖြစ်၊ ဈေးကလည်းအဆမ တန် သက်သာနေတာ ဆိုတော့ ဘယ်သူမှအလုပ်ရှုပ်ခံပြီး မန့်ဘူးလည်း သယ်မလာကြ တော့ပါဘူး။ ဒီလိုစနစ်တကျ လုပ်ပေးထား တာကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲကလေးတွေအတွက် ကျန်း မာရေးကောင်းအောင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေတာလည်း အမှန်ပါပဲ။ ကျောင်းကားကို တော့် ကျောင်းနဲ့နှစ်မိုင်ဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်တဲ့သူတွေအတွက် မပေးလို့ အိမ်ကမိဘတွေ ကကားနဲ့လိုက်ပို့၊ လိုက်ကြိုက်လုက်ရင်လုပ်၊ ဒါမှမဟုတ် ကလေးတွေက အိမ်ကနေ စက်ဘီးစီးသွားရင် သွားကြပေါ။ အများအားဖြင့်လည်း အဲဒီလို စက်ဘီးကိုယ်စီနဲ့ သွားကြ တာတွေ့ ရပါတယ်။ ကျောင်းကနေနှစ်မိုင်ကျော်တဲ့ နေရာမှာနေတဲ့ကလေးတွေကို ကျောင်း ကားက အခမဲ့ကြိုပို့ပေး တာပါပဲ။
သားနေတဲ့အိမ်က ကျောင်းနဲ့ ငါးမိုင်ကျော်ကျော်ဝေးတာမို့ သမီးသူဇာနဲ့ သားအိန္ဒာအ တွက်ကျောင်းကား စီးခွင့်ရပါတယ်။ ကျောင်းကားကြီးတွေက အ၀ါရောင်ကြီးတွေမို့ အဝေးကပင် မြင်နိုင်ပါ၏ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးထဲကလေ။ အဲဒီကျောင်းကား ကလည်း ဘုန်းကြီးသ လားမပြောပါနဲ့တော့။ ကျောင်းကားရဲ့ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ Stop(ရပ်ပါ) ဆိုတဲ့ စားလုံးရေးထားတဲ့ ဆင်နားရွက်ကလေးနှစ်ဖက် ပွင့်လာရင် ကျောင်းကားနောက်က ပါလာ သမျှ ယာဉ်တွေ အားလုံးရပ်ပြီး စောင့်ကြပေတော့ပဲ။ ကလေးတွေတန်းစီပြီး ဆင်းလို့ကုန်ပြီ ဆိုခါမှ ကားထွက်တာစောင့်ပြီး ကိုယ်ကလိုက်ထွက်ရပါတယ်။
ရပ်တော့ မဲ့ ကျောင်ားကိုကျော်ပြီးလည်း တက်ခွင့်မရှိပါဘူး။
ကျောင်းကားက ရှေ့တစ်ခေါ် လောက်မှာရပ်တော့မယ်ဆိုရင် ကားမီးကိုမှိတ်တုတ်မှိတုတ် Blink Lightအချပြထားတာပါ။ အဲဒါမြင်ရင် ကိုယ့်ကားကိုလည်းအရှိန်လျှော့ပြီး ကိုယ်ပါရပ်ဖို့ပြင်ဆင်ရမဲ့ဟာ။ တစ်ခါက ကျွန်မမြေးတွေ နဲ့ ကားပေါ်မှာ စကားဖောင်ဖွဲ့ကောင်းလာလိုက်တာ Blinkလုပ်ထားတဲ့ ကားမီးကို သတိမထား မိဘဲ ကျော်တတ်မိတာနဲ့ ရဲကားကချက်ချင်းရောက်လာပြီး ကျွန်မ ကို Ticketပေးတော့တာပဲ။ တခြား အမှုထက်ကျောင်းကားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အမှုကို ပိုပြီး အပြစ်ကြီးလေးတာမို့ဒဏ်ငွေဒေါ်လာတစ်ရာ အချခံလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီကတည်းက ကောင်းကောင်းမှတ်သွားပြီး နော်ကဆိုကျောင်းကားဝါ၀ါမြင်ရင် ကြိုတင်ပြင်ဆင် သတိ ထားတဲ့အကျင့်ရသွားတော့တယ်။ ကျောင်းကားမောင်းသူတွေက အများအားဖြင့် အမျိုး သမီး ယာဉ်မောင်းတွေချည်းပါပဲ။ ရောက်ခါစဆိုတော့ နေရာတိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေ ယောက်ျားနည်းတူ အလုပ် လုပ်နေတာ ကြည့်ပြီးဆန်းသလိုလို ရှိပေမဲ့ကြာလို့ တွေ့ရမြင်ရ ဖန်များတော့လည်း ရိုးသွားတာပါပဲ။
ကျွန်မမှာကလေးတွေ တစ်ပုံကြီးမွေးထားတာမို့ အနှစ်သုံးဆယ်နီးပါး ကျောင်းပို့ ကျောင်း ကြိုလုပ်လာခဲ့ ရတာလေ။ အကြီးတွေ တက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့အထိ အငယ်တွေက မူကြိုက နေအတန်းစုံ တန်းစီနေကြ ဆဲဖြစ်တော့ မနက်ကျောင်း၊ နေ့ခင်းကျောင်းနဲ့ အချိန်မတူလို့ အခေါက်ခေါက် အခါအခါသွားရသလို တက္ကသိုလ်ကျပြန်တော့လည်း အတန်းတွေမတူလို့ တစ်ခါစီ အကြိုအပို့လုပ် ရတာကလည်း ရှိသေး။ ၀မ်းစာအတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်း ကျောင်း တက္ကစီပါဆွဲခဲ့ရတဲ့အလုပ်က အမေရိကားရောက် ခိုက် ခေတ္တ အနား ရသွားတယ် ဆိုပါတော့။
သားလတ်ရွှေစင်ကတော့ ဂျီစီအီးဖြေလို့အောင်တာနဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အဆင်ချောသွား လေရဲ့။ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ သားသမီးတွေရဲ့ ပညာရေး၊ ကျောင်းကိစ္စတွေ စီစဉ်လို့ ပြီးသွားတာမို့ တစ်မျိုး ရင်မော သက်သာသွားရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရှေ့ဆက်ရမယ့်ခရီးက ရှိသေးတယ်လေ။ သားကြီးကိုတာဝန်မပေးဘဲ ကိုယ့်ဝန်ကိုယ်ထမ်းဖို့ ဘယ်လို စရမလဲဆို တာလမ်းစရှာရဦးမှာပါ။
ကိုယ့်ရပ်မြေ ကိုယ်ဒေသမဟုတ်တာကြောင့် တစ်ခါတလေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်စိတ် ချမှုတွေပျောက်ပြီး ဒီလိုနေရာ သစ်တစ်ခုမှာ ရပ်တည်ဖို့ ဖြစ်မှဖြစ်ပါ့မလားဆိုတဲ့ စိုးထိတ်မှု နဲ့အတူ ကိုယ့်အရည်အချင်းကို သံသယ ၀င်မိပါတယ်။ အတိတ်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရှုံးတွေကိုပါ ပြန်တွေးပြီး အားငယ်စိတ်ဝင်လာတော့ ပိုဆိုးလေတယ်ပေါ့။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်စိတ်ကို မနည်းပြန်ပြီး သံပတ်တင်းရပြန်ပါရော။ အားငယ်စိတ်ကို လက်ခံ လိုက်မိရင် မှောင်အတိကျသွားတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ မျိုးစေ့တစ်ခုချမယ် စိတ်ကူးတဲ့ အခါ ရောင်ရှိမှ၊ ရေရှိမှ၊ မြေသြဇာဓာတ်ကလည်း ကောင်းပါဦးမှ ရှင်သန်ထွားကျိုင်းတဲ့အပင်လေး ကပေါက်လာနိုင် မှာပေါ့နော်။ အလင်းရောင်မရှိ၊ အမှောင်အတိထဲမှ ဘယ်လောက်ကောင်း တဲ့မျိုးစေ့ ကိုပဲချချ ပေါက်လာဖို့က လွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ရပ်တည်ရေး မျိုးစေ့လေးတွေ ချပြီးရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်လည်း နေရောင်ခြည်လို ခံနိုင်ရည်စွမ်းအားတွေ မွေးဖို့ မာန်တင်းရဦးမှာပါ။ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ် ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်း မြေသြဇာကောင်းတစ်ခုလို လိုအပ်မယ် ထင်ပါရဲ့။
အခက်အခဲဆိုတာမျိုးက ဘယ်အရပ်၊ ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေ ကြုံကြရမှာချည်းပါပဲ။ အခက်အခဲဆိုတာ အချိန် တန်ရင်လည်း ပြီးသွားစမြဲမို့ ရှေ့ကိုချက်ချင်းလက်လင်းခြေတစ် လှမ်းမတိုးနိုင်သေးတဲ့တိုင်အောင် တစ်လက်မ ချင်း တိုးလို့ရလည်း တိုးရမှာပဲ ဆိုတဲ့ဇွဲနဲ့ ကျွန်မရဲ့ရှေ့လာမဲ့ဘ၀ အခြေချနိုင် ဖို့ ပြင်ဆင်ရပြီဆိုပါတော့လေ။
Posted by SHWE ZIN U at 11:39 PM3comments Links to this post
မြလှိုင် ၏ ဘဝနေဝင်ချိန်, အပိုင်း (၄၇)
“မြလှိုင် မင်း အစားငါသွားမယ်”
“ကောင်းသားပဲ။ ကိုတင်ကြိုင်နဲ့တွေ့ရင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မေးခဲ့ဗျာ”
ကိုသောင်းအိအား စခန်း ၂ သို့စေလွှတ်လိုက်ရပါတော့သည်။ စခန်း ၂ သို့ ကိုသောင်းအိ ရောက် လာသော အခါ ကိုတင်ကြိုင်ကို မတွေ့လိုက်ရတော့ပေ။ ထိုအခါ ဦးဖေသန်း ၏ ပြောပြချက်အရ သခင်စိုးတို့လူသိုက် သည် ဒေးဒရဲဂွကလေးတွင် ဌာနချုပ်ဖွင့်ထားကြောင်း၊ ဖျာပုံမြို့ပေါ် မှ ကိုထွန်းစိန်တုိ့ လူသိုက်အားလုံး ဂွ ကလေးရွာသို့ ရောက်ရှိနေကြကြောင်း အခိုင်အမာ သိလာရ ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ထိုသတင်းကိုကြားရ သည့်အတွက် မအံ့သြမိပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်တို့ လူသိုက် ရန်ကုန်မှ ဆင်းလာခဲ့စဉ် မှပင် မြေတိုင်း စာရေး မောင်တင်တို့လူသိုက်၏ အခြေအနေကို ကြည့်ရခြင်းဖြင့် သခင်စိုးမဟုတ်သည့်တိုင်အောင် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး ၏ စခန်းတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေကြောင်း ကောင်းစွာရိပ်မိခဲ့ပါသည်။ ကို ဆက်ဖတ်ရန် ........
“ဒါထက် ရှမ်းကွင်းကြီးမှာ ရဲဘော်တွေ ရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကော ဘာသိခဲ့လဲ”
"ကိုတင်ကြိုင်က ဦးဖေသန်းကို ပြောတာလို့ ပြောတယ်"
"ဒီလိုဆို ရှမ်းကွင်းကြီးကို ကျွန်တော် လိုက်သွားလိုက်မယ်"
သို့သော် ရှမ်းကွင်းကြီးကို ကျွန်တော် မရောက်ခဲ့ပေ။ ကျုံတာမှ ရဲဘော်ဘိုးကြီးတို့လူသိုက် ကျွန်တော့်ထံ ရောက်ရှိလာပြီး တမော့ကြီး-တမော့ဝတွင် ဖျာပုံမှ ရဲဘော်များ (နောင်သောအခါ ဗကပ ဖြစ် သူများ)ရောက် ရှိ လျက်ရှိကြောင်း၊ သင်တန်းပေးလျက်ရှိကြောင်းများ ကြားသိရပါသည်။ ထိုအချိန်က ကျွန်တော် သည် ပြည့်သူ့ အရေးတော်ပုံပါတီနှင့် ဆက်သွယ်သော တပ်မတော်အတွင်းမှ ရဲဘော်ဖြစ် ၍ ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံ ၏ မြေအောက်ပွိုင့်များမှာ ယခုသတင်းရသော တမော့ကြီး-တမော့ရွာများတွင် မထား ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ပင်ဖြစ်ပါ သည်။
ကျွန်တော်သည် များမြောင်လှသော တာဝန်များကြားမှ ဇနီးသည် သန်းသန်းအား သတိရနေမိသည်။ သန်းသန်းနှင့် ကျွန်တော် လူချင်းမတွေ့ရသည်မှာ ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။ အထူးသဖြင့် လူငယ်ဘာဝ ဇနီးသည်၏ မျက်နှာသည် တာဝန်များကြားမှပင် မကြာခဏ ပေါ်လာလေ့ရှိသည်။
သြော် ... မည်သည့်အချိန်အထိ ချစ်ဇနီးကို ယခုကဲ့သို့ ခွဲခွာနေရဦးမည်မသိဘဲ ရင်ထဲတွင် ချစ်သူနှင့် ကွေကွင်း ရသော မီးတောက် ကလေး လောင်မြိုင်လျက်ရှိနေပါသည်။
ရှုမ၀၊ တွဲ ၃၅၊ အမှတ် ၄၁၆၊ ဇန်န၀ါရီလ၊ ၁၉၈၂။
ရန်ကုန်သို့ထွက်ခွာရန်ကိစ္စ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်သို့သွားရန် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် သွားရောက်မှ အစစအဆင်ပြေဖွယ်ရှိခြင်းကြောင့် စခန်းတွင် နေသားတကျ အစီအစဉ် များ ကို စီမံဆောင်ရွက် ရပါသည်။ ရဲဘော်စံယျသည် တပ်သားကြီးအဆင့်ရှိသော်လည်း တာဝန် ၀တ္တရား များ ဆောင်ရွက်ရာ ၌ စေ့စပ်သေချာခြင်း၊ ယခုဆောက်လုပ်ထားသော စခန်းနှင့် နယ်မြေကျွမ်းကျင်မှု ရှိခြင်း တို့ ကြောင့် စခန်းတစ်ခုလုံး ကြီးကြပ်မှုကို ရဲဘော်စံယျအား လုံးဝဥဿုံ တာဝန်ပေးခဲ့ပြီး တပ်ကြပ်သောင်းအိ ဖျာပုံမြို့ပေါ် ရှိ ကျွန်တော်တို့ ချန်ထားရစ်သော ရဲဘော်များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ပေးအပ် ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ အမာခံရဲဘော်များဟူ၍ ဖျာပုံတွင် များများစားစား မကျန်ခဲ့သော် လည်း အောက်ကွင်းရွာမှ ရဲဘော်ကျော်လှ သည် လည်းကောင်း၊ ဖျာပုံသင်္ဘောတံတားဆိပ်မှ ဦးဖေသန်း၊ ဦးကျော်တို့သည် လည်းကောင်း၊ ဖျာပုံ ၇ လမ်း မှ ဦးအုန်းစိန်သည်လည်းကောင်း၊ ဖျာပုံအောင်မြေ ဘုံသာကျောင်းမှ ဦးစတိလသည်လည်းကောင်း ၎င်းတို့ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပြီး ကိုဝက်ကြီး သည် ခြေမြန်တော် ဆတ်သား အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါသည်။ ကျွန်တော်သည် တဲ၏ ကဲလားအပြင်ဘက် တွင် လပ်လျက်ပေါက်နေ သည့် သြဇာပင်ထက်မှ ဆက်ရန်ဖိုမ နှစ်ကောင်၏ ချစ်တင်းနှောနေသည်ကို ကြည့်၍ သက်ပြင်းချလိုက်မိသည်။ ဆက်ရက်ဖိုသည် ဆက်ရက်မကို ပူးကပ်ကာ တကျဲကျဲ အော်နေသည်။ ဆက်ရက်မက ဆက်ရက်ဖို တကျဲကျဲ အော်နေသည်ကို ကြည်နူးသဖြင့် ခေါင်းငဲ့ လိုက်၊ အမွေးဖွလိုက်ဖြင့် ဟန်ရေး ပြလျက်ရှိသည်။
ဤမြင်ကွင်းကို မြင်သောအခါ အိမ်တွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သော ဇနီးသည် သန်းသန်းကို သတိရမိသည်။ သန်းသန်းသည် ယခုအခါ ကျွန်တော် မည်သည့် နေရာဒေသတွင် ရောက်ရှိနေသည်ကိုပင် မသိရှာပေ။ အသက် ၂၀ ကျော်နှင့် အသက် ၂၀ မျှသာရှိကြသေးသော ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသည် အကြင်လင်မယားအဖြစ် ရောက်ရှိခဲ့ငြားလည်း သူတကာ ဇနီးမောင်နှံများကဲ့သို့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ယုယစွာ မနေထိုင်လိုက်ရဘဲ ၀ရမ်းပြေးတစ်ယောက်၏ ဇနီးသည် အဖြစ် နေ့တထိတ်ထိတ်၊ ညဉ့်တထိတ်ထိတ်ဖြင့် နေရသောအခါ ဖြစ်ပါချေသည်။ ကျွန်တော်၏ အတွေးတစ်ဝက် တစ်ပျက်မဆုံးမီ ဆက်ရက်မောင်နှံ ထပျံသွားကြသည်။ ထိုအခိုက်တဲဝတွင် အရိပ်တစ်ခု ထိုးသဖြင့် လှမ်းကြည့်လိုက်သောအခါ ကျွန်တော်တို့ ရဲဘော်ကြီးကိုဝက်ကြီးကို တွေ့လိုက်ရသဖြင့် ၀မ်းသာ အားရ နေရာမှထလျက် ၎င်း၏လက်ကို လှမ်းဆွဲလိုက်မိသည်။
ကျွန်တော်လည်း ကိုဝက်ကြီး၏လက်ထဲမှစာကို လှမ်းယူရင်း ကိုဝက်ကြီးကို တစ်ဆက်တည်း မေးလိုက်မိ သည်။ ကိုဝက်ကြီး ကမူ ကျွန်တော့်အမေးကို မဖြေသေးဘဲ ခါးပိုက်ထောင်ထဲမှ ပဲကြီးလှော်ထုပ်၊ တရုတ်ပဲမုန့်၊ ဂျပန်စီးရက်တစ်ဘူး ကို ထုတ်၍ပေးပါသည်။
"ငါ့ကောင်ကြီး၊ အစားဆင်းရဲ၊ အနေဆင်းရဲနဲ့ သနားလှသကွာ ... "
"ထားစမ်းပါ၊ ဘာထူးသေးလဲ၊ သန်းနဲ့ရော တွေ့သေးလား"
"နို့ ... ငါ့မြင်ရင် လှမ်းခေါ်နေမှာစိုးလို့ ငါ မင်းမိန်းမ အိမ်ဘက်ကို လုံးလုံး မလှည့်ဝံ့ဘူးကွာ။ နောက်ပြီး သန်းကြည် ကလည်း မင်း တို့နဲ့ အဆက်အသွယ် လုပ်ချင်တယ် ပြောတယ်ကွ။ ဒီကောင်မ မင်းကို အသက်နဲ့လဲပြီး ကူညီမယ့် ကောင်မ ကွ။ ဟင်း ... ဟင်း ... ဘကြီးဘုန်းကြီး ပေးတဲ့ဆေးက တယ်လဲ စွမ်းသကိုးကွ"
"တော်စမ်းပါ၊ သောက်ရေးထဲ ဒီရွှတ်နောက်တာတွေ ရှိနေရသေးတယ်"
"ဟ ... မြလှိုင်။ ငါ မင်းလုပ်နေတာကို ဘာရယ် ညာရယ် မစောကြောပါဘူး။ မင်းကို ချစ်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ မင်းခိုင်းတာ လုပ်တာပဲကွ။ သန်းကြည်လည်း ဒီလိုပဲ။ မင်းကို သူချစ်တယ်။ သူ ခုလုပ်နေတာ ငပုတွေသိရင် ရင်ခွဲ အသည်းဆားပက် နေလှမ်းသတ်မှာကွ"
မှန်ပါသည်။ ကိုဝက်ကြီးသည် လူတကာ၏ မျက်စိတွင် လူသော့သွမ်းအရက်သမားတစ်ဦးဖြစ်သကဲ့သို့ သန်းကြည် ဆိုသည်မှာလည်း တစ်လင်ကွာ၊ တစ်ခုလပ် ဆက်ကော့လပ်ကော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်။ ယခု တစ်ဖန် ကင်ပေတိုင် စစ်ဗိုလ်ကို လင်လုပ်ယူထားပြန်သောအခါ အမျိုးကောင်းသားသမီးများက နှာခေါင်းရှုံ့၍ အပြစ်ဆိုကြ ကုန်သည်။ ထိုအချိန်မျိုးတွင် ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက် ဖက်ဆစ်စနစ်ဆိုး ကို တော်လှန်ရန်စိုင်းပြင်းလျက်ရှိသော ကျွန်တော်တို့အား အသက်စွန့်၍ ကူညီနေသည်မှာ အံ့သြဖွယ်ရာ တစ်ပါးကဲ့သို့ရှိပါချေသည်။ တကယ်ကမူ ပုဂ္ဂိုလ်ခင်သဖြင့် တရားမင်ခြင်းပင် မဟုတ်ပါလော ...။
ကျွန်တော် ခေါ်လိုက်သဖြင့် ကင်းချထားသော ရဲဘော်များမှအပ ကျန်ရဲဘော်များ စုဝေးရောက်လာကြ သည်။ ကျွန်တော် သည် မဖြစ်စလောက် ပဲမုန့်ကလေးဆယ့်လေးငါးခုနှင့် ပဲလှော်ကလေး ၅၀ သားတို့ကို ခွဲဝေပေး လိုက်ပါသည်။ ရဲဘော်များသည် ဤတရုတ်ပဲမုန့်ကလေး တစ်ဆစ်တစ်ပိုင်းကိုပင် နတ်သုဒ္ဓါကဲ့သို့ သဘောထားကာ စားသောက်ထွက်ခွာသွားကြပါသည်။
"ကိုင်း ... ပြောစမ်း၊ သတင်း ဘာထူးလဲ "
"၀ဲကြီးဘက်မှာ တပ်အချို့၊ ကျိုက္ကဘာမှာ တပ်တချို့၊ ကနစိုကွင်းမှာ တပ်အချို့ရောက်နေတယ်"
"မသိဘူး ... "
ကျွန်တော်သည် ကိုဝက်ကြီးအား ဆက်၍ မမေးတော့ဘဲ စောစောကပေးသော စာကိုဖွင့်၍ ဖတ်လိုက်ပါ သည်။ ပထမသော် စာပါအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေခွဲမရသော်လည်း စာယူလာသူ စာပေးလိုက် သောစခန်းနှင့် စာပေးလာသူတို့အား စုစည်းကြည့်သောအခါ ယင်းစာ၏ သဘောကို ကောင်းစွာ နားလည်ပါ တော့သည်။ စာပါအကြောင်းအရာမှာ ကျုံကဒွန်းရွာမြေအောက်စခန်းမှ ရဲဘော်ချစ်ခင်မှတစ်ဆင့် ပေးလိုက် သောဗိုလ်ဘစိန် (ကွယ်လွန်၊ ကိုသုခ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး၏ နာမည်ဝှက်) ထံမှစာပင်ဖြစ်၍ ကျွန်တော့် အား၎င်းနှင့် အမြန်ဆုံးဆက်သွယ် သတင်းပို့ရန် အကြောင်းကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဗိုလ်ဘစိန်ထံမှ ပေးလိုက် သောစာ ဆုံးသွားသောအခါ ကိုဝက်ကြီးထံမှ ရရှိသော သတင်းများမှာ ခိုင်လုံကြောင်း ရင်ထဲတွင် မှတ်ချက် ချလိုက်မိပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဗိုလ်ဘစိန်ထံသို့ သတင်းပြန်ကြားသည့် စာတစ်စောင် ကို ရေးသားပြီး ကျွန်တော် လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေရသည့် တာဝန်နှင့် ဖျာပုံနယ်အတွင်း ကျွန်တော်၏ စည်းရုံးမှု၊ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် လူများ စာရင်းကိုပါ ရေးသား အစီရင်ခံလိုက်ပါသည်။ (မှတ်ချက်။ ဗိုလ်ဘစိန်သည် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကာလ တွင်ဖျာပုံမြို့၏ တာဝန်ခံဖြစ်ပြီး တိုင်းအမှတ် ၂၊ တပ်ရင်း ၈၀၏ တပ်ရင်းမှူးဖြစ်လာပါသည်။) ကျွန်တော် အစီရင်ခံစာ ရေးပြီးသောအခါ သကောင့်သား ကိုဝက်ကြီးသည် တဲ၏ ဖိနပ်ချွတ် တွင် နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော် နေသည် ကို တွေ့ရသဖြင့် ပေပေတေတေ ကျရာနေရာ တွင် ဖြစ် သလိုနေ၊ ဖြစ်သလိုစားတတ်သော သူ့အကျင့်ကို စိတ်ထဲမှ ချီးကျူးမိပါသည်။ ထို့နောက် ကိုဝက်ကြီးကိုနှိုး၍ စာကို သေချာ သိုသိပ်စွာ ယူဆောင်သွားရန် မှာကြားမိပါသည်။ ကိုဝက်ကြီးကမူ ကျွန်တော်ပြောနေသည်ကလို အလေးမမူသည့် အလား သူ့တွင်ပါလာသော ထင်းခုတ်ဓား၏ အရိုးကိုသာ သဲကြီးမဲကြီး ရိုက်ဖြုတ်ပြီး ကျွန်တော့်ကို စပ်ဖြီးဖြီး မျက်နှာဖြင့် ကြည့်ကာ ယူဆောင်သွားရမည့် ဓားရိုးအတွင်းထည့်၍ မျက်လုံးတစ်ဘက် မှိတ်ပြ လိုက်ပါသည်။
"ဘယ့်နှယ်လဲ ဂွတ်တယ် မဟုတ်လား"
"ဂွတ်ပါတယ်။ အားကြီး ဂွတ်ပါတယ်။ ကိုင်း - အချိန်ရှိတုန်း သွားပေတော့"
ရန်ကုန်သို့မသွားမီ၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၏ တာဝန်ခံတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုဘဆွေလေး(ရန်ကုန်ဘဆွေ)နှင့် အလွန် တွေ့လို လှပါသည်။ ကိုဆွေလေးနှင့်တွေ့ လျှင် ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံ ပါတီ မှ နောက်ဆုံး ညွှန်ကြားချက် များကို သိနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ ကိုဘဆွေလေး၏ မြစ်ဝျွန်းပေါ် ပြောက်ကျားစစ်နှင့် ပတ်သက်သော တိုက်ခိုက်ရေး စာတန်းညွှန်ကြားချက်များကို ဖတ်ရခြင်းကြောင့်လည်း သူ့ကို တွေ့လိုစိတ် ပြင်းပြမိပါသည်။ ကင်ပေတိုင် လည်း ၎င်းကို အသေရရ၊ အရှင်ရရ လိုချင်သည်။ ကိုဘဆွေလေးသည် ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံ ပါတီ ၏ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော် ရန်ကုန်တွင်ရှိစဉ်က သခင်ချစ် (ဆရာချစ်)သည် ကိုဘဆွေလေးနှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းများကို ပြောကြားခဲ့ဖူးပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော် မတွေ့ခဲ့ ရပေ။ ကျွန်တော်နှင့် ကိုဘဆွေလေးမှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် မဟုတ်ပေ။ စင်စစ် ကိုဘဆွေလေး သည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် မှ ကျွန်တော်တို့၏ သတင်းများအရ ဆိုလျှင် ကိုဘဆွေလေးသည် မည်သည့်ရွာတွင်မျှ နားနေခြင်း မရှိဘဲ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ လျင်မြန်စွာ ကူးလူးသွားလာနေကြောင်း သိရပါ သည်။ နောက်ဆုံးတွင် မူ ကိုဘဆွေလေးနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ရေးကို လက်လျော့လိုက်ပြီး ရန်ကုန်သို့ သွားရောက် ရမည့် အစီအစဉ်ကိုသာ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
ရန်ကုန်သို့ မထွက်ခွာမီ တစ်ရက်အလိုတွင် ကျွန်တော်တို့ မြေအောက်မှ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ချိန်းဆို ၍ တွေ့ဆုံကြပါသည်။ ယင်းတွေ့ဆုံပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ဖျာပုံအောင်မြေဘုံသာ ကျောင်းအတွင်းရှိ သိမ်အတွင်း၌ ကျင်းပကြပါသည်။ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေကို ရဟန်းတော်များက တ်ာဝန်ယူ၍ ကင်းစောင့် ပေးကြပါသည်။ ဖျာပုံအောင်မြေ ဘုံသာကျောင်းတိုက်သည် စာသင်တိုက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်၍ ရဟန်း ၇၀ ကျော်မျှ သီတင်း သုံးတော်မူ ပါသည်။ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်မှာ ဦးနာယဒဖြစ်ပါသည်။ လက်ထောက် ဆရာတော်များမှာ ဦးဝိလစက္က၊ ဦးကောသလ္လ၊ ဦးစတိလတို့ဖြစ်ကြပါသည်။ လက်ထောက်ဆရာတော်များမှာ ရဟန်းပျိုများဖြစ်ကြ သည့်အတိုင်း ကျွန်တော်တို့၏ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကူညီကြပါသည်။ ကျွန်တော်၏ မိဘများ၏ ဆရာဒကာရင်းများလည်း ဖြစ်ကြပါသည်။ ယင်းအစည်းအဝေး တွင် နယ်အူခြေအနေ အရပ်ရပ်၊ ရန်သူလှုပ်ရှားမှု၊ လက်နက် အင်အား ငွေကြေးအခြေအနေ များ ကိုပါ ပြည့်စုံ စွာ ဆွေးနွေးနိုင် ခဲ့ကြပါသည်။ တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် အချိန်းအချက် များကိုလည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါ သည်။ ထိုညက စခန်းသို့ ရောက်သောအခါ နံနက် မိုးစင်စင်လင်းလျက်ရှိပါပြီ။
"ကိုမြလှိုင် ... ဒီည သွားဖြစ်သလား "
"သွားရမယ်။ မနက်ဖြန် အရောက်လာမယ့်အကြောင်း သတင်းပို့ထားတယ်"
ကိုသိန်းဖေသည် ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်သို့ သွားရောက်ရေးအတွက် အသေးစိတ် အစီအစဉ်များကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကိုသိန်းဖေ၏ စီစဉ်ပေးချက်အရ ထိုညက ဖျာပုံမြို့မှ ကိုစိန်ဘန်းဆိုသူ ပိုင်ဆိုင်သော "မင်းမနိုင်" အမည်ရှိ ငါးစိမ်းမော်တော်၏ ပဲ့ခန်းအတွင်းတွင် လိုက်ပါခွင့် ရခဲ့ပါသည်။ မော်တော်မှာ ငါးစိမ်းများ ကို ရန်ကုန်သို့ တင်ပို့သော မော်တော်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် မော်တော်တစ်စင်းလုံး ငါးညှီနံ့များဖြင့် နံစော်နေ ပါသည်။ သို့သော် ကိုစိန်ဘန်းတို့ ညီအစ်ကိုမှာ ကျွန်တော်ကဲ့သို့ ရာဇ၀တ်ကောင် တစ်ပိုင်းကို သက်စွန့်ဆံဖျား လက်ခံခေါ်ယူဝံ့ခြင်းကပင် ၎င်းတို့၏ မျိုးချစ်စိတ်ကို ချီးကျူးရမည်သာဖြစ်ပါသည်။ မော်တော်ပေါ်တွင် လူသူလေးပါး မပါခြင်းကြောင့် ကျွန်တော့်အတွက် အနည်းငယ် လွတ်လပ်မှု ရရှိပါသည်။
" ဆရာ၊ ကျွန်တော်တို့ ကျိုက်လတ်ကို ခဏကပ်ရဦးမယ် ဆရာ"
"ကျွန်တော်တို့ မော်တော်က အသွားကုန် အပြန်ကုန် ကျိုက်လတ်မှာ ချပေးနေကျဆိုတော့ မ၀င်ရင် မဖြစ်ဘဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၀ မိနစ်အတွင်း ပြီးအောင် တင်ပါမယ်။ ဆရာလည်း အထဲမှာ ခဏနေရင် ရပါတယ်"
ကျွန်တော်သည် ဆက်၍ မပြောတော့ဘဲ ငြိမ်နေလိုက်သည်။ မကြာမီ ကျိုက်လတ် အ၀င် မှ ကေဘိုထိုင်ကင်းများထံမှ မော်တော်ကို လှမ်းမေးနေသောအသံ ကြားရပြီး စက်အရှိန်လျော့သွားသံကို သတိထား လိုက်မိပါသည်။
"ဆရာရေ ... ရန်ကုန်လင်းအားကြီး ဈေးအမီ မောင်းရမှာမို့ သွားခွင့်ပြုပါဆရာ"
ကိုစိန်ဘန်းသည် အသင့်ခတ်ထားသော ပုစွန်များကို ကမ်း၍ပေး လိုက်ရင်း မော်တော်ကို ဆက်၍ မောင်းပါ တော့ သည်။ ထိုအခါမှ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှ တဒိတ်ဒိတ် ခုန်နေသော သွေးခုန်နှုန်းသည် ပုံမှန်အခြေအနေ သို့ ရောက်သွားပါတော့သည်။
"ဆရာ ... ကျိုက်လတ် မှာ ကပ်ပြီး၊ သေတ္တာနှစ်လုံး ချခဲ့ပြီးရင် စိတ်ချရပါပြီ"
"ပြီးပြီလေ။ ဒီကောင်တွေစစ်ဟာ ပုစွန်ဟင်းစားပေးခဲ့တော့ပြီးပြီပေါ့။ ဟင်း ... ဟင်း "
" လမ်းမှာ ဘယ်ဝင်ရဦးမှာလဲ "
"ရန်ကုန်ကို တိုက်ရိုက်ပဲ ဆရာ"
ကိုစိန်ဘန်း၏ စကားမဆုံးမီပင် ကျိုက်လတ်ဆိပ်ကမ်းသို့ မော်တော်ကပ်ကာ ၎င်း၏ညီဖြစ်သူ ကိုချစ်လှိုင်နှင့် မော်တော်သား တစ်ယောက်တို့ ဆိပ်ခံပေါ်သို့ သေတ္တာနှစ်လုံးကို အမြန်ချ၍ ထွက်ခွာခဲ့ကြပါသည်။ ကျိုက်လတ် မှ ထွက်၍ မော်တော်ပဲ့စင်ပေါ်သို့ ကျွန်တော်ထိုင်မိသောအခါ မြစ်ပြင်မှ လေနုအေးသည် ညဉ့်ငှက် များ တေးသံနှင့်အတူ လေဟုန်စီး၍ ကျွန်တော့်ထံသို့ ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ညဉ့်သည် မည်းမှောင်နေ သကဲ့သို့ ကျွန်တော့်ဘ၀ခရီးသည်လည်း ကြမ်းတမ်းလွန်းလှပါသည်တကား။
ဗိုလ်လက်ျာ ကို မောင်ခိုင်လမ်းမှ သူဌေးဦးဘိုးလျ၏ သုံးထပ်တိုက်ပေါ်တွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံရပါသည်။ မျက်မှန်ချွတ် ၍ တရုတ်အမျိုးသားတစ်ဦးကဲ့သို့ ၀တ်စားထားသော ဗိုလ်လက်ျာ၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ရင်း ပြုံးမိပါသည်။ ဗိုလ်လက်ျာနှင့်အတူ ကိုမြသန်း (ဖျာပုံ ကော်ပိုရေးရှင်း)၊ ကိုတင်အေး (အမ်တင်အေး)၊ အခြား အမည် မသိ ၃-၄ဦးတို့လည်းရှိကြသည်။ ကျွန်တော်သည် ဗိုလ်လက်ျာကို ဖျာပုံမြို့နယ် အတွင်း ပြည်သူ့အရေး တော်ပုံအဖွဲ့၏ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ ကို အသေးစိတ် အစီရင်ခံပါသည်။ ထိုအခါ ဗိုလ်လက်ျာသည် ဖျာပုံမြို့နယ်၏ လက်ရှိ အခြေအနေမှာ လွန်စွာ အားရကျေနပ် ဖွယ်ရှိကြောင်း၊ တွံတေး မူးလမန်း စခန်းမှ တပ်ရင်း ၁ သည် ဖျာပုံမြို့နယ်တွင်း သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပါသည်။ ကျွန်တော်က ရန်ကုန်မှ ထွက်ခွာ ခဲ့စဉ်က ဒေးဒရဲမှ ရဲဘော်များနှင့် မတွေ့ရသည့်ကိစ္စကို ပြောပြရင်း ဂွကလေးရွာတွင် ဖျာပုံမှ အာရှလူငယ် အချို့နှင့် နိုင်ငံရေးသမား လူငယ်အချို့ကို တွေ့ခဲ့ကြောင်း ပြောပြသောအခါ သခင်စိုးသည် ဂွကလေးရွာတွင် စခန်းချ လျက်ရှိပြီး နိုင်ငံရေးသင်တန်းများ ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ၎င်းနှင့်လည်း အဆက်အသွယ် ရှိကြောင်း များကို ပြောပြပါသည်။
"မြလှိုင်၊ မင်း ဒီနေ့ပဲ ပြန်တော့။ တို့ သန်ဘက်ခါ ထွက်ခဲ့မယ်"
ဗိုလ်လက်ျာထံတွင် စခန်းလမ်းပြအဖြစ် ရဲဘော် လှညိမ်းရှိသည်။ ရဲဘော်လှညိမ်းသည် ကျွန်တော်၏ တပ်မှ တပ်သားဖြစ်သည်။ ဗိုလ်လက်ျာအနေဖြင့် လက်တိုလက်တောင်းခိုင်းရန်နှင့် ဖျာပုံစခန်းသို့ ဗိုလ်လက်ျာနှင့် အဖွဲ့အား ခေါ်ဆောင်လာနိုင်ရန်တို့အတွက် ကြိုတင်ပို့ထားသော ရဲဘော်ဖြစ်ပါသည်။ ဗိုလ်လက်ျာက ကျွန်တော့် အား ယနေ့ပင် ဖျာပုံသို့ပြန်ရန် ညွှန်ကြားသော်လည်း ကျွန်တော့်အနေဖြင့် မည်သို့မည်ပုံ ပြန်ရမည်ကို စဉ်းစားရင်း စိတ်ရှုပ်ထွေး လျက်ရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယခုအချိန်တွင် ကျွန်တော်သည် စစ်ဝတ် ၀တ်၍လည်း မဖြစ်နိုင်သည့်ပြင် ဖျာပုံသင်္ဘောဆိပ်မှ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ပြန်ရန်လည်း မလွယ်ကူသောအခါ ဖြစ်ပါသည်။ ဗမာ့တပ်မတော်သည် ဖက်ဆစ်တို့အား လက်နက်စွဲကိုင် တော်လှန်ရန်အတွက် တပ်ထွက်သွားခဲ့လေပြီ။
မောင်ခိုင်လမ်းမှ ဗိုလ်လက်ျာနှင့် တွေ့ဆုံပြီး၍ ထွက်လာသောအခါ နေ့လယ် မွန်းတီးချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့ ၏ ချစ်ချစ်တောက် ပူပြင်းသော နေရောင်အောက်၌ ကျွန်တော် သည် ယောင်တိယောင်ချာဖြင့် ခြေဦး တည့်ရာ သို့ လျှောက်နေမိသည်။ ဖျာပုံပြန်ရေးအတွက် ခေါင်းထဲမှ ဥာဏ် အကျိုးအပဲ့ကလေးများကို ညှစ်ထုတ်နေမိသည်။ ထိုအခိုက် ကိုကြီးချစ်တို့မိသားစုကို သတိရမိသည်။ ကိုကြီးချစ်တို့ မိသားစုသည် ဗုံးဘေးစက်သေနတ်ဘေးမှ ကင်းရာ တာမွေဗျိုင်းရေအိုးစင်ထိပ်မှ အိမ်ကြီးသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လျက်ရှိကြ သည်။ (ယခုပါတီ စာနယ်ဇင်း အဆောက်အအုံဘေးမှ ၀င်းအတွင်းကအိမ်ကြီး)။ ကျွန်တော်လည်း မိမိအကြံ ဥာဏ်အတွက် ၀မ်းသာ စွာဖြင့် လျှောက်နေသော ခြေလှမ်းများကို ရေကျော်ဘက်ဆီသို့ ဦးတည်လိုက်ပါတော့သည်။
လမ်းမပေါ် ၌ တံလျှပ်များ တရိပ်ရိပ်ပြေးလျက်ရှိသည်။
ချွေးသီးချွေးပေါက်များသည် ခေါင်းမှ တစ်ကိုယ်လုံး စီးဆင်းလျက်ရှိသည်မှာ ရေချိုးထားသည့်နှယ်ပင်။ ကျွန်တော်သည် လမ်းလျှောက်ရင်း မိမိဘ၀ကို မိမိစဉ်းစားရင်း ပြုံးလိုက်မိသည်။ ကြေးရတတ်မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်း မှ ပေါက်ဖွားလာခဲ့သော တစ်ခါက ဘ၀လှလှကလေးသည် အိပ်မက်သဖွယ် ကျန်ရစ်ခဲ့လေပြီ။ ၅၅၀၀ ပိုးပျော့အင်္ကျီ၊ ဘန်ကောက်လုဲံခည် ထည်လဲဝတ်၍ ဂိုးဖလိပ်စီးကရက်ကို ညှပ်ကာ မိဘပေးသော ပိုက်ဆံ၊ မိဘမသိ ဘဲ အလစ်သုတ်၍ရသော ပိုက်ဆံများကို ဖြန့်ခင်း၍ နေထိုင်လာခဲ့သော ကျွန်တော်သည် ယခု အိတ်ကပ် ထဲတွင် ဂျပန်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပင်မပြည့်ဘဲ ရှိနေပါသည်။ လက်ဖက်ရည် တစ်ခွက် ကို ဒေါ်လာအစိတ်၊ ထမင်းတစ်ပွဲ ဒေါ်လာ ၂၀၀ ပေးနေရသောအချိန်တွင် ကျွန်တော် အတိတ်ကို တမ်းတရုံမှ တစ်ပါး အခြားမတတ်နိုင်ပြီ။ သို့သော် ကျွန်တော်သည် အံတင်း၍လည်းကောင်း၊ မာန်သွင်း၍လည်းကောင်း၊ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး ၏ အားမာန်ဖြင့် ပျော်ရွှင်စွာပင် ပေတရာကတ္တရာလမ်းပေါ်တွင် လျှောက်နေပါသည်။ ဘင်ဂါလီစု သို့ ရောက်သောအခါ ကျွန်တော့်ခြေထောက်များ နာကျင်လာသည်။ လမ်းဘေးသို့ ကြည့်သော အခါ ကုလား လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို တွေ့သဖြင့် ၀မ်းသာအားရ ၀င်လိုက်မိသည်။
"လက်ဖက်ရည် သောက်မယ်လား၊ ကောင်လေး"
ကြံသကာရည်များ လောင်းထားသော ခါဂျာမုန့်တစ်ခုကို လာချပေးသည်။ ဂျုံမဟုတ်၊ ဆန်မဟုတ်၊ မည်သည့်အရာနှင့် လုပ်ထားသည်ကို မသိသော ခါဂျာမုန့်သည် အုတ်ခဲစတစ်ခုကို ၀ါးရသည့်နှယ် ချိုးချိုး ချွတ်ချွတ်မြည်ကာ လည်ချောင်းအတွင်းသို့ ကြမ်းတမ်းစွာ သက်ဆင်းသွားသည်။ ကျွန်တော်သည် မှိုနံ့သင်း သင်းအရသာဖြင့် ပြည့်စုံသော ဆာဒါးကို တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ဆင့်၍သောက်လိုက်သည်။ ကိုယ်မှ စီးဆင်း သောချွေးများသည် အရိပ်ကို လိုက်သောခဏတာတွင် အေးမြသွားပါသည်။ အမော လည်း ပြေလောက်ပြီ ဖြစ်သဖြင့် ကျွန်တော် ခရီးဆက်ရန်အတွက် ထလိုက်ကာ ကျသင့်သော မုန့်ဖိုးဒေါ်လာ အစိတ် ကို ထုတ်ပေး လိုက်ပါသည်။
"ဆာဒါးဖိုး ၅ ဒေါ်လာ ပေးဦးလေ၊ ကောင်လေး "
"ဟ ... ဆာဒါးက အလကား၊ မဟုတ်လား ... ကာကာကြီးရဲ့"
"မရဘူး၊ ၅ ဒေါ်လာပဲ "
ကျွန်တော် မည်သို့မျှ ဆက်မပြောတော့ပဲ ၅ ဒေါ်လာတန်တစ်ရွက်ပစ်ပေးလိုက်ပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မျ ထွက်လာခဲ့သည်။ လမ်းပေါ်တွင် လူသူလေးပါး ရှင်းနေသော်ူလည်း ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင်မူ ကျွန်တော့် တူရှုသို့ ပျင်းရိစွာ နင်းလာနေသော ဆိုက်ကားတစ်စီးကို မြင်လိုက်ရသဖြင့် ၀မ်းသာသွားပါသည်။ ဆိုက်ကားဆရာ သည် ဤမျှပူပြင်းသော နေရောင်ခြည်အောက်တွင် လသာသာခရီးနှင့်သကဲ့သို့ ဖြည်းညှင်းစွာ နင်းနေခြင်း အတွက် စိတ်ထဲတွင် အံ့သြနေမိသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် ကျွန်တော့် အနီးသို့ ရောက်လာပါသည်။
"ကျုပ် ထမင်းစားဦးမှာဗျ၊ စောင့်နိုင်ရင် လိုက်တာပေါ့ "
"ဘီလူးမ ဈေးနောက်က သင်္ချိဲုင်းထဲမှာ။ သွားမှာဆို လာဗျာ"
ဆိုက်ကားဆရာက စိတ်မရှည်ဟန်ဖြင့် ကျွန်တော့်အား ငေါက်သည်။
ကျွန်တော်သည် အမေးအမြန်းမထူတော့ဘဲ ဆိုက်ကားပေါ်တက်ကာ ၎င်းခေါ်ဆောင်ရာသို့ လိုက်ပါသွားပါ သည်။ ဆိုက်ကားဆရာ၏ အိမ်ဆိုသည်မှာ လုံချည် ၂ ထည်ကို ဆက်၍ ၀ါးလုံး ၄ လုံး ထောက် ထားသော ဂေဟာဖြစ်သည်။ ဆိုက်ကားဆရာတွင် ဇနီးသားသမီး ရှိပုံမရဟုထင်သည်။ ထဘီရင်ရှား ထားသော အမယ် အိုတစ်ဦးသည် ဆိုက်ကားဆရာ အလာကို မျှော်နေရင်း ပူပန်မှုကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားနေလေ သည်။ မှန်ပါ သည်။ စစ်ကာလဆိုသည်မှာ နေ့မြင်ညပျောက် ကာလမျိုးပဲ မဟုတ် ပါလား။ ကျွန်တော်သည် မိခင်အိုအား ဆိုက်ကားနင်း၍ စွန့်စားလုပ်ကိုင်ကျွေးမွေးသော ထိုသူအား စိတ်ထဲမှ သာဓုခေါ်မိသည်။
"သားလေး၊ ထမင်းစားမယ် မဟုတ်လား "
"စားလာခဲ့ပြီ အဒေါ်၊ စားပါ၊ ကျွန်တော်က ပါစင်ဂျာပါ "
"စားပါဦး ... "
ထမင်းပန်းကန်တွင် နီကြင့်ကြင့် ဆန်ကွဲထမင်းအမောက်ကို ပုံ၍ ငါးပိဟု ထင်ရသော မည်းမည်းသဏ္ဍာန် လက်မခန့် အတုံးတစ်တုံးကို တွေ့ရသည်။ ဆိုက်ကားဆရာ၏ ထမင်းပွဲက ဤမျှသာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သည် ရင်နာစွာ ကြည့်မိသည်။ သက်ပြင်းကို အကြိမ်ကြိမ်ချမိသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ၎င်း၏ အိမ်မှ ထွက်လာသောအခါ ဆိုက်ကားဆရာ၏ မိခင်လက်သို့ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ထည့်လိုက်ပါသည်။
အမေအို၏ ကျယ်လောင်စွာ ဆုပေးသတည်း ဝေး၍ဝေး၍ ကျန်ခဲ့ပါသည်။
ကိုကြီးချစ်တို့အိမ်တွင် မိသားစုအားလုံးနှင့် တွေ့ရပါသည်။ ကျွန်တော်က အချိန်နည်းသဖြင့် ကိုကြီးချစ် အားတိုတိုနှင့် လိုရင်းကို ရှင်းပြပြီး ကျွန်တော် ဖျာပုံပြန်ရေးအတွက် ကမ်းနားတွင် "မင်းမနိုင်" မော်တော်ကို စုံစမ်းပေးရန် အပူကပ်ရပါသည်။ ကိုကြီးချစ်သည် ကျွန်တော်အကူအညီ တောင်းခံမှုကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် သဘောတူသော်လည်း "မင်းမနိုင်" မော်တော်ကို ရှာဖွေရန် ဟူသော အချက်ကိုမူ မရေရာလွန်းသဖြင့် စိတ်ပျက်ကြောင်းပြောပါသည်။
"မောင်မောင်ရယ် ... "မင်းမနိုင်"တွေ့ရင် မင်းဘယ်လို ဖျာပုံပြန်မလဲ။
ကိုလှဖေတို့က သန်ဘက်ခါ ရောက်တော့မှာဆိုတော့ မင်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ပြန်ဖို့လိုတယ်"
"ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော် ရက်တွက်ကြည့်တော့ "မင်းမနိုင်" မော်တော်ဟာ ရှိနိုင်တယ်။ ကိုကြီးချစ်"
"အေး ... ငါ အခုသွားမယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ငါစီစဉ်လာခဲ့မယ်ကွာ"
ကိုကြီးချစ်သည် ကျွန်တော်နှင့် စကားပြော၍ ပြီးလျှင်ပြီးချင်း ဗျိုင်းရေအိုးစင်လမ်းထဲမှ မြင်းလှည်းတစ်စီးကို ငှား၍ ထွက်ခွာသွားပါသည်။ ကိုကြီးချစ်တစ်ယောက် ညနေ၀င်သည်အထိ ပြန်မလာသဖြင့် စိတ်ပူပင်ရပြန် ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်၍ မရနိုင်တော့ဘဲ ခြံဝကိုသာ လှမ်းမျှော်ရင်း ကိုကြီးအလာကို မျှော်မိ သည်။ ကိုကြီးချစ်၏ဇနီး ဒေါ်နုနုကမူ ကျွန်တော့်အား မောင်ငယ်သဖွယ် စိတ်မပူရန်၊ တာမွေနှင့် ရန်ကုန် ကမ်းနားမှာ အလွန်ဝေးလံကြောင်းပြောပါသည်။ ည ၇ နာရီ ထိုးသွားပေပြီး။ ကိုကြီးချစ်၏ အရိပ် အယောင်ကို လုံးဝမမြင်ရသေးပေ။ ကျွန်တော့်အား ထမင်းစားရန်ပြောသဖြင့် ထမင်းဝိုင်းသို့ စိတ်မပါဘဲ ၀င်ထိုင်လိုက်ရသည်။ ထိုအခိုက် အိမ်ရှေ့တွင် မြင်းလှည်းဆိုက်သံကြားရပြီးနောက် ကိုကြီးချစ်၏ စကား ပြောသံကို ကြားလိုက်ရသဖြင့် ထမင်းလုတ်ကို ပါးစပ်ထဲသို့ မသွင်းဖြစ်တော့ဘဲ နောက်ဖေးမှ အပြေးထွက် လာလိုက်ပါသည်။
"ဟော ... ကိုကြီးချစ်၊ ဟာ ... ကိုချစ်လှိုင်"
ကျွန်တော့်နှုတ်မှ ၀မ်းသာအားရ အော်လိုက်မိသည်။ ကိုကြီးချစ်သည် အလွန်မောပန်းလာဟန်ဖြင့် ကျွန်တော့်အား စကားပြန်မပြောသေးဘဲ နောက်မှီကုလားထိုင်ပေါ်သို့ ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်ကာ ဇနီးဒေါ်နုနု အား လေသံဖြင့် ရေတစ်ခွက် ယူလာရန်ပြောပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ကိုကြီးချစ်အား အလွန် အားနာသဖြင့် တောင်းပန်စကားဆိုမိပါသည်။ ကိုကြီးချစ်၏ မိသားစုတစ်ခုလုံးသည် ကျွန်တော်နှင့် ဗိုလ်လက်ျာ၊ ဒေါက်တာလှရွှေစသည့် ညီအစ်ကိုတစ်စုအနွံအတာကို အချိန်မရွေးခံသော မိသားစုဖြစ်ပါ သည်။ ၎င်းတို့သည် မိမိငွေ၊ မိမိကား၊ မိမိစရိတ်ဖြင့် အချိန်မရွေး ဆောင်ရွက်ပေးသော ကျေးဇူးရှင်များလည်း ဖြစ်ပါသည်။
"အင်း ... ဟင်း ... ဟင်း။ မောလိုက်တာ မောင်မောင်ရယ်။ မင်းပြောတဲ့ "မင်းမနိုင်" တော်တော်ကို ကမ်းနားမှာ အဆင်သင့် သွားတွေ့တယ် ဆိုရင်ပဲငါ ထီပေါက်လောက် ၀မ်းသာသွားတယ်ကွ"
"ကျွန်တော်က ကိုကြီးချစ် သိပ်ကြာနေလို့ စိုးရိမ်နေတာဗျ"
"ဟ ... မောင်မောင်၊ မြင်းလှည်းနဲ့ ကမ်းနားကို သွားရတာကွ၊ နောက်ပြီး မြင်းလှည်းကြည့်ဦး။ ရှူနာရှိုက်ကုန်းကွ။ လမ်း တွင် အမောဆို့မသေတာ ကံကောင်းတယ် အောက်မေ့ရမယ်။ မြင်းလှည်းဆရာက ငါ့အသိ ငါ့မိတ်ဆွေမို့ လိုက် လာတာ။ ဒီခရီးမျိုး ဘယ်သူလိုက်မလဲ မောင်မောင်ရယ်။ ဟင်း ... ဟင်း ။ အေး၊ ငါကမ်းနားမှ ဘယ်လောက်စောင့် ရတယ်ဆိုတာ မင်းလူသာမေးကြည့်တော့ကွ... "
ကိုကြီးချစ် ကမ်းနား သို့ ရောက်သွားသောအချိန်တွင် "မင်းမနိုင်" မော်တော်ကို အဆင်သင့် တွေ့သော် လည်း မော်တော်စောင့် သူငယ်မှလွဲ၍ မည်သူမျှ မရှိသဖြင့် မော်တော်ရှင်များ လာသည်အထိ ထိုင်စောင့်နေ ရပြန်ပါသည်။
ကိုစိန်ဘန်းတို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်မှာ ဖျာပုံတင်မည့်ကုန်၊ ကျိုက်လတ်တင်မည့် ကုန်များကို ပွဲရုံများသို့ လိုက်လံကောက်ခံနေရသဖြင့် ညမှောင်သည့်အထိ ပြန်မလာဘဲ ရှိပါသည်။ ပြန်လာသောအခါ ကိုကြီးချစ်၏ အကျိုး အကြောင်း ပြောပြချက်ကို မယုံတစ်ဝက် ယုံတစ်ချက်ဖြင့် ဟိုလိုလို သည်လိုလိုလုပ်ကာ အကဲစမ်းကြပြန် သည်။ ထို့နောက်တွင်မှ ကိုကြီးချစ်၏ ကြိုးပမ်းချက်ဖြင့် ကိုစိန်ဘန်း၏ ညီ ကိုချစ်တစ်ယောက် စိတ်ချလက်ချ ကိုကြီးချစ် နောက်သို့ လိုက်လာခဲ့ကြ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
"ကိုင်း ... ဒီလိုဆို အချိန်မဆွဲနဲ့။ ကျွန်တော်တို့ ရေအမီ ထွက်ရအောင်၊ သွားကြစို့"
"ကိုကြီးချစ် မြင်းလှည်းခ ဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲ"
"ပေးအနေနဲ့ ငါစိုက်ပေးလိုက်မယ်။ ခဏစောင့်ဦး။ ကိုသိန်းမောင် မြင်းသွားလဲနေတယ်။ မင်းတို့မဟုတ်ရင် ဒီနေ့ည ရန်ကုန်ထဲ ပြန်ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူးကွ"
မြင်းလှည်းဆရာ ကိုသိန်းမောင်သည် မကြာမီ မြင်းတောင့် မြင်းချော တစ်ကောင် ကသာ မြင်းလှည်း တစ်စီး ဖြင့်ရောက်လာသည်။ ကိုသိန်းမောင်၏ မျက်နှာ ကို မြင်သောအခါ လူကြမ်းမင်းသား လှမောင်ကြီးကို သတိရ လိုက်မိသည်။ သူ့ဥပဓိရုပ် သည် မြင်းလှည်းမောင်းသူ မဟုတ်တန်ရာ။
" ဆရာချစ်၊ ဆရာ့လူတွေ ပြန်ပို့ကြစို့"
" ကြည့်သာ ခေါ်သွားပေတော့ ကိုသိန်းမောင်ရေ။ ကျုပ်တော့ မြင်းလှည်းဆွဲတဲ့ မြင်းထက် မောနေပြီဗျ။ ဟဲ ... ဟဲ ... "
" စိတ်ချပါ ဆရာချစ်။ ကဲ .... သွားစို့"
ကိုသိန်းမောင် ဆိုသူသည် လမ်းခရီး တစ်လျှောက်လုံး ကျွန်တော်တို့အား စကားပြောဆိုခြင်း မပြုဘဲ သူ့မြင်း ကိုသာ ကြိမ်တို့၍ သွက်သွက်မောင်းလာခဲ့သည်။ ညောင်ပင်လေးဈေးသို့ ရောက်သောအခါ မြင်းလှည်းကို အရှိန်သတ် ၍ရပ်ကာ ဤနေရာမှဆင်းရန် စကားဆိုသည်။
"ဒီကဆင်းသွားကြ ငါ့ညီတို့ ... "
"ဟုတ်ကဲ့၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဦးလေးဓ
"ဦးလေးအရွယ် မဟုတ်သေးပါဘူး ငါ့ညီရယ်။ ဟွတ် ... ဟွတ် ... ဟွတ် ... "
"ဆောရီးဗျာ၊ ဒါနဲ့ မြင်းလှည်းခ"
"နေပါစေ ငါ့ညီရယ်။ မင်း နောင်တော် သခင်လှဖေကို ပြောလိုက်။ သထုံဟောတုန်းက တစ်ခန်းကျော် က မြင်းသမားသိန်းမောင် က လိုက်ပို့ပေးတယ်လို့ကြားလား"
"တောက် ... တောက် ... တောက် ... တောက်"
လမ်းပေါ် သို့ လိမ့်ထွက်သွားသော မြင်းခွာသံလေးသည် ကျွန်တော်၏ နားတွင် အလွန်သာယာသော တေးသံ လွင်လွင်နှင့်မခြား ခံစားလိုက်ရသည်။
Posted by SHWE ZIN U at 11:04 PM0comments Links to this post
ပတ္တမြားခင် ၏ အတိတ်လမ်း ကိုပြန်လျှောက်ခြင်း, အပိုင်း (၃၅)
အကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့ တစ်မိနစ်လေး နောက်ကျသွားတာကြောင့် ကိုယ်စီးရမဲ့လေယာဉ် လွတ်သွားပြီး အဲဒီလေယာဉ် ပျက်ကျ တော့အသက်ဘေးက ချမ်းသာသွားတာမျိုးတွေ၊ သေသေချာချာ ချိန်းထားလျက်နဲ့ တစ်မိ နစ်လောက် လွဲသွားတာနဲ့ ချစ်တဲ့သူချင်း တစ်သက်စာ ကွေကွင်း သွားရတာ မျိုးတွေ။
တစ်မိနစ် ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလလေးဟာ ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ လူတစ်ယောက် အတွက်အ ကောင်း အဆိုးဖြစ်ရပ်တွေ ဦးတည်ပြောင်းလဲ သွားတဲ့အထိ စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ ကသာဒေါ်စောနု အလာနဲ့ တစ်မိနစ်လောက် လွဲသွားခဲ့ရင် လက်ရှိဘ၀ကိုရောက်မလာဘဲ ကျွန်မဘ၀တစ်မျိုး တစ်ဖုံ ပြောင်းလဲ ဖွယ်ရာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်ကတော့ Miracleဆိုတာ မိမိကို စောင့်ရှောက်ကြသော နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များ ရဲ့ ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်ရပ် တစ်ခု ပါပဲလေ။ ကို ဆက်ဖတ်ရန် ..........
ကိစ္စတစ်ခုအောင်မြင်မှုအတွက် အချက်(၄)ချက် လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
(၁) အခြေခံရည်ရွယ်ချက်ကောင်း ရှိရမယ်။
(၂) ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာလည်း ရတနာသုံးပါး ဦးထိပ်ထားတဲ့ စိတ်ထားနဲ့ လုပ်ရမယ်။
(၃) ယုံကြည်စိတ်ပြင်းပြင်းနဲ့ လုပ်ရမယ်။
(၄) မဆုတ်မနစ်သော လုံ့လနဲ့ လုပ်ရမယ်တဲ့။
ကျွန်မလည်း ကိုယ်ရည်မှန်ထားတဲ့ ကိစ္စအတွက် အထက်ပါ လေးချက်နဲ့ညီအောင် ကြိုးစားပြီး လှုပ်ရှားပြေးလွှား လိုက်ရတာ စိတ်မောလူမော ပါပဲလေ။ ဒေါက်တာဒေါ်စောနုဆီ ကထောက်ခံချက် ရရှိလာတော့ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးကို ပြေး၊ မာမီအတွက် မှတ်ပုံတင်ရိုက်ခွင့်ရအောင်ယူ၊ ဓာတ်ပုံ အမြန်ရိုက်ပြီး တာနဲ့ နိုင်ငံကူးလတ် မှတ်လျှောက်နဲ့ တစ်မိနစ်၊ တစ်စက္ကန့်မနား လှုပ်ရှားရပါတော့တယ်။ ဒီကြားထဲမှာ လည်း သားနဲ့သမီးတို့သွားဖို့အရေးတွေလည်းလိုက်ပြီး လုံးပန်းရ၊ ဗီဇာကိစ္စ၊ လေယာဉ်လက်မှတ် ကိစ္စ၊ ထွက်ခွာခွင့် လက်မှတ်ကိစ္စစသည် စသည်တွေနဲ့ တစ်ရုံးတက် တစ်ရုံးဆင်းပါပဲ။
ကျွန်မအလုပ်တွေ ရှုပ်နေသလို သားရွှေစင်နဲ့ သမီးကေသီ မောင်နှမနှစ်ယောက်မှာလည်း သူ့တို့ကိစ္စနဲ့သူတို့ အလုပ်တွေရှုပ်ပေါ့။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ "ရွှေစင် ရှိလား"၊ "ကေသီ ရှိ လား"နဲ့ နှုတ်ဆက်ဖို့ရောက်လာကြတဲ့ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေ ကို တံခါးဖွင့်ပေး ရတာလည်းအခါပေါင်းများစွာ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ ရှုပ်ယှက် ကို ခတ်လို့၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီတစ်ခေါက်က အရင်သွားနှင့်ကြတဲ့ "၀င်း၊ ကေခိုင်နဲ့ ယမင်း"တို့လို တစ်ယောက် တည်း မဟုတ်ဘဲ မောင်နှမ နှစ်ယောက်အတူသွားရမှာမို့ အဖော်ရတာကြောင့် ကျွန်မအနေနဲ့ လည်းခါတိုင်းလောက် စိတ်က မကြောင့်ကြမိသလို သူတို့မောင်နှမလည်း ကိုယ့်အမိမြေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ခွဲခွာရမှာ မို့ စိတ်ထိခိုက်နာကျင်တာက လွဲပြီး မိသားစုအားလုံး မကြာခင် ပြန်လည်စုစည်းမိကြမှာပဲ ဆိုတာ သိထားပြီး သား ဖြစ်တော့လည်း ရင်ပေါ့ကြတယ် ထင်ပါရဲ့။ ခါတိုင်း သားသမီးတွေလို တငိုငိုနဲ့ မျက်ရည်လည်ရွဲ မဖြစ်ကြ ဘဲ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ အမေရိကားကို ထွက်ဖြစ်သွားပါရော။
ကျွန်မလည်းတစ်ကိစ္စ ရှင်းသွားပြန်တော့ ဆက်လက် လှုပ်ရှားစရာတွေ လုပ်နေရင်း မတတ်မဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာပွဲ တစ်ခုက ပေါ်လာတာနဲ့ တက်လိုက်ရသေးတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်မဲ့ သတို့သား "အောင်" က ဦးမြလှိုင်ရဲ တူ အရင်းပါ။ သတို့သားရဲ့မိဘများက ဦးမြလှိုင် ရဲ့ ညီအငယ်ဆုံး ဗိုလ်ကြီးသန့်စင်နဲ့ ဒေါ်ခင်မာမာတို့ပေါ့။ ကျွန်မက ဦးမြလှိုင် နဲ့ သာကွဲတာ။ သူတို့ မိသားစုနဲ့တော့ အဆက်ပြတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီစာကို ရေးနေတဲ့ ခုချိန်ထိ သွေးရင်း သားရင်း တစ်ယောက်လို ဆက်ဆံဆဲပါပဲ။
တချို့တွေ ကျတော့ ဒီအိမ်ထောင်နဲ့ကွဲရင် အဲဒီဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်းအားလုံးနဲ့လည်း ကင်းကင်း ပြတ်ပြတ် နေ တတ်ကြတာတွေ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ခံယူချက်ကတော့ ကိုယ်နဲ့ ရေစက်ကုန်ကြလို့ ဆက်လက်ပြီး လက်မတွဲနိုင်ကြ လို့ ကွဲကြရင်လည်း ရန်သူတွေမှမဟုတ်ဘဲ။ ဘာဖြစ်လို့ မပြောနိုင်၊ မဆိုနိုင် မဆက်ဆံနိုင် ရှိရမှာ လဲ။ တွေ့ကြရင်လည်း စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ လေးလေးစားစား ဆက်ဆံရုံပဲပေါ့နော်။ ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်း ကိုလည်း ထားရှိတဲ့မေတ္တာ ကို ပြန်မရုပ်သိမ်းဘဲ ဆက်လက်တည်မြဲ အောင် ထားသင့်တာမို့ ကျွန်မနဲ့ အဆက်အသွယ် မပြတ်ကြ ပါဘူး။
ဒါကြောင့် မင်္ဂလာပွဲကို သွားလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဦးမြလှိုင်ကလည်းသူ့ ရဲ့ လက်ရှိဇနီး စာပေစိစစ် ရေးက အရာရှိ ဒေါ်ခင်မြင့်(ခိုင်) နဲ့ တွဲလို့ ဟိုဘက် စားပွဲမှာ။ ကျွန်မကလည်း ဦးမြလှိုင်ရဲ့ မောင်နှမတစ်တွေနဲ့ အတူ ဒီဘက်စားပွဲထိပ်မှာ ထိုင်လို့။ ဦးမြလှိုင် လက်ထပ်လိုက်တဲ့ ဒေါ်ခင်မြင့် ဆိုတာကို အဲဒီမင်္ဂလာပွဲမှာမှ ကျွန်မ မြင်ဖူး တာပါ။ ခန့်ခန့်ချောချော၊ ကျက်သရေရှိရှိ မြန်မာဆန်လှတဲ့ အမျိုးသမီးပါပဲ။ ဒေါ်ခင်မြင့် နဲ့ ကျွန်မ လူချင်းသာ တစ်ခါ မှ မမြင်ဖူးကြတာ။ တယ်လီဖုန်းပေါ်မှာတော့ အခါများစွာပြောဖူးပါတယ်။ သားသမီးတွေ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဦးမြလှိုင် ကို ပြောစရာ၊ အသိပေးစရာ ရှိရင် ဦးထားလေးစားမှု ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဦးမြလှိုင်ဆီ တိုက်ရိုက် မဆက်ဘဲ ဒေါ်ခင်မြင့် က တစ်ဆင့်ပဲ ဆက်သွယ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေလည်း ဒေါ်ခင်မြင့်နဲ့တင် လိုအပ်တဲ့ ကိစ္စက ပြတ်သွားပြီး တစ်ခါတစ်ရံတော့ ဦးမြလှိုင် နဲ့မှ ပြီးပြတ်မဲ့ ကိစ္စဆိုရင်လည်း ဦးမြလှိုင် က ကျွန်မ ကို ပြန်ဆက် သွယ်ပြီးပြောပါတယ်။ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး လေးစားမှုဆိုတာ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ထားရှိအပ် တဲ့ ကိစ္စတစ်ရပ်ပဲ မဟုတ်လားနော်။
အဲဒီမင်္ဂလာပွဲကို ရုပ်ရှင်မင်းသား အဆိုတော်ဝင်းဦးကိုယ်တိုင် မေတ္တာနဲ့လာရောက် သီချင်းဆိုပြီး ချီးမြှင့်ပေး ပါတယ်။ ကိုဝင်းဦး နဲ့ ဗိုလ်ကြီးသန့်စင်တို့က တပ်ထဲမှာကတည်းက စားအိမ်သောက်အိမ် လုပ်ပြီး ချစ်ခင် ရင်းနှီးနေကြ တာလေ။ သူ့အလှည့် သီချင်းဆိုပြီး စင်ပေါ်က ဆင်းတော့ ကျွန်မဆီ ရောက်လာပြီး ...
"မမခင်ကြီး တစ်ယောက်တည်းလား" တဲ့ နှုတ်ဆက်ရင်း အနားလာထိုင်တာနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း စာ အကြောင်း ပေးအကြောင်းတွေပဲ ပြောဖြစ်ကြပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုဝင်းဦး ထုတ်ဝေတဲ့ စန္ဒာမဂ္ဂဇင်းမှာ လစဉ် နီးပါး ၀တ္ထုတိုလေးတွေ "ပတ္တမြားခင်" အနေနဲ့ ရေးဖြစ်တဲ့ကာလ ဆိုပါတော့။ ကိုဝင်းဦးနဲ့စပြီး သိကျွမ်း ခင်မင်ခဲ့ တာတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာလှပါပြီ။ သူက စစ်ဗိုလ်ပေါက်စ၊ ကျွန်မကလည်း ရန်ကုန်ရောက်ခါစ၊ လည်လည် ၀ယ်ဝယ် မရှိသေးတဲ့ တောကတက်လာတဲ့ အနေအထားမှာပဲ ရှိနေသေးတဲ့ အချိန်မှာ စစ်တပ်တွေက တပ်ခွဲလိုက်၊ တပ်စုလိုက် စုပေါင်းဓာတ်ပုံ တွေရိုက်ဖို့ ကျွန်မကို အလုပ်အပ်တော့ မှော်ဘီဆိုတဲ့ နေရာထိ ကျွန်မက မသွားတတ်၊ မလာတတ်။
ဒီတော့စစ်ဗိုလ်ပေါက်စလေး ကိုဝင်းဦး က တစ်လှည့်၊ ဗိုလ်ကြီးသန်းမြင့်က တစ်လှည့် ကျွန်မနဲ့တကွ ကင်မရာ အဖွဲ့ တပည့်များကိုပါနေ့စဉ် မှော်ဘီကနေ လာကြို၊ ညနေ ပြန်ပို့ဆိုတဲ့ အလုပ်ကို လေးငါး ရက်ဆက် လုပ် ပေးရပါတယ်။ ကျွန်မတို့နှစ်ဦးစလုံးက စာပေကို မြတ်နိုးသူချင်းဖြစ်တော့ စိတ်ဝင်စား ကြတာချင်းတူပြီး စကားလေပေး ဖြောင့်သွားကြတာ လေးငါးရက်နဲ့ ငယ်ပေါင်းမိတ်ဆွေရင်းလို ရင်းနှီးသွားကြလေရဲ့။ ကျွန်မက ကိုဝင်းဦးထက် ဆယ်နှစ်တိတိ ကြီးပါတယ်။ သူရုပ်ရှင်မင်းသား ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ အနေဝေးသွားပြီး တစ်ခါတလေ ဧည့်ခံပွဲတွေလောက်မှာပဲ ဆုံဖြစ်ကြတဲ့ခါ အတိုးချပြီး စကားပြော ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရန်ကုန်မှာ တစ်မြို့တည်းနေကြတာ ဆိုတော့ တစ်ယောက် သတင်းတစ်ယောက် အမြဲလို ကြားနေကြရတယ်ပေါ့။ အထူးသဖြင့် လောကဓံနဲ့ နပန်းလုံးရင်း ကျွန်မ အလူးအလဲ ကျဆုံးနေပြီဆို တဲ့ သတင်းမျိုး ကြားရတဲ့အခါ သူ့ဆီက အားပေးစကားလေးတွေ ရတတ်လို့ မိတ်ဆွေကောင်း အဖြစ်ကျွန်မရင်ထဲမှာ အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။ သူရေးတဲ့ ၀တ္ထုလေးတွေ ရင်ထဲမှာစွဲငြိအောင် ခံစားမိတဲ့အခါ၊ သူရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ပြီး ကြည်နူး ပီတိဖြစ်တဲ့အခါတွေမှာလည်း ကျွန်မက သူ့ကို ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ချီးကျူးမြဲပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့ ဆုံဖြတ်တဲ့အခါလည်းရှိ၊ ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ် တစ်လမ်းစီ သွားနေကြတာမို့ မဆုံဖြစ်ကြတဲ့ အခါလည်း ရှိပေါ့။ စန္ဒာမဂ္ဂဇင်းထုတ်ပြီး အတော်လေး အရှိန်တက်နေတဲ့အတွင်း ကျွန်မတစ်ခါ ဆုံဖြစ်ကြတော့...
"ညကပဲ မမခင် သွေးသောက်မှာ ရေးထားတဲ့" "မွေးနေ့လက်ဆောင် ကြောင်ကလေး"အ ကြောင်းကိုဖတ်ပြီး သဘောကျနေမိသေးတယ်။ စန္ဒာမှာလည်း ရေးပါဦး ဆိုတာနဲ့ စန္ဒာမှာ ရေးရင်း ကိုဝင်းဦး နဲ့ ပြန်ပြီး ထိတွေ့ဆက်ဆံဖြစ် သွားပြန်ရောလေ။ အခုလည်း ကျွန်မ အမေရိကားသွားဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ အကြောင်း ပြောပြတော့ ဘယ်မြို့ ဘယ်နယ်သွားမှာလဲ ဆို တာထိစပ်စုနေပါတော့တယ်။ အမေရိကား ရောက် ရင်လည်း စာဆက်ရေးဖို့ တိုက်တွန်းနေ လေသေးရဲ့။
"အဲဒါတော့ ထားပါဦးဟယ်၊ ကိုယ်တောင် ဟိုမှာ ဘယ်လိုရပ်တည်ရမှန်းမသိသေးဘဲနဲ့" လို့ပြောရပါတယ်။
ကို်ဝင်ဦးတို့များ တော်လိုက်ပုံက ကျွန်မတောင် အမေရိကားမရောက်ရသေးဘူး။ သူရဲ့ စန္ဒာမဂ္ဂဇင်းထဲမှာ "ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်" ဆိုနဲ့နာမည်နဲ့ နောက်တစ်လမှာ ၀တ္ထုရှည်တစ် ပုဒ်ပါလာလေရဲ့။ ဇာတ်လမ်း ဆင်ထားပုံ က သူရဲ့ချစ်သူကလည်း သြစတြေးလျက မာယာမီ ကမ်းခြေကိုလာလည်၊ ကျွန်မကလည်း မာယာမီရောက် သွားတော့ အဲဒီမှာဆုံမိကြပြီး ကိုဝင်းဦးအကြောင်းတွ ပြေကြတဲ့ဇာတ်လမ်းပါ။ ဖလော်ရီဒါပြန်နယ်၊ မာယာမီမြို့ ကို သွား မှာလို့ပြောမိတာနဲ့ နေရင်းထိုင်ရင်း ကျွန်မလည်း သူ့ဝတ္ထုမှာ ဇာတ်ကောင် တစ်ကောင် ဖြစ်သွားလေရဲ့။ စကားလေးတစ်ခွန်းကနေ ၀တ္ထုရှည်တစ်ပုဒ်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးနိုင်စွမ်း ရှိ တဲ့သူ့အနုပညာကတော့ တကယ့်ကိုချီးကျူးဖွယ်ရာပါပဲ။ ရေးထားလိုက်တာ အကြောင်း သာမသိရင် တကယ်များတွေ့နေကြတဲ့ အတိုင်းလေ။
သူစိတ်ကူးယဉ်လိုက်တာ နဲ့ ၀တ္ထုထဲမှာကျွန်မ မာယာမီကိုစောစောစီစီးရောက်သွားပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့ မာယာမီရောက် ဖို့အချိန် ဝေးသွားပြန်လေရဲ့။
လူသွားတွေအနနေနဲ့ အချိန်နဲ့အမျှ ကိုယ်အသက်ရှူနေတာကို သတိမမူမိကြသလိုပဲ အစိုးမရခြင်း ဆိုတဲ့တရား တွေကလည်း အချိန်နဲ့အမျှ ဖြစ်ပျက်နေတာကို ကျွန်မတို့ ပုထုဇဉ်တွေမှာ သတိမမူနိုင်ကြ လို့သာတရားမရတာ ဖြစ်မှာပါနော်။ အခုလည်းသွားဖို့ကိစ္စ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုပ်ပြီးတဲ့ အဆင့်ရောက်ခါမှ အငယ်ဆုံး သား "အိန္ဒာ"က လက်ကျိုးပါလေရော။ ကျွန်မတို့အိမ်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာက ကလေးကစား ကွင်းရှိနေတာ မို့ အဆော့သန်တဲ့ ကိုအိန္ဒာတို့အဖို့ ရေကန်အသင့်၊ ကြာအသင့်ဖြစ်ပြီး နေကုန်နေခန်း၊ ဒန်းစီး လိုက်၊ လျှောတိုက်လိုက် လုပ်နေ ကြတာလေ။ တစ်နေ့လျှောပေါ်ကပြုတ်ကျပြီး ညာဘက်လက် သွင်သွင် ကျိုးတော့ ဆေးရုံ ပို့လိုက်ရတာ ဆရာဝန်ကကျောက်ပတ်တီး စည်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဥပဒေအရ အဲဒီလို ကျောက်ပတ်တီး စည်းထားရင်နိုင်ငံက ထွက်ခွင့်မပြုဘူးဆိုတာလည်း အတွေ့အကြုံမရှိလို့ မသိလေဘူးပေါ့။ နောက်မှသိရတာက အဖိုးတန်ကျောက်ရတနာ ပစ္စည်းတွေကို ဒီလိုနည်းနဲ့ ၀ှက်ပြီးပြည်ပကို သယ်ထုတ် သွားနိုင်တာမို့ ခွင့်မပြုတာတဲ့လေ။ ဒီတော့ လည်း ကျောက်ပတ်တီးဖြေရမဲ့နေ့ ထိ နောက်ထပ်နှစ်လနီးပါးစောင့်ဖို့ ဖြစ်သွားပါ တော့တယ်။ ဒီတော့စောစောက ရွေးထားတဲ့ရက်နဲ့ ထွက်ဖို့လုပ်ထား တဲ့ လေယာဉ်လက် မှတ်တွေ ပြန်ပြောင်းရတာနဲ့ အလုပ်တွေထပ်ရှုပ်။
ဒါတင် မကပါဘူး။ အိမ်မှာကိုးကွယ်ထားတဲ့ ရုပ်ပွားတော်ကို ပင့်သွားချင်တာမို့ အဲဒီအတွက် လည်းရှေးဟောင်း ဘုရားမဟုတ်ကြောင်း ထောက်ခံခွင့်ပြုချက်ရဖို့ ဘုရားကိုယ်တော်ကို အစစ်ဆေးခံ ရအောင် ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနထိ ပင့်သွားပြီးပြရ၊ ဒီအထဲမှာ ကျွန်မ စုဆောင်းထားတဲ့ စာအုပ်တွေကလည်း ရှိသေးတယ်။ သိပ္ပံမောင်ဝတို့၊ ဒဂုံခင်ခင်လေးလို မျိုးထိအစားစားသော စာအုပ်တွေ၊ ခွင့်ပြုချက် ရအောင် စာပေစိစစ်ရေးက တံဆိပ်ထုပေးဖို့ တင်ပြရတာကတစ်ဖက်။
အမျိုးစုံအောင်အလုပ်တွေ ရှုပ်တဲ့အထဲမှာပဲ ကိုယ်ပါဝင်လှုပ်၇ှားခဲ့တဲ့ အသင်းအဖွဲ့တွေက လည်းဖိတ်ပြီး ကျွန်မအတွက် နှုတ်ဆက်ပွဲလုပ်ပေးပါတယ်။ မြန်မာပြည်ဓာတ်ပုံအသင်းဆိုရင် ကျွန်မရန်ကုန်ရောက်ခါစ ကတည်းက ပါဝင်ပြီးလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ အသင်းပါ။ ကျွန်မရဲ့ အသင်း ၀င်ကအမှတ် (၉)ပါ။ အခုဆို အသင်းသား ရှစ်ရာတောင်ရှိနေပြီလို့ အသင်းရဲ့နာယကကြီး ဦးမောင်မောင်တင် USIS ကစာရေးပြာပြလို့ သိရတာပါ။ ကျွန်မ တို့ စ၀င်တုန်းက အားလုံး မှလူဆုံးဆယ်တောင် ပြည့်မယ်မထင်ပါဘူး။ ကျွန်မဆီမှာ အမှတ်တရ မြတ်မြတ်နိုးနိုး နဲ့ သိမ်းထား တဲ့ မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားလေးခုထိ ရှိနေပါသေးတယ်။
ဒေါ်ဒဂုံခင်ခင်လေး ဦးစီးတဲ့ ယုဝတီကလောင်အရှင်အသင်းမှာလည်း နှစ်ပေါင်းကြာမြင့်စွာ ကျွန်မဓာတ်ပုံပိုင်း ဆိုင်ရာ တာဝန်ယူပေးခဲ့တာ အသင်းတစ်သက်ပါပဲ။ မမခင်က လူရောငွေ ပါစိုက်ပြီး ခေါင်းဆောင်ကောင်းအနေနဲ့ ရှိခဲ့တာ မို့ ယုဝတီကလောင်ရှင်အဖွဲ့ အလွန် အောင်အောင်မြင်မြင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြဇာတ်ခေတ်ကလည်း ရန်ပုံငွေ အတွက် ပြဇာတ်တွေ ကကြ၊ နှစ်သစ်ကူးမှာလည်း ဗမာ့ခေတ်တိုက်ရှေ့မှာ မဏ္ဍပ်ထိုးပြီး သင်္ကြန်အဖွဲ့ရေပက်ကြ နဲ့ပျော်စရာကောင်း လှပါတယ်။ ယုဝတီအဖွဲ့ယူနီဖောင်းတောင် တခမ်းတနား မန္တလေးက ကြိုးကြီးချိတ် အစိမ်းရောင်ကို မမခင်က အော်ဒါလုပ်ပြီး တူညီဝတ်စုံဖြစ်အောင် လုပ်စေခဲ့ တာနော်။
အခုပြန်စဉ်းစားရင် အဲဒီအချိန်တွေဟာ တမ်းတစရာကောင်းတဲ့ဘ၀ရဲ့ ရွှေရောင်ကာလများ လို့ သတ်မှတ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါ၇ဲ့။ အထူးသဖြင့် ကျွန်မစိတ်ရောကိုယ်ပါ အလေးထားခဲ့ တဲ့အသင်းကတော့ မန္တလေးအသင်းပါပဲ။ ရန်ကုန်မှာမန္တလေးအသင်း တည်ထောင်ဖို့ စပြီး မျိုးစေ့ချသူများကတော့ ရန်ကုန်ရောက် မန္တလေးသား ကျောင်းသားဟောင်း မြောက်မြားစွာ ပါပဲ။ အသင်းအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လှုရှားကြတော့မှ ဆရာကြီး ဦးဘလှ၊ ဆရာ ဦးအေးမောင်၊ ဖခင်အုံးဖေနဲက ဦးဘရင်တို့ ကျွန်မဆီ ရောက်လာကြပြီး အကျိုးအကြောင်း ပြောပြရင်းပါဝင်ဖို့ ပြောတာနဲ့ ၁၉၇၂ခုနှစ်ပိုင်းမှာ စတင်လှုပ်ရှားကြတယ်ပေါ့။ အသင်းဖြစ် တည်ရေး အတွက် စတင် မတည်သူ စုစုပေါင်း ၁၅ဦးရှိပါတယ်။ ဆရာကြီးဦးဘလှ အမှူး ထားပြီး ၁၃ဦး၊ အမျိုးသမီး က ကျွန်မနဲ့ ဒေါ်အုံးကြည် နှစ်ဦးပဲ ပါပါတယ်။
ကိုယ်နိုင်သလောက် ငွေကြေးစုထည့်ကြပြီး ကုန်သည်လမ်းမှာ အသင်းတည်နေရာဝယ် ဖြစ်သွားတော့ မန္တလေးသားတွေ ရန်ကုန်လာရင် တည်းခိုစရာနေရာလည်းရ၊ ဘိလိယက်ခုံ နဲ့ဘားနဲ့ မန္တလေးသူ မန္တလေးသား များ စုဝေးရာနေရာလည်းဖြစ်ဆိုတော့ ပျော်စရာကြီးပါ ပဲ။ ကျွန်မတို့ မန္တလေးသူ မန္တလေးသားတွေက ဇာတိစွဲကြီးကြ တယ်လေ။ ဘယ်နေရာ ရောက်နေနေ ကိုယ့်အစား၊ ကိုယ့်ဓလေ့နဲ့ ကိုယ့်အသိုင်းအ၀ိုင်းကို သိပ် မက်မောကြတာပါ။ စီးပွားရေးအရ ရန်ကုန်မှာအခြေချနေပေမဲ့ မန္တလေးလွမ်းနာ မပျောက်နိုင်တဲ့ ကျွန်မ အဖို့ တော့ အသင်းကအလွမ်းဖြေရာနေရာ တစ်ခု Second Homeဖြစ်နေပါတော့တယ်
မန္တလေးဘောလုံး အသင်းကလည်း ရန်ကုန်လာကန်တိုင်းမှာ ဖလားပွဲတွေအနိုင်ရလို့မကြာ မကြာဂုဏ်ပြုပွဲတွေ လုပ်ရ သလို ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲ၊ ကထိန်ပွဲ၊ ထမနဲပွဲ၊ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ စတဲ့ရာသီလိုက်ပွဲတွေ အပြင် ပညာရည်ချွန် ဆုပေးပွဲ၊ အမျိုးသားနေ့ပွဲနဲ့ လစဉ်နီးပါး တစ်ပွဲမဟုတ် တစ်ပွဲကရှိနေတာပါပဲ။ အမှုဆောင်အဖွဲ့နဲ့ အသင်းသူ အသင်းသားအားလုံး ကလည်းစိတ်ရော၊ လူရောငွေပါ စိုက်ပြီးအာတက်သရော လုပ်ခဲ့ကြတာ တက်ညီ လက်ညီ မို့အသင်းက နေ့ချင်းညချင်း ကြီးထွားအောင်မြင်လာပါတယ်။
အားလုံးကမိသားစုနဲ့ လုပ် ကြတာမို့ မိသားစုတစ်ပိုင်းလည်း ဖြစ်နေတယ်ပေါ့။
ကျွန်မ က ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ စီးပွားရေးနယ်ပယ်ထဲ ၀င်လာသူဖြစ်တော့ ရန်ကုန်မှာ ပေါင်းရသူတွေကလည်း ငယ်ပေါင်း မဟုတ်တာကြောင့် တွေ့လိုက်ရင် "ဒေါ်ခန့်ခန့်ကြီး" ခေါ်သူကခပ်များများ။ မန္တလေးအသင်း လို နေရာကိုရောက်သွားမှ "ဟေ့ ခင်မကြီး"လို့ အခေါ်ခံရတာကိုက ရင်းနှီးမှုကိုပြတာမို့ နာဝင်ကိုချိုလို့။ တစ်ဦး နဲ့တစ်ဦး မန္တလေးဟန် ပန်အတိုင်း "ခင်ဗျား"နဲ့ "ကျွန်တော်"လည်း ပြောရတာလည်း အရသာရှိပါဘိခြင်း။ အများစု ကလည်း မိသားစုလို ရင်းသူတွေဖြစ်တော့ ကျွန်မကိုယ့်ဇာတိမြေက ခွာပြီး အမေရိကား သွားမဲ့ အကြောင်းပြောပြဖို့တောင် နှုတ်ဆွံ့နေမိပါတယ်။
မပြောမဖြစ် လို့ တစ်နေ့မှာ အတွင်းရှေးမှူးဦးညွန့်ရီ အိမ်သွားပြီးအကျိုးအကြောင်း ပြောပြ လိုက်တော့ ကျွန်မစကားကိုလည်း ကြားရောဦးညွန့်ရီနဲ့ဇနီး ဒေါ်တင်တင်လှက ကျွန်မကို ဖက်ပြီးရှိုက်ကြီး တငင် ငိုပါလေရော။ ကျွန်မတို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်ဖက်ပြီး အကြာကြီးကို ငိုဖြစ်ကြပါတယ်။ ခွဲခွာရခြင်းရဲ့ နာကျင်မှု ကိုဘယ်လို နှလုံးသားမျိုးမှ ခံနိုင်ရည်စွမ်းမရှိတာ အမှန်ပါပဲ။ မန္တလေးအသင်းကလည်း ကျွန်မသွားခါနီးမှ ဂုဏ်ပြုတ်နှုတ်ဆက်ပွဲ လုပ်ပေးခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီနေ့က ဆရာကြီးဦဘလှနဲ့တကွ အမှုဆောင်လူကြီးများကို ကျွန်မ မျက်ရည် သွယ်သွယ်ကျရင်း လက်စုံမိုးပြီး ရှိခိုးကန့်တော့ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါဟာ နောက်ဆုံးကန်တော့ခွင့်ကြုံရခြင်းပါပဲ။ ကျွန်မမြန်မာပြည်ကထွက်ခွာလာခဲ့ပြီး ၁၆နှစ်အကြာ ၁၉၉၃ခုနှစ် မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်သွားတော့ ဒေါ်အုံးကြည်မှအပ အမှု ဆောင်လူကြီးပိုင်းက တစ်ယောက် မှမရှိကြတော့ပါဘူး။ အထူးသဖြင့်ကျွန်မနဲ့ အရင်းအနှီး အချစ်ခင်ဆုံး ဦးညွန့်ရီနဲ့ ဦးဘိုရီတို့လည်း မရှိကြတော့ ဘူးလေ။ မန္တလေးအသင်း ကို ရောက်တဲ့နေ့ကလည်း ဦးညွန့်ရီရဲ့ဇနီး ဒေါ်တင်တင်လှက ကျွန်မ ကို တွေ့တွေ့ချင်းပြေး လာပြီးဖက်ငိုတော့တာပဲ။ လူသားတိုင်း ရင်ဆိုင်အရှုံးပေးရတဲ့ သင်္ခါရတရားရဲ့ နောက်ကို ကျွန်မရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားလုံး လိုက်ပါသွားနှင့်ကြရပါပြီ.။
အခုစာရေးနေတဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်အုံးကြည်လည်း ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။ မန္တလေး အသင်းဖြစ် မြောက်ရေး စတင် မတည်ခဲ့တဲ့ ၁၅ဦးထဲမှာ ကျွန်မတစ်ယောက်ပဲ အသက်ထင်ရှားကျန်နေခဲ့ တာမို့ ခွဲခွာသွားနှင့်ကြ တဲ့ ရောင်းရင်းများကို တမ်းတမိပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့အသက်လည်း ၇၆နှစ်ပြည့်ခါနီးဖြစ်လို့ မကြာမတင် သူတို့လိုပဲ ခွဲခွာသွားရ ဖို့ အချိန်ကတော့ နီးကပ်နေပြီ ပဲပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိဌာနေအတွက် တစ်နိုင်တစ်မလေး လုပ်ဆောင် ခွင့် ကြုံရ တာကိုပဲကျွန်မတစ်သက် ကျေနပ်ကြည်နူးမဆုံးရှိရပါတယ်။
လူဆိုတာ ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ ကိုယ့်မြို့သူမြို့သား၊ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် ဘယ်နေရာမှာ ဘာတွေလိုအပ်နေ သလဲဆိုတာ ရှာပြီးတစ်နိုင်တစ်ထမ်း ဖြည့်ဆည်းပေးရမှာ ပါပဲ။ ကိုယ့်မှာ ရှိသလောက်ပဲ ပေးနိုင်တာမို့ နည်းချင်နည်းမယ်၊ များချည်လည်းများမှာပဲ လေ။ ပေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ကသာ အဓိက ကျပါတယ်။ စင်ပေါ်တက်ပြီး တရားဟော တတ်မှရွေးကောက်ပွဲနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်မှ သူတစ်ပါး ကို အကျိုးပြုနိုင်တာ မဟုတ်ပါ ဘူးနော်။ လူသားတိုင်းကိုယ့်မှာ ဘာမှမရှိရင်တောင်မှ ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရ တဲ့သူတွေကို ရင်ထဲက စေတနာနဲ့ အပြုံးလေးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ် အကြင်နာစကားလေးဆိုဆို သူတစ်ပါး ကို ဖေးမ အားပေးလို့ ရပါတယ်။
တော်ဖို့ တက်ဖို့လည်းမလို၊ နည်းတာ များတာလည်းအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်စာ အစ်အုပ်မှ မရေးတတ်ပေမဲ့လည်း အားငယ်သူကို စားလေးတစ် ကြောင်းတည်းရေးပြီးလည်း အားပေးလို့ရတာပါပဲ။ အရေးကြီး တာကတော့ လူတိုင်းလူ တိုင်းမှာလူမှုရေးစိတ်ဓာတ်ရှိကြဖို့ပဲလို့ ကျွန်မတွေးမိပါတယ်။ ကျွန်မမှာ ဘယ်သောကာလ ကမှချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်း မရှိခဲ့တာမို့ သူများတကာတွေလို ဘုရားတည်ကျောင်းဆောက် သိန်းချီ မလှူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အထွာနဲ့ကိုယ် တစ်နိုင်စာလေး လုပ်ပေးဖို့တော့ ၀န်မလေးတတ်လို့ မန္တလေး မှာလည်း မန္တလေးအလိုက်၊ ရန်ကုန်မှာလည်း ရန်ကုန်အ လျောက်အသင်းအဖွဲ့တွေမှာ လူမှုရေး စိတ်ဓာတ်နဲ့ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်လုပ်အားပေး ဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့။
သီယိုဆိုဖီအသင်းကလည်း နှုတ်ဆက်ပွဲလုပ်ပေးပါသေးတယ်။ အဲဒီမှာ ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးသန်းလှိုင် ပြောကြားတဲ့ မိန့်ခွန်းကိုနားထောင်ပြီး ကျွန်မပြုံးရပါသေးရဲ့။ ဦးသန်းလှိုင်က ကျွန်မကို ရင်းရင်းနှီးနှီး မသိဖူးပေ မဲ့ မြင်ဖူးတွေ့ဖူးနေ တာတော့ ကြာပါပြီတဲ့။ ရန်ကုန်မြို့ လမ်းတကာမှာ ကားတ၀ီဝီမောင်းသွားနေတဲ့ အလွန်ခေတ်ဆန်သော ကပြားအမျိုးသမီး တစ်ယေက်အနေနဲ့ သူကမြင်ထားတဲ့အပြင် အဲဒီအမျိုးသမီးဟာ ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းမယ် လည်းမထင်။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုလည်း နားလည်မဲ့အစားထဲက မဟုတ် လို့တွေးထားခဲ့တာ။ သီယိုဆိုဖီကိုရောက်လာတဲ့အချိန် နီးနီးကပ်ကပ်လေ့လာကြည့်မှ ဘာသာရေး ကိုအထူး လေးစားပြီ မြန်မာဆန်တဲ့ ဂါရ၀တရားနဲ့ သူတစ်ပါးကိုလေးလေးစားစား ဆက်ဆံတတ်တာ သိရလို့ စာအုပ်ကို အဖုံးကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတာ နားလည်ရတော့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဟုတ်ပါရဲ့။ ကျွန်မကို လမ်းပေါ်မှာတလွှားလွှားနဲ့ နေရာတကာမှာ မြင်တွေ့နေရတတ် တော့လည်း အမြင်တန်စရာဖြစ်လေမှာပေါ့နော်။အဲဒီအချိန်ကာလက အမျိုးသမီးကား မောင်းသူကလည်း ခပ်ရှားရှား။ ဓာတ်ပုံဆရာမ အနေနဲ့ကလည်း ကျွန်မတစ်ဦးတည်းရှိသေး တာဆိုတော့ လူပုံအလယ် မှာ ယောက်ျားလေးတွေ နဲ့တန်းတူ ကင်မရာတစ်လုံးလွယ်ရင်း ပြေးပြေးလွှားလွှားတွေလုပ်မှ ထမင်းစားရတဲ့ အဖြစ်ကို လူတွေက မသိဘဲ ကားကလေး ကျော့ကျော့မော့မော့ မောင်းသွားလေတယ်ဆိုတာလောက်သာ အပြင်ပန်း မြင်ကြတာကိုး နော်။ အဲဒီကားမောင်းသူရဲ့ ရင်မှာ ကားအင်ဂျင်ရဲ့တုန်ခါမှုအားနဲ့အမျှ ရပ်တည်ရေးအ တွက်သောကဗျာပါဒတွေနဲ့ ဆူဝေနေတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူကသိနိုင်ပါ့မလဲလေ။ ကျွန်မ လည်းရင်ထဲမှာဘယ်လောက် ပူလောင်နေပေမဲ့ မျက်နှာ မှာတော့ နွေဦးမှာပန်းတွေပွင့်ဖူး နေသလိုလူတွေ့ရင် အပြုံးတဝေေ၀နဲ့ နေတတ်သူဆိုတော့ အတွင်းနဲ့ အပြင် အသွင်ကွဲ လေတယ်ပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ကိုယ့်ကိုနှုတ်ဆက်တဲ့ပွဲတွေကိုလည်း တက်ရင်းကိုယ်က နှုတ်ဆက်ရမဲ့သူတွေကို လည်း လိုက်နှုတ်ဆက် ရင်း ဂါရ၀ပြုရမဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေကိုလည်း လက်အုပ်ချီကန်တော့ရင်း ရောက်လေရာမှာမျက်ရည်ကျတာလည်း အခါခါပဲ။ ကျွန်မရဲ့ကျေးဇူးရှင် မမခင် (ဒေါ်ဒဂုံခင်ခင်လေး)ကို သွားကန်တော့တော့ မမခင်က မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင် ကျရင်း ဆုတွေ ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ "မမခင် အသက်ရှင်လျက် ငါ့ညီမနဲ့မှ ပြန်တွေ့ခွင့်ရပါ့မလား မသိ" တဲ့။ တကယ်လည်း တကယ်ပါပဲ။ ကျွန်မ မိခင်ရင်းတမျှ ချစ်ရ၊ အားကိုးရတဲ့ မမခင်ကို အသက်ရှင်လျက် ပြန်တွေ့ခွင့် မကြုံလိုက် ရတော့ပါဘူး။ ကျွန်မပြန်ရောက်မလာနိုင်ခဲ့တဲ့ နှစ်အတွင်းမှာ မမခင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါပြီ။
ရှိန်းကို တကူးတက သွားမနှုတ်ဆက်ဖြစ်ပေမဲ့ မသွားခင်လေးမှာတင် မထင်မှတ်ဘဲ သူ့ကို တွေ့ခွင့်ကြုံလိုက် ရပါသေးတယ်။ အဲဒီနေ့က မန္တလေးက သူငယ်ချင်းမြတ်ရဲ့မောင်ငယ် တစ်ယောက် မင်္ဂလာဒုံ စစ်ဆေးရုံမှာ အသည်းအသန်ဖြစ်နေတယ်လို့ အကြောင်းကြာတာနဲ့ သတင်းမေးဖို့ သွားတော့ လူနာခန်းစင်္ကြံအကွေ့တစ်ခုမှာ စစ်ရုံးမှာငွေစာရင်း ၀န်လုပ်နေ တဲ့ သူငယ်ချင်း "တင့်တင့်"နဲ့ သွားတိုး ပါလေရော။
"ဟေ့...ခင် ဘယ်သူ့ကို လာကြည့်တာလဲ"တဲ့။
"မြတ်ရဲ့မောင်လေး" "အုန်း"ကိုလာကြည့်တာ၊ တင့်ရော သူ့ကိုလာကြည့်တာလားလို့ မေးတော့...
"မဟုတ်ဘူး၊ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးရှိန်း ကို လာကြည့်တာ၊ Surgery လုပ်ထားလို့"တဲ့။
"ဘယ်အခန်းမှာလဲ၊ ခု ဘယ်လိုနေသေးလဲ"နဲ့ ကျွန်မ ပျာပျာသလဲ မေးလိုက်မိပါတယ်။
"ခွဲပြီးခါစဆိုတော့ အားနည်းနေသေးတာပေါ့၊ အခြေအနေကောင်းပါတယ်၊ ခင်ဗျားသွား ကြည့်ချင်ရင် ကိုယ် လိုက်ပို့ပေး မယ်လေ၊ အုန်းဘာဖြစ်လို့လဲ၊ ဆေးရုံတတ်တာကိုယ် တောင်မသိဘူး"ဆိုပြီး တင့်က အုန်းရဲ့ သတင်းပြန်မေးနေပါသေးတယ်။ ကျွန်မတို့နှစ် ယောက်ဆုံမိတဲ့ နေရာကအုန်းရဲ့အခန်းမှာဖြစ်လို့ ကိုခင်မောင်အုန်း ကို အရင်ဝင်ပြီး သတင်းမေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုခင်မောင်အုန်းရဲ့ အခြေအနေက မကောင်း လှပါဘူး။ အတွင်း မှာ ကင်ဆာဝေဒနာက တော်တော်ကြီးပျံ့နေလို့ မျှော်လင့်ချက်သိပ်မရှိဘူးဆိုတာ သူ့အစ်မ မြတ် နဲ့လတ်တို့က မျက်စိမျက်နှာပျက်ပျက်နဲ့ တိုးတိုးပြောပြလိုက်ကြတာမို့ ကျွန်မနဲ့ တင့်လည်း သူတို့ကို အားသာပေးခဲ့ရတာ ကိုယ်ပါရောပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။
ပြီးတော့မှ ရှိန်းအခန်းဘက် ကူးဖြစ်ကြတော့ ခုတင်ပေါ်မျက်လုံးမှိတ် ငြိမ်သက်နေတဲ့ရှိန်းရဲ့ လက်ကိုဘေးမှာ ထိုင်နေတဲ့ ညိုမီ ကကြင်နာယုယစွာနဲ့ ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး သားလေးနှစ် ယောက်ကလည်း ခုတင် ရဲ့တစ်ဖက်ဘေးမှာ ရပ်ရင်းမျက်နှာလေးတွေကငယ်လို့။ ကျွန်မ တို့ဝင်သွားတော့ ညိုမီကအံ့အားတသင့်နဲ့ မတ်တတ် ရပ်ပြီး ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ရင်း "ဟင်.. မမ၊ မတွေ့တာကြာပြီနော်"တဲ့။ "မမတင့်နဲ့ ဆုံမိလို့ လာကြတာ လား"ဆိုပြီး ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်စလုံးကို လှမ်းပြောတော့ သူ့ဇနီးညိုမီအသံကြားလို့ထင်ပါရဲ့။ ရှိန်းရဲ့ မျက်လုံး တွေပွင့်လာပါတယ်။ သူ့ကိုယ်မှာလည်း သွင့်ထားတဲ့ပိုက်တွေ အမျိုးစုံတန်းလန်းနဲ့လေ။
လျော့ရဲရဲအသံနဲ့ "ယူကဘယ်ကကြားပြီး လာကြည့်တာလဲ"တဲ့။ ကျွန်မက သူ့ကိုလာ ကြည့်တာအတွက် အံ့သြနေ တယ် ထင်ပါရဲ့။ ကျွန်မလည်း ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေ ရှင်းပြမ နေတော့ပါဘူး။ ချော်လဲရောထိုင်ရင်း သူ့ရောဂါ အခြေအနေတွေ ကိုသာ မေးပြီး ညိုမီကို လည်းအားပေးစကား ပြောခဲ့ရတယ်ပေါ့။ ခုလိုအခြေအနေမျိုး မှာလည်း သူ့ကိုနှုတ်ဆက် စကားမဆိုချင်တာနဲ့ မကြာမတင် ကျွန်မ အမေရိကားသွားတော့မယ် ဆိုတာ ကို ပြောပြ မနေ တော့ဘဲ တင့်တင့်နဲ့ အတူ ဧည့်ချိန်ကုန်ခါနီးမှာ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါ ရှိန်းတို့ မိသားစု ကို နောက်ဆုံး အကြိမ် မြင်တွေ့ဆုံစည်းလိုက်ရခြင်းပါပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ်က ကာလီဖိုးနီး ယားကိုသွားလည်ရင်း ရှိန်းနဲ့အတူ တပ်မတော် (ရေ)မှာအမှုထမ်းခဲ့တဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း ဗိုလ်မှုးတစ်ဦးနဲ့ ဆုံမိမှ ရှိန်းကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတာ သိခဲ့ရပါတယ်။ သူ့မိသားစုကတော့ သြစတြေးလျမှာ ရောက်နေကြတယ်တဲ့။ လူဆိုတာ ကောင်းကင် မှာဖြန့်ကြဲထားတဲ့ ကြယ်ပွင့်လေးတွေလိုပါပဲ။ ကြယ်ပွင့်လေးတွေနီးတဲ့အခါ နီးသွား လိုက်၊ ဝေးတဲ့အခါ ဝေး သွားလိုက်၊ ကြွေချိန်တန်တော့လည်း ကြွေသွားလိုက်၊ ဘယ်အရာ မှမြဲခြင်းမရှိတာ ကတော့ သေချာပါရဲ့။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မရဲ့သားငယ် "အိန္ဒာ"လည်း လက်ကကျောက်ပတ်တီးဖြေရမဲ့ရက်ကို ရောက် လာပါတယ်။ သွားဖြေ လာခဲ့ပြီးလို့ ရက်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။ ခွေးကိုက်ခံရပြန်ပါရော။ အကိုက်ခံရတာတောင် နည်းသေးတယ် လို့ ပြောရမလားမသိ။ ကြိုးချည်လျက်သားနဲ့ အစာစားနေတဲ့ခွေးကို အစာခွက်သွားဆွဲတာတဲ့လေ။ အစာမန် နဲ့ခွေးကလှမ်းပြီး ဟပ်လိုက် တာပေါ့။ အိမ်နီးချင်းခွေးမို့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပြဿနာမရှိကြပေမဲ့ သွားခါနီး လာခါနီမှာ ဆေးရုံကိုပြေးပြီး ဆေးထိုးဖို့တွေလုပ်ရ၊ အဲဒီအချိန်မှာဆေးကလည်း လွယ်လွယ်ဝယ်လို့မ ရ၊ ရှိတဲ့ဆေးတွေ က ရက်လွန်တွေဖြစ်နေတာနဲ့ တူမလေးအထူးကုဆရာဝန်မလေးက "အသားနားခံပြီး ထိုး မနေနဲ့တော့ အန်တီခင်ရေ၊ ဟိုဘက်အိမ်က ခွေးလည်း ကာကွယ် ဆေးထိုးထားပြီးသားပဲ၊ ပူစရာမရှိပါဘူး" ဆိုပေးမဲ့ အဲဒီခွေး ဒီရက်ထဲဘာများဖြစ်မလဲဆိုတာ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ အကဲခတ်ကြည့်နေရပါသေးတယ်။ ကျွန်မသား ကလည်း မျောက်မူး လဲလို့ ဆိုရလောက်အောင် အငြိမ်မနေတာမျိုးလေ။
သွားရမဲ့ရက်ကလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နီးကပ်လာပါပြီ။ သွားခါနီးမှာ ပြဿာနာကတော့ ကျွန်မ အမေပါပဲ။ စစ်ကြီးအတွင်း က ရှိရှိသမျှ ပိုင်ဆိုင်သမျှတွေ မီးလောင်ဗုံးထဲပါသွားပြီး လူလုံးချည်းကျန်ခဲ့ရကတည်းက မာမီ လည်း ဘာပစ္စည်းမှ ပစ်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ အရေးကြုံရင် ဆွဲပြီးပြေးဖို့ အသင့်ရှိအောင် အထုပ်တွေဆိုတာ ထုပ်ထားလိုက်တာ အခန်းနဲ့ အပြည့်ပါပဲ။ အခုကျွန်မတို့အဖို့ အ၀တ်အစား၊ အသုံးအဆောင် အနေနဲ့ တစ်ဦး ကိုလေးဆယ့်လေးပေါင်ပဲ သယ်ယူခွင့်ရှိတဲ့အပြင် ငွေကြေးအရကလည်း တစ်ဦး ကို နိုင်ငံ တော်အစိုးရက ၇ဒေါ်လာပဲ ယူခွင့်ပြုပါတယ်။ သွားမဲ့သူက ကျွန်မနဲ့အတူ မာမီရယ်၊ သမီး သူဇာ နဲ့သားငယ် အိန္ဒာလေးယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ သူဇာနဲ့အိန္ဒာက ၁၈နှစ်အောက် ကလေး တွေဖြစ်တာမို့ ၇ဒေါ်လာအပြည့်မရပါဘူး။ သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်က သုံးဒေါ်လာခွဲစီ ရကြတာကြောင့် လေးယောက် စုစုပေါင်း မှာ ၂၁ဒေါ်လာယူခွင့်ရပါတယ်။
ယူရမဲ့ပစ္စည် ၄၄ပေါင်ဆိုတာ ဘာမှရှိတာမဟုတ်လို့ သေတ္တာတစ်လုံး အပြည့်အသိပ်ထည့် လိုက်တာနဲ့ပဲ ၄၄ပေါင်က ပြည့်သွားပါပြီ။ ဒီတော့အခန်းနဲ့အပြည့်အထုပ်တွေ ထုပ်ပြီး သိမ်းထားတဲ့ ကျွန်မအမေအဖို့ ဒီပစ္စည်း လည်း မပစ်နိုင်၊ ဟိုပစ္စည်းလည်း မထားရက်နဲ့ အထုပ်တစ်ထုပ်ဖြေလိုက်တိုင်း ကြီးစွာသော ပြဿနာနဲ့ ကြုံရတော့ တာပါပဲ။ ထွက်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကလည်း ကြည့်ပါဦး။ ကျွန်မရဲ့သားကြီး ၀င်းငယ်ငယ်က ၀တ်ဖို့မာမီ ကိုယ်တိုင် နှစ်ချောင်းထိုးနဲ့ ထိုးပေးခဲ့တဲ့ သိုးမွှေး Bootie လေးတွေ၊ ကေခိုင်တိုက၊ ကေသီတို့၊ ယမင်း တို့ ကစားခဲ့တဲ့ ဗိုလ်မ ရုပ်လေးတွေ၊ ဘယ်သောကာလက ကျွန်မကိုင်ပြီး ငြီးငွေ့လို့ ပစ်ထား ခဲ့တဲ့ ပုတီးစေ့ ပိုက်ဆံအိတ်တွေ၊ ကျွန်မနဲ့ သူ့မြေး ရှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ပစ္စည်းတွေက ရှေး ဟောင်းပြတိုက်တစ်ခု ဖွင့်ရင်တောင် လုံလောက်အောင် ရနိုင်မယ် ထင်ပါရဲ့။
နောက်ပြီး အထုပ်လိုက် အထုပ်လိုက် တန်းစီထားတဲ့ ဂျပန်ငွေစက္ကူတွေ၊ စစ်ပြီးစ သုံးခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်ငွေစက္ကူတွေ၊ ရာတန်တွေလဲဖို့ ကြေညာခဲ့စဉ်က မလဲဘဲ ပစ်ထားခဲ့တဲ့ လွတ်လပ် ရေးနောက်ပိုင်း ထုတ်တဲ့ ရာတန် စက္ကူပုံစံအမျိုးစုံတွေ၊ ဘယ်လောက်ပဲ အစိုးရတွေ ပြောင်း ပြောင်းထုတ်ဝေတဲ့ ငွေစက္ကူတွေ ရောင်စုံပုံစံ အမျိုးမျိုး နဲ့ဖြစ်နေနေ၊ မာမီ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ ဒါတွေဟာ တန်ဖိုးရှိစာရင်းဝင် ဖြစ်နေဆဲပဲဆိုတော့ သူပိုင်ငွေကြေးတွေ မထားခဲ့နိုင်ပါ ဘူး ဖြစ်ပါလေရော။
အမေရိကားသွားဖို့ စဉ်းစားပြင်ဆင်ခဲ့တုန်းက ဒီလောက် ခေါင်းခဲရမဲ့ကိစ္စကို ရင်ဆိုင်ရလိမ့် မယ်လို့ ထည့် မထွက်ခဲ့မိတာတော့ ကျွန်မရဲ့ မဟာအမှားပါပဲ။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ အထုပ် ဖြေရတာနဲ့ပဲ သားအမိချင်း အချေအတင်ပြောရ ဆိုရ၊ အမေ စိတ်ဆင်းရဲမှာစိုးလို့ အဆင် မပြေပေမဲ့ ကိုယ့်ဘက်က အလျော့ပေးပြီး လိုက်လိုက်လျောလျော လုပ်ပေးရ၊ ပြဿနာက တော့စုံလေတယ်ဆိုတဲ့ အထဲကပါပဲ။ ယူခွင့်ပြုတဲ့ ၄၄ပေါင်က ပိုနေလို့ ကျွန်မတို့နဲ့အတူ မငယ်နိုင်တာတွေကို ကျန်ခဲ့ရစ်ဦးမဲ့ ဦးကျော်ဇောရဲ့လက်ကို အပ်ခဲ့ပြီး တဖြည်းဖြည်း အချိန် ယူရင်းစာတိုက်က ပို့လို့ရသလောက်ပို့ဖို့လည်း စီစဉ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့။ အခြေတစ်ခုဖြစ်ဖို့ ခဲယဉ်သလိုပဲ အခြေတစ်ခု ဖျက်ရတာကလည်း စိတ်ရောလူပါ ပင်ပန်းစရာကောင်းလှပါ တယ်။
ကျွန်မ တို့ နေခဲ့တဲ့ ၄၉လမ်းထောင့်က အကွက်အကွင်းလည်းကျတာမို့ သွားတော့မဲ့သ တင်းဖြစ်နေကတည်းက အခန်းကို လက်လွှဲရောင်းခဲ့ပါဆိုပြီး လိုချင်သူမိတ်ဆွေတွေထဲက ဈေးကောင်းလာပေးကြပါတယ်။ မက်မောလောက် တဲ့ ငွေဖြစ်ပေမဲ့ အားလုံးကို ငြင်းဆို လိုက်ပါတယ်။ ၁၃နှစ်တာ အိမ်ရှင်များရဲ့ အဆောက်အအုံ အရိပ်အာဝါသ ကို ခံယူခဲ့ရတဲ့ ကျေးဇူးတရားဆိုတာ နည်းလေတာမှ မဟုတ်ဘဲ။ သစ်ပင်အရိပ်ကို ခဏလေး ခိုမိရင် တောင် အဲဒီသစ်ပင်ရဲ့ ကျေးဇူးတရားကိုသိပြီး သစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းမှ မချိုးဖဲ့ကောင်းဘူးလို့ ဆိုထားတာ ပဲနော်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်မမှာ ကလေးတစ်ပြုံတစ်မနဲ့ ဒုက္ခရောက်စဉ်ကာလ က ကရုဏာ နဲ့ စပေါ်တစ်ပြားမှ မယူဘဲ အိမ်လခ ကိုလျှော့ပေးပြီး ငှားခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးတရားတွေ ကတစ်သက်တာ မေ့နိုင်စရာ မရှိပါဘူး။
ကျေးဇူးဆိုတာ မဆပ်နိုင်ရင်သာရှိရမယ်။ ကျေးဇူးကို မသိသူအဖြစ်နဲ့ ကျေးဇူးတော့မကန်း သင့်ပေဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့် အိမ်ရှင် ဒေါ်ခင်မေတင့် တို့ကို ပြန်အပ်ချိန်မှာ ကျွန်မတို့အခန်း တွေဖွဲ့ပြုပြင်ထားတဲ့ ကုန်ကျခဲ့ တဲ့ ငွေကြေးတွေ ကိုတောင် စာရင်းမတင်ဘဲ စီးပွားရေးလုပ် ငန်းအတွက် ရထားတဲ့ ပါဝါမီတာ ကအစ ပေးခဲ့တာ မို့ သူတို့ကလည်း တစ်ပြန် ကျွန်မကို ကျေးဇူးတွေတင်လို့။ မေတ္တာဆိုတာ ကိုယ်က ခံယူခွင့်ရခဲ့သလို၊ အတုံ့အလှည့် ပြန်ပြီးပေး နိုင်မှလည်း ပြည့်စုံတယ်လို့ ဆိုရမယ်ထင်ပါရဲ့။
အဲဒီလို အပြောင်းအလဲများစွာတွေကို ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ မန္တလေးမှာ နေစဉ်စစ်အ တွင်းကတည်းက ရင်းနှီးခင်မင် တဲ့ မိတ်ဆွေရင်း အမျိုးသမီးတစ်ဦးက သူလည်းအမေရိကား သွားချင်တယ်လို့ အကူအညီတောင်း လာတာနဲ့ လုပ်ရတဲ့အစဉ်အလာတွေ ပြောပြ၊ ကိုယ် တိုင်လည်းသံရုံးခေါ်သွားပြီး တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ နဲ့ တွေ့ပေးပြီး လိုအပ်တာတွေ ကူညီပေး လိုက်တယ်ပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ အမေရိကားသွားတာလည်း သိပ်ခက်ခက်ခဲခဲကိစ္စကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ သတ်မှတ်ထားချက်တွေနဲ့ ဘောင်ဝင်ရင် သွားခွင့် အလွယ်တကူ ရတာပါပဲ။ သူကျွန်မထက်အသက်ဆယ်နှစ်လောက် ကြီးပါတယ်။ ဟိုမှာလည်း လူခံတစ်ယောက်မှ ရှိတာမဟုတ် လို့ အကယ်၍တခြားမှာ အလုပ်မရရင်တောင် ကျွန်မတို့နဲ့ အတူနေရင် လည်းဖြစ်တာမို့ မာမီ အတွက်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မယ့် အဖော်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လေမယ် ဆိုတဲ့ အားကိုးစိတ် လည်း သူ့အပေါ်မှာ ထားရှိခဲ့တာ အမှန်ပါ။
သူ့အတွက် စာရွက်စာတမ်းတင်တာလည်း ကြာဦးမှာအပြင် ကျွန်မအမေရိကားရောက်ပြီး မှအာမခံတဲ့ စပွန်ဆာ ပို့ရမှာ ဖြစ်တော့ဦးကျော်ဇောထွက်လာနိုင်မဲ့အချိန်နဲ့ အံကိုက်ကျရင် လည်းအဖော်ရ၊ အဆင်ပြေမယ် လို့လည်း တွေးမိတယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့် တစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့မယ်ဦးကျော်ဇောရဲ့ စားရေးသောက်ရေး အဆင်ပြေအောင် သုံးလေးရက်တစ်ခါ စားစရာဟင်းလေး ချက်ပြီး စောင့်ရှောက်ပေးဖို့လည်း မှာထားခဲ့ရသေး တယ်။ နှစ်ဦးနှစ် ဖက်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ သူ့ကိုစားရေး သောက်ရေးအကူ အညီပေး ဖို့ မှာရသလို ဦးကျော်ဇောကိုလည်း ကျွန်မရဲ့ မိတ်ဆွေ ဗီဇာရပြီးရင် လေယာဉ် လက်မှတ်က အစ ငွေကြေးလိုအပ်ခဲ့ရင်လည်း ထုတ်ပြီး ကူညီပေးဖို့ ပြောရမှာရ။
ရှေ့ခြေတစ်လှမ်း မချခင်မှာ နောက်တစ်လှမ်းအတွက်လည်း စဉ်းစားရပါသေးတယ်။ အရာ ခပ်သိမ်းက ကိုယ်လို သလိုဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်လာနိုင်တာမို့ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ယုံကြည်ထားပြီး တံတားမချိုး၊ ဖေင်မဖျက်ရဲပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကုန်ဈေးတန်းက အခန်းကိုဓာတ်ပုံဆိုင် ပိတ်ပြီးတာနဲ့ ကျွန်မတို့ မိတ်ဆွေရင်းလက်ဖက်ခြောက်လုပ်ငန်း ပိုင်ရှင်တစ်ဦးနဲ့စပ်တူ အရောင်းဆိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်။ ရရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ်ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းထားစေပြီး ပြန် လာမှ စာရင်းရှင်လက်ခံယူကြမယ်ပေါ့။ နေရာလေးတစ်ခုတော့ ဆယ်ရေးတစ်ရေးအဖြစ် ချန်ထားခဲ့ဥိးမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
မသွားခင်မှာ လုပ်ရမဲ့ကိစ္စတွေကလည်း တန်းစီနေတော့ မဆုံးနိုင်အောင်ပါပဲ။ ရင်ထဲမှာ တစ်တန်လောက် ရှိတဲ့ ကျောက်တုံးကြီးတစ်ခု ဆွဲထားသလို လေးလံနေတဲ့ ခံစားမှုတစ်ခု ကတော့သားလေး ကိုဇာနည် ကို မောင်နှမအားလုံးနဲ့ ခွဲပြီးတစ်ယောက်တည်း ထားခဲ့ရမဲ့အ ဖြစ်ပါပဲ။ ရင်သွေးအားလုံး ကို ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးမြလှိုင် ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲက ဆွဲထုတ်ခေါ်ယူသွားရတာ အတွက်လည်း ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုက မမျှတ သလိုဖြစ်နေပြန် ပါတယ်။ မျှတချင်လို့ ထားခဲ့ပြန်တော့လည်း မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ကျန်ခဲ့မဲ့သားကို သနားလို့မဆုံး၊ ရင်နာလို့ မဆုံး ခံစားရပြန်ရော။
ကျွန်မတို့ ထွက်မဲအချိန်မှာ သားကရှစ်တန်းစာမေးပွဲ ဖြေရခါနီးဆဲဆဲမို့ နောက်ထပ်နှစ် နှစ်တော့ကြိုးစားပြီး ဆယ်တန်းအောင်အောင်ဖြေပါ။ ဆယ်တန်းဖြေပြီးတာနဲ့ ဖေဖေ့ကိုခွင့် တောင်းပြီးလိုက်ခဲ့ဖို့ မာမီစီစဉ်မယ် ဆိုတာ ကိုလည်း သား အားမငယ်ရအောင် အခါခါပြောရ ပါတယ်။ သားတင်မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒေါ်အေးမြင့်ကလည်း သားအရင်း တစ်ယောက်လို ကိုဇာနည်ကိုချစ်တာမို့ သားနဲ့ခွဲပြီး သူ့ကိုလည်းမထားခဲ့ရက်လို့ သား လာတဲ့ခါ ဒေါ်အေး မြင့်ပါ တစ်ခါတည်း ဆန္ဒရှိရင်အတူလိုက်လာလို့ရအောင် ဗီဇာရနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်မထက် မလာခင် မှာ အပြီးစီစဉ်ပြီး ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။
သွားရခါနီးပြီ ဆိုတော့ ရပ်ဝေးကလာနှုတ်ဆက်သူတွေနဲ့ ကျွန်မရဲ့အိမ်မှာလည်း ဧည့်သည် ကအပြည့်။ မန္တလေး က သူငယ်ချင်းလှလှမြင့်အပြင် လှလှမြင့်နွဲှ့တူ ဆင်းလာတဲ့ကျွန်မရဲ့ မွေးစားသမီး အေးကြည်မနဲ့ သမီးလွင်လွင်၊ လားရှိုးကုန်သွယ်ရေး က ညီမငယ်တစ် ယောက်လို ချစ်ရတဲ့လှလှ၊ တောင်တွင်းကြီးက ရောက်လာတဲ့ အန်တီလေး ခင်ခင်လှ အားလုံးက ရောက်လာတယ်ဆိုတာနဲ့ ကျွန်မကိုဖက်ပြီးငိုကြယိုကြ။ ဒီအထဲမှာ အဆိုးဆုံး ကတော့ကျွန်မ ရဲ့တပည့်ဟောင်းမြင့်မြင့် (အမျိုးသမီး ရုပ်၇ှင်လူရွှင်တော် မရွှေလုံး)ပါပဲ။ ဖြစ်ပျက်နေပုံက အသုဘအိမ် အတိုင်း "အံမယ်လေး မမရဲ့၊ မြင့်မြင့်တို့ကို ထားသွားတော့ မှာလား"နဲ့ ခုနစ်အိမ်ကြား၊ ရှစ်အိမ်ကြားအော်အော်ပြီး ငိုရင်း ကလည်း အဲဒီလို အဖွဲ့အနွဲ့ တွေနဲ့လုပ်နေတာလေ။
ဒီဟာမလေး ကလည်း ယုံရတာမဟုတ်လို့ ရှပ်ရှင်ထဲမှာလို အကယ်ဒမီရှော့တွေများလား ဆိုပြီးသူ့ကို အကဲခတ်ကြည့်တော့ လည်း မဟုတ်ရှာပါဘူး။ တကယ်ကို မစားနိုင်မသောက် နိုင်မျက်နှာကြီးတစ်ခုလုံး နီရဲရောင်အမ်းနေအောင် ကို ရှိုက်ကြီးတငင်နဲ့တစ်နေ့လုံး ထိုင်ငို နေရှာတာပါ။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ သူတကာ အူနှိပ်ရယ်မောအောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတဲ့ လူရွှင် တော်ဖြစ်ပေမယ့် သူ့ဘ၀မလှရှာပါဘူး။ မိမရှိ၊ ဖမရှိ၊ အဒေါ် တစ်ယောက်အားကိုးနဲ့ လူဖြစ် လာရပြီး ကျွန်မဆီ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်လောက်ကတည်းက နားဆွဲကလေး တခါခါ နဲ့ရောက်လာခဲ့တာမို့ လက်သင်တပည့်ရင်း ဆိုပေမဲ့ သားသမီးတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတာပါပဲ။
အိမ်ထောင်ကျတော့လည်း အင်အတန့် အင်မတန်ကို ရိုးသားအေးဆေးတဲ့ သူငယ်လေးနဲ့ ကျတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကံအကြောင်း က မလှတော့ သူငယ်လေး က နောက်မိန်းမယူ၊ အဲဒီ မိန်းကလေးက မွေးတဲ့သားလေးကို သူက သားရင်း တမျှ ချစ်ပြီး သွားလေရာကျောတပိုးပိုး နဲ့ခေါ်သွားပြီး ထိန်းကျောင်းတောင် ပေးသေးတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဝေမျှရတဲ့ အချစ်ကိုတော့ ဘယ်မိန်းမသားရဲ့ နှလုံးသားမျိုးမှ ခံနိုင်ရည်မရှိနိုင်တာကြောင့် "ရွှေလုံး"ဆိုတဲ့ နာမည်ဟိုး ဟိုးကျော် လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်လို့ သူ့ကိုတွေ့တဲ့လူတိုင်းက ရယ်မောကြပေမဲ့ သူ့ခမျာ ကျွန်မရင်ခွင် မှာလာပြီး ရိင်ကြီးတငင် ငိုယိုရင်းရင်ဖွင့်ရတာက ခါများစွာရှိပါတယ်။ လူသားတိုင်းမှာ ဇာတ်လမ်း ကိုယ်စီ ရှိကြတာပါပဲ။ လူအများအမြင်မှာ ကရတဲ့ဇာတ်ရုပ်က တစ်မျိုး၊ တကယ့်လက်တွေ့မှာ ကရတာက တစ်ဖုံ၊ တစ်ခါတစ်လေ မယုံနိုင်စရာဖြစ်အောင် ကွဲပြားခြားနားတာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်မ တို့ မြန်မာလူမျိုးများက ဂုဏ်သိက္ခာကို အလေးထားသူများဖြစ်လို့ အိမ်တွင်းငရဲခန်းတွေ ကို ပြည်ဖုံးကားချထား လို့ မသိနိုင်တာတွေ အများကြီးပါပဲ။
ကျွန်မအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ငရဲခန်းတွေကို သိထားပြီးသားဖြစ်တော့ ထားခဲ့ရမှာကို စိတ်မဖြောင့် နိုင်ဘဲ ရင်မှာထပ်တူ ခံစားမှုနဲ့ ပူလောင်ဆင်းရဲခြင်းကို ခံရပါတယ်။ သူ့ခင်ပွန်းကို သီးခြား ခေါ်ယူပြီး စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားခဲ့ဖို့လည်း မှာခဲ့ရသေးတယ်။ ပစ်တိုင်းထောာင် ကြိုး ရှုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပါပဲ။ တစ်ဦးတည်း သမီး၊ တစ်ကိုယ်တည်းမွေးထားပါလျက်နဲ့ ကျွန်မက ချစ်တတ် ခင်တတ်၊ လူတကာကိုတွယ်တာတတ်တော့ သံယောဇဉ်ကြိုးတွေနဲ့ ရစ်ထွေးပြီးကိုယ်လျှောက်ရမဲ့ခရီးကို ခြေလှမ်းဖို့တောင် အတော်ခက်ခဲနေပါတော့တယ်။ သူငယ်ချင်း လှလှမြင့်ဆိုရင်လည်း ငယ်ကတည်းက တတွဲတွဲနေလာခဲ့တာ တစ်ယောက် အကြောင်း၇ှိရင် တစ်ယောက် ကပြေးကူကြမြဲဖြစ်လို့ အခုလိုခွဲခွာသွားမှာအတွက် သူအား ငယ်သလို ကျွန်မလည်းအားငယ်မိတာ အမှန်ပါ။ ဖက်ငိုကြရင်း"စာရေးနော်"ဆိုတာလည်း မြင့်ကအခါတစ်ရာမက မှာကြားနေပါတယ်။
လှလှဆိုတာလည်း ကျွန်မကို အစ်မရင်းတစ်ယောက်လို ချစ်တဲ့သူဖြစ်လို့လည်း သူလည်း မျက်ရည်လည်ရွဲပါပဲ။ ကျွန်မရဲ့ အဒေါ် ခင်ခင်လှက လာမဲ့သာလာရတာ မျက်စိမမြင်ရှာပါ ဘူး။ အဲဒီအကြောင်းကို စဉ်းစားမိတိုင်း ကျွန်မရင်မှာ နာကျင်ရမြဲပါပဲ။ အန်တီလေးက ကျွန် မလိုပဲသွက်သွက်လက်လက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အမြဲတမ်း လှုပ်လှုပ်ရှားရှား နေတတ်သူဖြစ် လို့အပေါင်းအသင်း လူချစ်လူခင်လည်း များပြီးမိသားစုကိုလည်း ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ပါ တယ်။ အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် လေးဆယ်ဝန်းကျင်လောက်မှာ မျက်စိတစ်ဖက် ကွယ် သွားပါလေရော။ သူ့မှာ ရေတိမ်၇ှိတယ်ဆိုတာ မသိလိုက်ခင်မှာပဲ မမြင်ရတော့ တာပါ။ ရေတိမ် လို့လက္ခဏာပြတဲ့ခါမှပြတာ။ တချို့ကံကောင်းသူများတော့ အပြင်းအထန်ခေါင်း ကိုက်တာတွေ ဘာတွေဖြစ်လာ လို့ အချိန်မီ ကုသခွင့်ရရင်တော့ အဆင်ပြေသွားနိုင်တယ် ပေါ့။ အများအားဖြင့်က လက္ခဏာကမမြဘဲ ကွယ်သွားတတ်တာ ဖြစ်တော့ကြိုတင်ကာ ကွယ်မှုမရလိုက်ဘဲ မျက်စိဆုံးရှုံးလိုက်ရသူတွေ များပါတယ်။
နောက်ပြီး ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးကလည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသိတရား နည်းပါ တယ်။ နှစ်စဉ် ကျမ်းမာရေး ဆေးစစ်တယ်ဆိုတာလည်း လုပ်လေ့လုပ်ထမရှိကြဘူး လေ။ တစခုခုဖြစ်ပြီဆိုခါမှ ဆ၇ာဝန် သွားပြဖြစ်တာမျိုးပါ။ ဒီတော့ တချို့ရောဂါတွေကလွန် နေပြီးအပ်နဲ့ ပေါက်ရမဲ့ကိစ္စ ပုဆိန်နဲ့မှရတဲ့ အထိ ဖြစ်တော့ တာပေါ့။ ပုဆိန်နဲ့ပေါက်မရ အောင်အချန်မှောင်းတော့လည်း ဘ၀ပျက်ရတဲ့ထိ ဆုံးရှုံးမှုတွေ ရင်ဆိုင် ရတော့တာပဲ။ ကျွန်မရဲ့အဒေါ်အဖြစ်ကတော့ အသိတရားမဲ့စွာနဲ့ အယူသီးမှုကြောင့် ရေတိမ်မှာနစ်ရခြင်း ပါ။
အန်တီလေး မျက်စိတစ်ဖက် ကွယ်သွားတယ်လို့ကြားကြားချင်း ကျွန်မစိတ်ပူစွာနဲ့ ရန်ကုန် ဆင်းခဲ့ဖို့ မှာလိုက်တာ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ ရောက်လာပါရဲ့။ ကျွန်မတို့နဲ့ ရင်းနှီးခင်မင်တဲ့ မျက်စိသမားတော်ကြီး ဦးကိုကိုကြီး နဲ့ သွားပြပါတယ်။ ဆရာကရေတိမ်ကြောင့်ဖြစ်တာ၊ တစ်ဖက်ကျန်တဲ့ မျက်လုံးကို ကူးမှာစိုးရလို့ ခွဲ ရမယ် တဲ့။ ဆေးရုံတက်ဖို့ ရင်ချိန်းတောင် တစ်ခါတည်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တာ နဲ့ ဆေးရုံမတက်ခင် တောင်တွင်းကြီး ကိုခဏပြန်လိုက်ဦးမယ်၊ စီးပွားရေးတွေ စီစဉ်စရာ ရှိသေးတယ် ဆိုပြီး ပြန်သွား ပါလေရော။
ဆေးရုံတက်ရမဲ့ရက်မှာ လူက မရောက်လာဘဲစာပဲ ရောက်လာပါတယ်။ ဗေဒင်မေး ကြည့်တော့ နဂါးလှည့် မသင့်သေးတာကြောင့် မသွားသင့်ဘူးဆိုလို့ နဂါးလှည့်ရက်လွန်မှ ပဲလာခဲ့မယ်တဲ့လေ။ သူစိုးထိတ်တဲ့ နဂါးကြီး ဟိုဘက်လှည့်ပြီးမှ ရောက်လာတော့ ရက်တွေ လွန်၊ ရောဂါကကျွမ်းပြီး ခွဲစိတ်ကုသလို့မရတော့ဘဲ မျက်စိနှစ်လုံး စလုံး ကွယ်ပါလေရော။ ဆရာဦးကိုကိုကြီးဆိုတာ ရင်းနှီးလည်းနေတာနဲ့ အပြစ်တင်လို့မဆုံးဘူး။ ပညာတတ်တွေ ဖြစ် ပါရဲ့ ဒီလောက်အယူသီးရသလားဆိုပြီး ဆူတော့တာပေါ့။ ကျွန်မအတွက်တော့ ရင်နာ စွာနဲ့ရလိုက် တဲ့ သင်ခန်းစာတစ်ခုပါပဲ။ ဒါကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမိတဲ့ ရင်းနှီးချစ်ခင်သူမှန် သမျှကိုအယူမသီးဖို့ ကျန်းမာရေး အတွက် မှန်မှန်နှစ်စဉ် စစ်ဆေးဖို့ သတိပေးမိပါတယ်။
အခုလည်း အစ်မနဲ့တူမကို ခွဲခွာရတော့မှာကြောင့် မျက်စိမမြင်ဘဲနဲ့ ကြိုးစားပြီးရောက်လာ ရရှာတာပါ။ ရပ်ဝေး က လူရောက်လာသလို ရပ်နီးက ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေ အားလုံးလည်း လာပြီးနှုတ်ဆက်စကားဆိုကြ၊ လက်ဆောင် ပစ္စည်းတွေ ပေးကြနဲ့ ကျွန်မက မျက်ရည် လွယ်သူခံစားထိရှလွယ်သူ ဖြစ်တော့ တစ်ယောက်လာ တစ်ခါငိုနဲ့ မျက်လုံးတွေလည်း အစ်ပြီး ဖူးရောင်နေတဲ့ထိ အမြင်ရဆိုးလို့ပေါ့။ မအိပ်နိုင်တဲ့ ရက်ပေါင်းလည်းကြာ၊ ရင်မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေကများလို့ ခန္ဓာကိုယ်ပါ အားအင်မရှိ ပျော့်ခွေလာပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ တကယ်ထွက်ခွာလာရတော့မဲ့ ၁၉၇၇ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ရက်နေ့ကို ရောက် လာပါရော။ အမှန်က ၂၄ရက်နေ့မှာ ထွက်ဖို့သေချာပြီးမှ လေယာဉ်မ၀င်တာနဲ့ ၂၅ရက် နေ့ကိုပြောင်းလိုက်ရတာမို့ ဦးကျော်ဇောလည်း ကျွန်မတို့မိသားစု လေးယောက်စာ ဒီလေ ယာဉ်မှာ နေရာရဖို့ ပြေးလွှားပြီး စီစဉ်နေရ တာပေါ့။ လေဆိပ်မှာလိုက်ပို့တဲ့သူတွေအားလုံး လည်းမျက်နှာတွေညိုလို့။ ကျွန်မရဲ့အစ်ကို ဦးခင်မောင်မောင် တို့ မိသားစုနဲ့ ဆွေမျိုးတွေ ရော၊ အိမ်က ဘယ်မှဝေးဝေးလံလံ မထွက်တဲ့ ဦးမြလှိုင်ရဲ့ အဒေါ် ဒေါ်ဒေါ်လေးနဲ့ မမတင်၊ မမသန်းတို့လည်းပါရဲ့။ ဒေါ်ဒေါ်လေးကပါ မျက်ရည်တွေ သွယ်သွယ်ကျ လို့ သွားခါနီး သားလေးဇာနည်ကို ကျွန်မရဲ့ကိုယ်စားစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ ရင်နာစွာနဲ့အပ်ခဲ့ရပါတယ်။ မျက်နှာလေးငယ်နေတဲ့ သားကိုကျွန်မမကြည့်ရက်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်သူ၊ ကိုယ်ကလည်း တကယ်ထပ်တူထပ်မျှ ချစ်ရတဲ့သူချင်းမိတ်ဆွေ၊ ဆွေမျိုးတစ်စုနဲ့ ရင်မှဖြစ် ရသောသားငယ်လေးကို ကျောခိုင်းပြီး ထွက်ခွာသွးခဲ့ရတဲ့ ကျွန်မရဲ့ရင်မှာ ပြင်းထန်တဲ့ မီးတောင်တစ်ခု ပေါက်ကွဲမှုကြီးအတိုင်း တစ်စစီ အရည်ပျော်သွားရပါတယ်။
ဒီခရီးဟာ တစ်ဖက်မှာ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ သားသမီးတွေအတွက် ၀မ်းသာအားတက်စရာ ဖြစ်ပေမဲ့ အဖေ့ လက်မှာ ကျန်ခဲ့ရစ်ရတဲ့ သားလေးအတွက် ၀မ်းနည်းအားငယ်စရာအဖြစ်ပါ ပဲ။ ကျွန်မဘ၀က ဆုပ်ကိုင်ရခြင်း နဲ့ စွန့်လွှတ်ရခြင်းတွေနဲ့မို့ ဆူးနဲ့နှင်းဆီလို အမြဲတမ်း ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ချည်းပါပဲလေ။
Posted by SHWE ZIN U at 9:57 PM 1 comments Links to this post